13 FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector Cover nose edge trim cover panel slip ladder fiber glass *** New Product! – ตะแกรงไฟเบอร์กลาส-ฝาบ่อเหล็กฝาท่อ
FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector : FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส
FRP Gritted Sheet Plate / Stair Tread Nosing Step Cover Quotation
FRP Stair Tread Specification | คุณสมบัติของแผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส
แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส แผ่นปิดผิวปูพื้นกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส / FRP Gritted Sheeting Plate – Stair Tread Nosing Step Cover
1. FRP Stair Tread Nosing Step Cover Protector (แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันได) : ใช้สำหรับปิดคลุมแผ่นขั้นบันได ช่วยป้องกันการลื่นไถลหกล้ม เสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นที่ให้แข็งแรงปลอดภัยสวยงาม Standard Length4Meters (Cut to any size สั่งตัดขนาดที่ต้องการตามความกว้างยาวของขั้นบันได เช่น 50cm, 70cm. or 100cm. or ..)
2. FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting (แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส ): standard size 1.4 x 4.0 M. (Cut to any size ie. สั่งตัดได้ตามขนาดพื้นที่ที่ต้องการกันลื่น ทางเดิน หน้าแท่นวางเครื่องจักร พื้นผิวที่มีความมันเงาหรือบริเวณที่เปียกชื้น ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นห้องน้ำเป็นสถานที่ที่ต้องเปียกน้ำอยู่เสมอๆ ต้านเชื้อราและแบคทีเรีย เช่น ตัดเป็นขนาด 25x140cm, 50x140cm. or 100x140cm.
3. Sand Coated Surface: ผิวเคลือบเม็ดทรายละเอียดป้องกันการกันลื่นไถลหกล้ม anti-slip ผิวไม่ลื่นแม้เปียกน้ำหรือน้ำมัน ตลอดอายุการใช้งาน
4. Standard Color: Grey and Yellow or special color order (สีเทาจมูกเหลืองเป็นสีมาตรฐาน) สีอื่นๆสามารถสั่งทำได้โดยมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โปรดสอบถามเพิ่มเติม
5. Cut to any size (Tailor made): สามารถสั่งตัดได้ทุกขนาด เพื่อให้เข้ากับขนาดของพื้นที่ หรือขั้นบันไดเดิมที่มีอยู่
6. Easy to Installation and good look: ติดตั้งง่าย น้ำหนักเบา ใช้สำหรับปิดคลุมแผ่นขั้นบันได ช่วยป้องกันการลื่นไถลหกล้ม เสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นบันได้ให้สวยงาม
7. Corrosion Chimical Resistance: ไม่เป็นสนิมผุกร่อนตลอดอายุการใช้งาน ทนสารเคมี และความร้อนได้ดีมาก ทนต่อสารทำละลาย เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง กรด ได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้งานในสภาวะที่ต้องการความทนทานสูง
How to installation FRP Stair Tread Abrasive Nosing Step Cover
SlipGrip Sprint Flexible Flat Sheet Flooring Fixing methods
a) Sealant/adhesive in combination with pan head self-tapping screws when fixing from above
b) Pan head bolt in combination with our Nosing M Clip for when fixing from above and below on FRP Grating
GRP Anti-Slip flooring (GritPlate)
has been used in industrial and commercial environments for some considerable time. It provides an excellent safeguard against the potential for slips leading to accidents, injury and often compensation claims. This GritPlate is virtually indestructible / shatter-proof and will withstand severe climatic variables. It can be used anywhere there isapotential slip hazard.
Stairway width is the horizontal width of the stair opening. For stairs enclosed byawall on both sides, usually the stairway width is the distance between those walls. Stair tread width is the horizontal left to right width of the stair tread. Notice that the minimum stair treads thickness is increased when the stair tread is not supported byasolid riser.
Application of FRP Gritted Plate / Fiberglass Reinforced Plastic Anti-Slip Sheeting แผ่นปูพื้นปิดผิวกันลื่นไฟเบอร์กล๊าส ทดแทนเทปปิดผิว แผ่นยาง พรม บล็อคปูพื้น กันลื่น
Anti-Slip Flat Sheets are prefabricated fibreglass panels that provide an instant non-slip surface toavariety of substrate. Anti-Slip Flat Sheets are ideal for installation on walkways, ramps, gangways, factory floors and many DIY applications. They offer extreme slip resistance and can also be installed ontoavariety of substrates including traditional steel checker plate, which are notoriously slippery when wet. Anti-Slip Flat Sheet are manufactured from FRP (fibre reinforced plastic) / GRP (glass-fibre reinforced plastic) to provide an extremely tough and durable product. These types of products have been used in the most testing environments. Anti-Slip Flat Sheet is the ultimate choice for dealing with potential slip hazards. The finished system providesahigh slip resistance in wet or oily conditions.
Features and Benefits of No Skidding Anti-Slip FRP Step Covers and Treads:
1) Durable FRP base that resists warping, stretching and swelling.
2) Resistant to salt and salt water.
3) Superior gritted anti-slip surface available in coarse, medium and fine textures.
4) Quick and easy installation in all weather conditions.
5) Can be walked on immediately with minimal lost time and work stoppages
6) Suitable for concrete, wood, brick, stone and metal interior and exterior applications.
7) Easy to install – can be screwed into place or glued into place withaurethane / polyurethane adhesive.
8) Can be installed onto grating using our grating clip kit.
9) Can be installed even in winter months using screws.
10) Available in easy to install treads and panels.
11) Available in black or yellow and also black with yellow safety stripe for our flat plates and step covers.
12) Our anti-slip step covers, plates, treads and walkway panels provide slip-resistance and durability on surfaces such as inclines, ramps, and stairs.
13) Lightweight and ideal for use on structurally sound flooring and steps. <
Fiberglass Grating Structural stair treads Pultruded profiles ladders solid plate stair tread covers nosings hand railings fittings deck Covered Grating FLANGES cable trays FRP transparent grating hand-lay-up products Trench & duct covers Special grating Grating clips FRP molded grating FRP/GRP walkways anti-slip A slick and moist floor isasignificant hazard. Some surfaces like tile and laminate are prone to becoming extremely slippery when moist. Accidents that occur asaresult ofamisplaced foot can be embarrassing, painful, and very costly. It is alwaysagood idea to have anti-slip floor mats set in place, especially in an area prone to wet conditions. Rubber-Cal’s line of safety flooring mats is an ideal and affordable solution to safeguarding your area from the dangers of moisture while making sure that you and your guests are secure on your feet. A huge part of this safety lies in the rubber material used to make our anti-skid flooring. It enhances traction and inhibits moisture at the same time. Every type of floor, whether it is residential, commercial, or industrial, can benefit from the presence of rubber traction mats. The primary feature about anti-slip floor mats is that they increase the safety of wet areas. Business owners take an interest in rubber non-slip mats because of this reason. Some commercial venues like restaurant kitchens are hazardous areas that see lots of loose liquids getting onto their existing floors. Without any safety flooring in place, the risk of workers slipping and injuring themselves is far greater. In addition to kitchen areas, these mats are ideal to place at entryways when there are wet weather conditions. With rubber anti-slip floor mats placed in such areas, people will experience more security while on their feet. This safety is provided in large part thanks to the rubber material that is used in our traction mats.
It is no secret that stairs are potentially hazardous. No matter what the setting, whether it is residential, commercial, or even industrial,aset of stairs can sometimes be the cause of nasty accidents whenever people lose their footing. That is why it is alwaysagreat idea to have rubber stair treads in place on the steps. Non-slip stair treads can turn hard surfaces into comfortable and safe surfaces. Consumer Product Safety Commission estimated that 1 million stair-related accidents occur per year. A recent study by the National Safety Council reported that about 12,000 people on average are deceased every year afterafall from one level to another orafall on the same level. The elderly are especially vulnerable to falls. Our various anti-slip treads are designed to minimize the risks of such accidents occurring. The Law of Gravity tells us that it is more hazardous to descendastairway than to ascend it. Although accidents may occur going up the stairs, there isagreater chance of falling while going down the stairs. The primary function of rubber stair covering is to improve safety. Rubber isamaterial that comes withahigh coefficient of friction. This quality makes it the perfect material to use for stair mats because the rubber will provide more grip and traction for the feet on top of the mats. Anti-slip treads greatly reduce the risk ofaslip and fall accident from occurring on your staircase.
#เกรตติ้งตะแกรงเหล็กไฟเบอร์กล๊าสพลาสติกระบายน้ำล้นรอบขอบสระว่ายน้ำสำเร็จรูป, #ฝาปิดบ่อพักเหล็กหล่อครอบท่อระบายน้ำทิ้ง, #FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING, #Ductile-Cast-Iron MANHOLE COVER, #Swimming Overflow Drainage Gully Gutter Grating, #Saddle Clip Clamp Lock Fastener, #ตัวอุปกรณ์คลิปล็อคยึดแผ่นตะแกรง, #Curbed Drainage Grating Scupper, #ตะแกรงดักขยะใบไม้ในคันหินด้านข้างริมฟุตบาท, #Egg Crate Grille Diffuser Divider Lighting Aquarium Panel #แผงระแนงบังตาหน้ากากตึกตะแกรงกั้นช่องแสงบังไฟตกแต่งตู้ปลา, #Stair Tread Nosing Step Cover Protector #แผ่นปิดจมูกขอบมุมคิ้วแผงครอบบันไดกันลื่น, #Tree Guard Safety Grating Frame #กรอบตะแกรงปกป้องรอบโคนต้นไม้, #Perforated Pegboard Hook Shelves Racking Storage Tools DIY Kit, #แผ่นกระดานเพ็กบอร์ดแผงเหล็กเจาะรูติดผนังฮุกตะขอลวดขาแขวน, แผ่นปูพื้นทางเดินยกระดับ
แผ่นครอบบันไดไฟเบอร์กลาส frp stair tread nosing cover เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับบันไดในการเพิ่มความทนทาน และกันลื่น โดยผิวหน้าของแผ่นทำมาจาก aluminum grit สามารถใช้ได้กับบันไดที่ทำจากไม้ ปูน หรือโลหะ เทปกันลื่น 3M Safety-Walk Slip Resistant Conformable เทปกันลื่นสำหรับใช้กับพื้นผิวไม่เรียบ , เทปกันลื่นความหยาบสูง สำหรับใช้ติดพื้นที่เรียบ อุบัติเหตุรอคอย ในบริเวณที่มีทางสัญจร ทางลาดเอียงอยู่เสมอ บ่อยครั้งทำให้เกิดการบาดเจ็บรุนแรง แต่เราป้องกันหรือผ่อนหนักเป็นเบาได้ด้วย เทปกันลื่น 3M ออกแบบมาเพื่อใช้งานตามสภาพพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม
เทปกันลื่น Anti Slip Tape เทปกั้นเขต,เทปฝังใต้ดิน ,เทปกันลื่น , เทปกันแตก,เทปงานอีเวนท์/ออกแบบ ,เทปตีเส้น ,เทปสะท้อนแสง อุปกรณ์จราจร เทปกันลื่น เทปกั้นเขต (Warning Tape)เทปตีเส้น ชนิดสะท้อนแสง
มองเห็นเมื่อแสงน้อย เทปกันลื่นเรืองแสง เทปติดยานพานะ Diamond Grade แบบม้วน ปลอดภัย มองเห็นในที่มืด เพิ่มความปลอดภัย คุณภาพสูง เทปกันลื่นสำหรับติดบนพื้นผิวเรียบๆ เช่นพื้นหินอ่อน, หินขัด, กระเบื้อง เซรามิค, กระเบื้องแกรนิโต้, พื้นปูนขัดมัน, หินแกรนิต, ฯลฯ ติดตั้งง่าย ผิวของเทปกันลื่นรุ่นนี้มีลักษณะหยาบเหมาะสำหรับติดเพื่อกันลื่น บริเวณรอบสระว่ายน้ำ ในเรือ จมูกบันได หรือ พื้นเอียงที่อยู่ภายในและภายนอกอาคาร
เทปติดถนนสะท้อนแสง หรือเทปติดถนนกันลื่น: แผ่นเทปสำเร็จรูป วัสดุทำจาก PVC TAPE ซึ่งมีความเหนียวทนทานเป็นอย่างมาก โดยตัวเทป ติดถนนสะท้อนแสง จะมีลูกแก้วสะท้อนแสงเม็ดเล็กๆอยู่บนเทป (Glass bleed) ทำให้สะท้อนแสง ได้ดีมากในเวลากลางคืน สามารถใช้ติดได้ทุกพื้นผิว โดยจะใช้คู่กับกาว EPOXY หรือสารยึดแน่นอื่นๆ ทำให้อยู่ได้นาน คงทนต่อการขัดสีจากยางรถยนต์ มีความคงทนถาวร สีจะไม่แตก เมื่อเทียบกับ สีเทอร์โมพลาสติก สีไม่ซีดจางหรือเปลี่ยนเฉดสีเมื่อใช้เวลานาน ไม่หลุด หรือเคลื่อนที่ อายุการใช้งาน ยาวนาน มีคุณสมบัติที่ดีกว่า คือสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหังการติดตั้งเสร็จ เหมาะที่จะใช้เป็น เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามขวางของทางหลวงในเมือง ที่มีการจราจรหนาแน่น
การตีเส้นทางม้าลาย ด้วยเทปติดถนนสะท้อนแสง : การทำเทปสะท้อนแสงด้วยทางม้าลาย จะมีขนาดมาตรฐานความกว้างของแถบ 50 Cm. ส่วนความยาวอยู่ที่ความเหมาะสมในช่องทางเดินเท้าของคนข้ามถนน โดยเทปติดถนนสะท้อนแสงทางม้าลาย จะมีสีให้เลือก2สีคือ สีขาว และ สีเหลือง โดยตัวเทปสะท้อนแสงจะมีลูกแก้ว (Glass bleed) ซึ่งทำให้สะท้อนแสงได้ดีมากในเวลากลางคืน นอกจากจะใช้งานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ทางม้าลายได้แล้ว ตัวเทปตดถนนเป็นเนื้อหยาบ สามารถกันถนนลื่นได้ด้วย
เทปติดถนนสะท้อนแสงชนิดลูกศร เทปติดถนนสะท้อนแสง สามารถทำเป็นอักษรได้ตามต้องการ อย่างเช่นเลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา ตรงไป เป็นต้น โดยราคาจะเเบ่งเป็นชนิดของลูกศร โดยปกติ สะท้อนแสง ได้ดีมากในเวลากลางคืน สามารถใช้ติดได้ทุกพื้นผิว โดยจะใช้คู่กับกาว EPOXY หรือสารยึดแน่นอื่นๆ ทำให้อยู่ได้นาน คงทนต่อการขัดสีจากยางรถยนต์ มีความคงทนถาวร สีจะไม่แตก เมื่อเทียบกับ สีเทอร์โมพลาสติก สีไม่ซีดจางหรือเปลี่ยนเฉดสีเมื่อใช้เวลานาน ไม่หลุด หรือเคลื่อนที่ อายุการใช้งาน ยาวนาน มีคุณสมบัติที่ดีกว่า คือสามารถเปิดให้บริการได้ทันทีหังการติดตั้งเสร็จ เหมาะที่จะใช้เป็น เครื่องหมายจราจรบนพื้นทางตามขวางของทางหลวงในเมือง ที่มีการจราจรหนาแน่น
ตีเส้นแบ่งช่องจราจร ช่องจอดรถ หรือเส้นแบ่งช่องถนน มาตรฐานกรมทางหลวง จะมีเส้นหน้ากว้าง 10 เซนติเมตร สีที่มีให้เลือกจะมีสีขาว, สีเหลือง สีแดง,และสีดำ ซึ่งเทปตีเส้นถนนจะมีความคงทนมาก และมีลูกแก้วสะท้อนแสงบนเทปติดพื้นทำให้เห็นได้ชัดเจนมากในเวลากลางคืน วัสดุเทปทำจาก PVC ซึ่งมีความเหนียวทนทานมาก ซึ่งต่างประเทศมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ข้อดีที่มีมากกว่าสีเทอร์โมพลาสติกคือ สีเทอร์โมพลาสติกสามารถแตกได้เมื่อถูกการกระแทก หรือขีดข่วน ตัวเทปสะท้อนแสงจะไม่มีการแตก สะท้อนแสงได้มากกว่า และ คงทนยาวนานกว่าสีเทอร์โมพลาสติก
FRP Gritted Plate / Fiberglass Reinforced Plastic Anti-Slip Sheeting / Step Covers and Treads
FRP Gritted Plate isatough, corrosion and slip-resistant floor plate, used inavariety of applications, such as trench covers to contain vapors and fumes, or pedestrian bridge walkways for sure footing. FRP Gritted Plate is composed of pultruded FRP Flat Sheet with an epoxy coated anti-skid surface Anti Slip Fiberglass Sheets (FRP) 3M Safety not-slip Flooring Walk easy mat Tub and Shower แผ่นยางปูพื้น เทปกันลื่น รองพรมบล็อคยางตะแกรงตาข่ายกันลื่นสารพัดประโยชน์ สวย สะอาดและผิวป้องกันลื่นปลอดภัย สำหรับ อ่างอาบน้ำ ตู้อาบน้ำ และ บริเวณห้องน้ำ พื้นผิวที่มีความมันเงาหรือบริเวณที่เปียกชื้น ย่อมมีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย โดยเฉพาะพื้นห้องน้ำเป็นสถานที่ที่ต้องเปียกน้ำอยู่เสมอ ๆ แต่การแก้ไขก็มีด้วยกันหลายวิธี อาทิ ติดเทปกันลื่นหรือใช้น้ำยากันลื่นเคลือบบนพื้นผิวต่าง ๆ เช่น กระเบื้องเซรามิก โมเสก หินแกรนิต เพื่อความปลอดภัยของคนที่คุณรัก เทปกันลื่นความหยาบน้อย วัสดุทำจากยืดหยุ่นได้ดี พื้นผิวอ่อนนุ่ม เดินได้ด้วยเท้าเปล่า จึงทนความชื้นได้ดี เหมาะสำหรับติดบริเวณห้องน้ำ อ่างอาบน้ำ ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ห้องเซาว์น่า ทางเดินบนเรือ กระดานโต้คลื่น สำหรับปูพื้นที่ สปอร์ตคลับ ห้องออกกำลังกาย ห้องเปลี่ยนเสื้อนักกีฬา ห้องพยาบาล Safety แผ่นพีวีซีผิวต้านสัมผัสชนิดกันลื่น ( Non-slip flooring ให้ความปลอดภัยกับผู้ใช้งานสูงสุดกับพื้นที่นั้น โดยไม่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษกับการดูแลรักษาให้ปราศจากน้ำหรือน้ำมันบนพื้น ผิวไม่ลื่นแม้เปียกน้ำหรือน้ำมัน ตลอดอายุการใช้งาน Slip-resistance, even when wet , throughout lifetime of floor ทนต่อสารทำละลาย เช่น น้ำมัน น้ำมันเครื่อง กรด ได้อย่างดีเยี่ยม เหมาะสำหรับใช้งานในสภาวะที่ต้องการความทนทานสูง ต้านเชื้อราและแบคทีเรีย คราบดำล้างออกง่าย และทนต่อ น้ำมัน ความร้อน ป้องกันน้ำ และลดการสะสมแบคทีเรีย Coves to wall joints for rounded corner ทำความสะอาดผิวง่าย ไม่สะสมแบคทีเรีย ด้วยการเคลือบผิวระบบ Easy clean technology for improved cleanability ผลิตโดยวัสดุไฟเบอร์กล๊าสคุณภาพสูง เนื้อเดียวทั้งชิ้นด้วยการอัดผสมต้านสัมผัสเท้า เพื่อการกันลื่น Homogeneous and heterogeneous options available in high quality FRP which haveaaggregates throughout the wear layer of the flooring, to guarantee long-lasting performance แผ่นไฟเบอร์กลาสช่วยป้องกันการยืดหดตัว High quality glass fibre scrim for dimensional stability แบคทีเรีย เชื้อรา เป็นสาเหตุทำให้พื้นที่มีสภาพลื่น และเป็นแหล่งสะสมเชื้อที่ทำให้อาหารเน่าเสียได้ เราจึงนำนวัตกรรมสารต่อต้านเชื้อจุลินทรีย์มาใช้กับพื้นกันลื่น เพื่อลดความเมื่อยล้าที่ต้องการความสะอาดสูงโดยเฉพาะงานผลิตอาหาร วัสดุผสมสารต้านแบคทีเรียและเชื้อรา Silver Nano รวมเป็นเนื้อเดียวกัน ช่วยให้พื้นในบริเวณปฏิบัติงานมีสุขอนามัยมากขึ้น ปลอดจากเชื้อโรคที่จะเข้าไปสะสมตามซอกของแผ่น โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณที่มีการผลิตอาหาร (Kitchen Mats) พื้นยางออกแบบให้ของเหลวไหลผ่านสะดวก (High Drainage) ป้องกันการลื่นในพื้นที่เปียก
Floor Protector Mats: It is no secret that flooring isanatural part of every venue. Whether you haveahome,afitness center,agarage workshop, oracommercial business, floors will be there to provideabase for it all. However, floors need protection too. Floor protector mats are necessary to safeguard existing and often pricey flooring that is made of sensitive materials such as wood, tile, and laminate. A protective floor covering made from rubber will help prevent damage that can result from high volumes of foot traffic, the movement of heavy equipment, and even the results of inclement weather. Rubber-Cal hasawide range of rubber floor protector mats that can be used inavariety of applications. Our line of durable flooring options is primarily meant to function asaprotective barrier between objects. These could be small mats or long rubber runners. Rubber is an impact absorbing material and can handle the rigors of heavy weights and shocks. Gyms areagreat example of where this quality is readily apparent because they are areas that seeacombination of abrasive actions. Rubber protective floor covering is now standard for workout areas. A thick rubber mat can easily endure the strain ofarunning treadmill or an intense cross-fit workout. Since workout equipment is most often made of heavy metals, it can grind against unprotected surfaces and leave marks that can be expensive to repair. Wood is particularly vulnerable to such abrasions. Even in gyms with concrete surfacing it is still possible for the floors to become damaged if they lack the right floor protector mats. With the proper heavy-duty flooring in place, however, you will be saving your existing surfaces from costly damage. This superior level of protection of our floor protector mats does not only apply to commercial places like gyms. Non-Slip Mats: There isavery good reason why non-slip mats are predominantly made out of rubber! This material naturally offersahigh coefficient of friction which translates to excellent gripping capabilities. Here at Floor Mat Company, we take full advantage of these natural qualities and add to them with richly textured designs that work to help inhibit movement and increase slip resistance in slick and wet areas. Perfect for residential, commercial, or industrial settings, our anti-slip flooring will help protect guests, customers, and employees from potentially devastating accidents that could result in costly medical bills. Falls and trips can be more damaging than many people realize; that’s why we attempt to limit them at every opportunity. Our non-slip mats are custom cut to need, and are available in seamless lengths of up to 50 ft. Essentially, no matter your size requirement, we’ve got you covered. They’re also easy to install and even easier to maintain! Stair Mats: Stairways can bealot more dangerous than they seem—especially when moisture is present! Falling anywhere is obviously less than ideal (to put it mildly), but slipping when traversingastaircase can be extremely dangerous. Make your stairs safer with Floor Mat Company’s stair mats. Specially designed and sized, our stair treads are perfect for both indoor as well as outdoor applications. Easy to install, our products are ideal for adding slip resistant safety and added traction and grip to any stairway—whether it be in parking structures, apartment complexes, or commercial and industrial locations. We often use water resistant materials to make our mats, which makes them easy to care for. You can easily run our stair treads under water to give themathorough cleaning or just brush them off withabroom oradamp mop. Stair mats, apart from offering great safety qualities, can also add some aesthetic appeal. Available in decorative designs some of our mats are lovely to look at while others carryavery professional appearance. Whatever your needs, we’re almost sure to have something that appeals to your unique wants and desires!
No Skidding FRP Step Covers and Treads areaquick and simple solution for greasy, slippery stairs which cannot be painted or coated due to weather, lack of downtime or are chemically damaged. Anti-Slip FRP Step Covers and Treads haveaheavy duty resin bonded anti-slip surface that matches FRP Panels and Walkways. No Skidding FRP Step Covers are durable anti-slip fiberglass treads and nosings designed for stairs. They are used for both exterior and interior applications and are suitable for concrete, wood, stone, metal, brick or grated steps No Skidding FRP Step Covers are lightweight, versatile, easy to install, available black, yellow or black with yellow nosing for easy identification. Our No Skidding FRP Treads are constructed with our proprietary blend of mineral abrasives applied over thermoset polyester fiber reinforced polymer panels. Many slips on stairs happen at the edge ofastep when the surface wears and the edge becomes rounded. Wear, water, dust, dirt, ice, oil on the stairs heightens the problem creatingapotentially dangerous situation. No Skidding? Step Covers and Treads are designed to be applied over existing stairs thereby quickly creatingasafe, slip-resistant surface that provides traction and safety.
Fibre-reinforced plastic (FRP) (also called fibre-reinforced polymer, or fiber-reinforced plastic) isacomposite material made ofapolymer matrix reinforced with fibres. The fibres are usually glass, carbon, aramid, or basalt. Rarely, other fibres such as paper, wood, or asbestos have been used. The polymer is usually an epoxy, vinylester, or polyester thermosetting plastic, though phenol formaldehyde resins are still in use.
A polymer is generally manufactured by step-growth polymerization or addition polymerization. When combined with various agents to enhance or in any way alter the material properties of polymers the result is referred to asaplastic. Composite plastics refer to those types of plastics that result from bonding two or more homogeneous materials with different material properties to deriveafinal product with certain desired material and mechanical properties. Fibre-reinforced plastics areacategory of composite plastics that specifically use fibre materials to mechanically enhance the strength and elasticity of plastics. The original plastic material without fibre reinforcement is known as the matrix or binding agent. The matrix isatough but relatively weak plastic that is reinforced by stronger stiffer reinforcing filaments or fibres. The extent that strength and elasticity are enhanced inafibre-reinforced plastic depends on the mechanical properties of both the fibre and matrix, their volume relative to one another, and the fibre length and orientation within the matrix. Reinforcement of the matrix occurs by definition when the FRP material exhibits increased strength or elasticity relative to the strength and elasticity of the matrix alone.
FRP can be applied to strengthen the beams, columns, and slabs of buildings and bridges. It is possible to increase the strength of structural members even after they have been severely damaged due to loading conditions. In the case of damaged reinforced concrete members, this would first require the repair of the member by removing loose debris and filling in cavities and cracks with mortar or epoxy resin. Once the member is repaired, strengthening can be achieved through wet, hand lay-up of impregnating the fibre sheets with epoxy resin then applying them to the cleaned and prepared surfaces of the member. Two techniques are typically adopted for the strengthening of beams, relating to the strength enhancement desired: flexural strengthening or shear strengthening. In many cases it may be necessary to provide both strength enhancements. For the flexural strengthening ofabeam, FRP sheets or plates are applied to the tension face of the member (the bottom face forasimply supported member with applied top loading or gravity loading). Principal tensile fibres are oriented in the beam longitudinal axis, similar to its internal flexural steel reinforcement. This increases the beam strength and its stiffness (load required to cause unit deflection), however decreases the deflection capacity and ductility. For the shear strengthening ofabeam, the FRP is applied on the web (sides) ofamember with fibres oriented transverse to the beam’s longitudinal axis. Resisting of shear forces is achieved inasimilar manner as internal steel stirrups, by bridging shear cracks that form under applied loading. FRP can be applied in several configurations, depending on the exposed faces of the member and the degree of strengthening desired, this includes: side bonding, U-wraps (U-jackets), and closed wraps (complete wraps). Side bonding involves applying FRP to the sides of the beam only. It provides the least amount of shear strengthening due to failures caused by de-bonding from the concrete surface at the FRP free edges. For U-wraps, the FRP is applied continuously ina‘U’ shape around the sides and bottom (tension) face of the beam. If all faces ofabeam are accessible, the use of closed wraps is desirable as they provide the most strength enhancement. Closed wrapping involves applying FRP around the entire perimeter of the member, such that there are no free ends and the typical failure mode is rupture of the fibres. For all wrap configurations, the FRP can be applied along the length of the member asacontinuous sheet or as discrete strips, havingapredefined minimum width and spacing. Slabs may be strengthened by applying FRP strips at their bottom (tension) face. This will result in better flexural performance, since the tensile resistance of the slabs is supplemented by the tensile strength of FRP. In the case of beams and slabs, the effectiveness of FRP strengthening depends on the performance of the resin chosen for bonding. This is particularly an issue for shear strengthening using side bonding or U-wraps. Columns are typically wrapped with FRP around their perimeter, as with closed or complete wrapping. This not only results in higher shear resistance, but more crucial for column design, it results in increased compressive strength under axial loading. The FRP wrap works by restraining the lateral expansion of the column, which can enhance confinement inasimilar manner as spiral reinforcement does for the column core.
FRP Epoxy fiberglass laminate sheet
also known as insulation sheet, fiberglass sheet, and Epoxy sheet, it is made of alkali-free E-glass cloth impregnated with epoxy resins by processing under heat and pressure. It owns the character of high temperature resistance, High-intensity, Flame-retardant grades to UL94-V0, high mechanical properties and dielectric properties, good heat resistance, good-smoothness, etc.
Fiberglass Reinforced Panels, Fiberglass reinforced plastic, Pultruded Fiberglass Sheets and Composite Materials
offer many advantages over traditional materials such as Wood, Aluminum, Steel, Thermoplastic, and other Thermo-set materials. There are endless possibilities that these fiberglass products offer inawide variety of existing applications such as Handrail Components, RF Transparent Cell-Site Enclosure Systems, and Cooling Towers, to nameafew. You may also find an application or two that you have had the chance to view and enjoy personally, or have seen on recent cable TV programs. These applications include the Mesmerizing Dancing Fountains of the Bellagio Hotel on the Las Vegas Strip, to the Observation Deck overlooking the breath taking Niagara Falls, to the fiberglass walkway and aquarium supports at the Monterey Bay Aquarium in California. These applications all use the structural fiberglass composite materials. Whether it is an application that is viewed by millions of people each year or an application that is buried well below the earth’s surface, our Standard Structural FRP line and Custom Pultruded Profiles meet or exceed the challenges of many markets. Sequentia Corrugated Fiberglass Reinforced Panels. Thick fiberglass roofing panels. These sheets come flat or inavariety of corrugated profiles. Architects and engineers alike have long known the advantages of fiberglass panels in design and construction. As the demand for fiberglass panels in industrial applications grows, so grows the reputation of high-strength fiberglass panels. Corrugated Fiberglass Panels are stocked and non-stock profile can be ordered from the factory and shipped direct to you. Structoglas Liner Panels are available in standard and Fire Rated Fiberglass Reinforced Panels inavariety of colors.
We suppliesarange of FRP sheets, FRP corrugated sheets, FRP transparent sheets, FRP roofing sheets, fibre glass sheets, fibre sheets, FRP profile sheets, FRP AC sheets and FRP plain sheets.
At approximately 3-4mm thick, our tough (FRP) Flat Sheet is coated inacombination of premium quality quartz sand and resin components, making itahighly effective anti-slip product. Often the preferred choice over tapes and paints, offering an almost permanent solution to slip hazards. Flat Sheets can be laid and fixed usingacombination of adhesives/sealant and fasteners to effectively fix, bond and seal the edges, preventing any ingress of moisture. Sheets may be cut and finished to specific sizes prior to delivery for ease of use in installation, and can either be cut on-site usingadiamond or tungsten tipped tool. Can be fixed to many substrate types, standard thickness sheets can be used even where there is damage or deterioration to an existing surface.
FRP Stair Tread Nosing Step Protector: FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ Fiberglass
ລາຍການ, ແຜ່ນທີ່ດັງ, ແຈ, eyebrow, ຝາຄອບ staircase ພື້ນຜິວປົກເສັ້ນໃຍພື້ນຄວາມຜິດພາດພຽງແກ້ວ
FRP Gritted Sheet ແຜ່ນ / Stair Tread ດັງ ຂັ້ນຕອນປົກ Quotation.
FRP Stair Tension Specification | ຄຸນະລັກສະນະຂອງແຜ່ນດັງ, ມຸມ, eyebrow, cover fiberglass, cover fiberglass
1) ໃສ່ດ້ານຫນ້າຂອງເຄື່ອງຈັກໃນຫ້ອງນ້ໍາ. ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລ້າໆ. เสริมความแข็งแรงและเพิ่มคุณค่าพื้นที่ให้แข็งแรงปลอดภัยสวยงาม
2 ) ความยาวมาตรฐาน 2-4 เมตร สามารถสั่งผลิตตัดจากแผ่นมาตรฐานได้ทุกขนาด (Tailor Made) รับสินค้าได้ทันทีภายใน 2-3 วัน / Delivery in 2-3 days 3)ໂກນສີເຫຼືອງແກມສີເຫຼືອງເປັນສີມາດຕະຖານ: ສີເທົາແລະສີເຫຼືອງ Nosing
4) ການຕໍ່ຕ້ານທາງເຄມີ Corrosion ແມ່ນທົນຕໍ່ການກັດກ່ອນຕະຫຼອດຊີວິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດ, ການຕໍ່ຕ້ານທາງເຄມີແລະຄວາມຮ້ອນ. ຄວາມທົນທານທີ່ໂດດເດັ່ນໃນສະຖານະການທີ່ງ່າຍທີ່ຈະລຸດລົງ. ສາມາດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີກົດນໍ້າສົ້ມສູງ. ເຫມາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນເຂດທະເລຫຼືຊາຍຝັ່ງ.
5) ໄດ້ຖືກພັດທະນາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນອຸດສະຫະກໍາອາຫານ. ມີຕົວແທນ antimicrobial. ຍັບຍັ້ງການເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ ໃນດ້ານຂອງຖາດ ລວມທັງສານທີ່ກັດກ່ອນພົບທົ່ວໄປໃນອຸດສາຫະກໍາອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ. ແນະນໍາໃຫ້ສໍາລັບເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄຟໄຫມ້. ຜະລິດຈາກຢາງທີ່ບໍ່ໄດ້ສູບຢາ. ແລະອັດຕາການປາດຕ່ໍາ ເຫມາະສົມສໍາລັບອຸໂມງ tunnel offshore, transit ມະຫາຊົນ, ແລະເຂດປິດອື່ນໆ.
6) Superior ກັບໂລຫະໂລຫະອື່ນໆແລະຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ Fiberglass ອື່ນໆທີ່ມີຄຸນສົມບັດທົນທານຕໍ່ corrosion ພົບທົ່ວໄປໃນອຸດສາຫະກໍາເຄມີ. ແລະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເສຍ ຜະລິດຈາກຢາງທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 30 ສູດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ corrosion ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກັດກ່ອນນອກຈາກປົກຫຸ້ມຂອງ Fiberglass ປົກກະຕິ.
7) ຄວາມຫມາຍຂອງ pads ດັງ. ຝາຄອບປະຕູ ບັນໄດ Tread ດັງແຜ່ນຂັ້ນຕອນປົກພື້ນຄວາມຜິດພາດພຽງເສັ້ນໃຍແກ້ວດັງຂອບ cover trim ໄດກະດານ. ອອກແບບເພື່ອທົດແທນ ຢາງພື້ນ playgrounds ອອກກໍາລັງກາຍ, ສວນສາທາ, ໂຮງຮຽນ, gyms ແລະ indoor ແລະນອກພວກເຮົາປຶກສາຫາລືການນໍາໃຊ້ຂອງສີຫຼືຂໍ້ຄຶດສາຍຕາອື່ນໆເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການເດີນທາງແລະການຕົກອັນຕະລາຍ. GRP ພື້ນ Solid Plate Gritted ໄດ້ຮັບການອອກແບບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ທົນທານແລະ. ຍາວ, ຊີວິດບໍາລຸງຮັກສາຟຣີແມ່ນສໍາຄັນ. ໃນຖານະເປັນ GRP ພື້ນ gritted Plate Solid ປົກກະຕິແລ້ວໄດ້ຖືກຕິດຕັ້ງໃນໄລຍະ substrates ທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອສະຫນອງ walkways ຫມັ້ນຄົງ, ຫຼືເພື່ອຍືດອາຍຸຂອງພື້ນທີ່ການຈະລາຈອນສູງໄດ້. ການຕ້ານການຜິດພາດພຽງ Fiberglass ພື້ນ Solid Plate ຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການ bolted ໂດຍກົງໃສ່. beams ໂຄງສ້າງ,
ແຜ່ນເຈາະ, ແຈ, eyebrow, ແຜ່ນໃຍສັງກະສີ FRP Gritted Sheeting Plate – Stair Tread Nosing Step Cover
1 FRP Stair Tread Nosing Cover Cover Protector: ໃຊ້ເພື່ອປົກຄຸມຝາຄອບຂອງຊັ້ນ. ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລ້າໆ. ຂະຫນາດມາດຕະຖານ4ແມັດ (ຕັດກັບຂະຫນາດໃດກໍ່ຕາມ, ຕັດເປັນຂະຫນາດ 50cm, 70cm ຫຼື 100cm ຫຼື .. )
2 FRP Anti-Slip Gritted Plate Sheeting: ຂະຫນາດມາດຕະຖານ 1.4 x 40 ມ. (ຕັດຕາມຂະຫນາດໃດຫນຶ່ງ. ພື້ນຜິວທີ່ຫນ້າເຫຼື້ອມຫຼືພື້ນທີ່ຊຸ່ມ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຂອງອຸປະຕິເຫດ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງນໍ້າແມ່ນສະຖານທີ່ທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ເຊື້ອເຫັດແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍເຊັ່ນຕັດເຂົ້າໄປໃນ 25x140cm, 50x140cm ຫຼື 100x140cm.
3. ດິນເຄືອບດິນເຄືອບ: ດິນຊາຍທີ່ມີ ຫຍາບ ແຂງ, ລົ່ນ, ລົ່ນ, ລົ່ນ, ລື່ນ, ບໍ່ລື່ນ, ປຽກຫຼືນ້ໍາມັນ. ຕະຫຼອດອາຍຸ
4 .: ມາດຕະຖານກ່ຽວ Color: ສີເທົາຫລືເພີ່ມປະເທດໄທອອນໄລນ໌ເຫລືອງແລະຄໍາສັ່ງ Color ພິເສດ (ດັງສີຂີ້ເຖົ່າ, ສີເຫຼືອງແມ່ນມາດຕະຖານສີໄດ້), ສີອື່ນໆສາມາດໄດ້ຮັບການສັ່ງກັບຄ່າໃຊ້ຈ່າຍພິເສດ. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, ກະລຸນາ
5. ຕັດຂະຫນາດໃດ (Tailor ເຮັດ ): ທ່ານສາມາດຕັດຂະຫນາດທັງຫມົດ. ເພື່ອຫາຂະຫນາດຂອງພື້ນທີ່. ຫຼືທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ladder
6 ງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງແລະເບິ່ງດີ: ງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ, ບັນໄດ້ໍາຫນັກເບົາສໍາລັບເອກະສານການປົກຫຸ້ມຂອງ. ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລ້າໆ. ຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະມູນຄ່າເພີ່ມໃນຊັ້ນທີ່ສວຍງາມ
7. ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ຕ້ານທາງເຄມີ:ບໍ່ເຂົ້າຫມ້ຽງຕະຫຼອດຊີວິດຂອງສານເຄມີຕໍ່ຕ້ານແລະຄວາມຮ້ອນໄດ້ເປັນຢ່າງດີໄດ້. ຄວາມຕ້ານທານຕໍ່ສານລະລາຍເຊັ່ນ: ນ້ໍາມັນ, ນ້ໍາ, ອາຊິດແມ່ນການທີ່ດີ pretty. ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມທົນທານສູງ ການ treads FRP Stair ແມ່ນຕົນເອງສະຫນັບສະຫນູນ ໂຄງປະກອບການ, ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນແລະມາພ້ອມກັບພື້ນຜິວຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງພິເສດການນໍາໃຊ້ພືດ silica ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພສູງໃນໄລຍະສະພາບຄວາມຕ້ອງການ. ການ treads ໄດ GRP ທີ່ມີຢູ່ໃນ. ຕົນເອງ extinguishing.The, ສີ polyester, Isophthalic ແລະຢາງໃສ Vinilester, ແລະສາມາດມີ Concave Surfaces, ມີ quartz ຫຼືຕື່ມ Covered. ສີມາດຕະຖານມີສີຂີ້ເຖົ່າມີຄຸນ yellow ດັງ ; ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການວັດສະດຸລໍ້ໄດສາມາດເທົາມີສີດໍາດັງໂມດູນການມີຂະຫນາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ສີແລະຢາງໃສ, ມີ.. ຜະລິດຕະພັນກ່ຽວກັບການຮ້ອງຂໍ
ພວກເຮົາສາມາດສະເຫນີໃຫ້ຂັ້ນໄດ Treads ກັບຂໍ້ມູນທີ່ແຕກຕ່າງກັນແລະຂະຫນາດທີ່ຈະເຫມາະສົມຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຂອງທ່ານ. ບັນໄດ Treads ສາມາດໄດ້ຮັບການສະຫນອງໃຫ້ກັບປະເພດ Pyramid ດັງຫຼືດັງແຜ່ນ checkered ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜົນຄວາມປອດໄພ. Stairs Treads ແມ່ນຢູ່ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຖາປັດຕະຍະ, ທຸລະກິດແລະອຸດສາຫະກໍາ, ເກີບ stairs ທົນທານ, ປອດໄພແລະ slip ທົນທານ, Ferrotech ແມ່ນມີຢູ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບ, ວັດສະດຸແລະສິ້ນສຸດທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອໃຫ້ເຫມາະສົມກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.
ວິທີການຕິດຕັ້ງ FRP Stair Tread Abrasive Nosing Step Cover
ວິທີການຕິດຕັ້ງ ການປົກຫຸ້ມຂອງພື້ນໄມ້ກະດາດແຂບທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດ, ດັງ, ມຸມ, ຄິ້ວ, ກວມເອົາເຫຼັກ.
The tread ບັນໄດເປັນພື້ນຜິວຍ່າງຢູ່ຕາມເສັ້ນນອນ ຂອງຂັ້ນຕອນບຸກຄົນ. ຄວາມເລິກຂອງດອກຢາງແມ່ນການວັດແທກຈາກຫນ້າ ຂອບຂອງດັງຂັ້ນຕອນຫຼືຂອບຂອງຂັ້ນຕອນການຂ້າງເທິງນີ້ອອກໄປຂອບຊັ້ນນໍາຂອງຂັ້ນຕອນທີ່ທ່ານກໍາລັງການວັດແທກພື້ນທີ່ຢູ່ລຸ່ມຕີນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຢູ່ໃນຮູບຢູ່ທາງຊ້າຍ. ຄວາມລຶກໄດຢາງຈະຖືກວັດແທກຢຽດຕາມທາງຂວາງ ລະຫວ່າງແຜນການຕັ້ງຂອງການຄາດຄະເນສໍາຄັນຂອງ treads ຢູ່ໃກ້ຊິດແລະຢູ່ໃນມຸມສິດທິໃນການຂອບຊັ້ນນໍາ tread ຂອງ.
SlipGrip ໄດ້ Sprint, Flexible ກັບພຽງ Sheet ພື້ນແກ້ໄຂວິທີການ
A) Sealant / ກາວໃນລວມມີການແຊ່, ຫົວຫນ້າຕົນເອງເຮັດກຽວ, screws ໃນເວລາທີ່ແກ້ໄຂຈາກຂ້າງເທິງ Clear
, b) ໄດ້ປະຕູ Pan ຫົວຫນ້າ, ໃນປະສົມປະສານດ້ວຍ Nosing ໄດ້ Clip M ຕາຕະລາງສໍາລັບໃນເວລາທີ່ແກ້ໄຂຈາກຂ້າງເທິງ Clear ຂອງພວກເຮົາທີ່ຄັດສັນ ons ທີ່ FRP grating
ໄດ້ GRP ຂອງ Anti. ພື້ນ -Slip (GritPlate)
ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມອຸດສາຫະກໍາແລະການຄ້າສໍາລັບເວລາຫຼາຍ. ມັນສະຫນອງການປ້ອງກັນທີ່ດີເລີດຕໍ່ຄວາມເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບການລ່ວງລະເມີດ, ການບາດເຈັບແລະການຮຽກຮ້ອງຊົດເຊີຍເລື້ອຍໆ. GritPlate ນີ້ແມ່ນຫຼັກຖານທີ່ບໍ່ມີຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ສາມາດທໍາລາຍໄດ້ແລະຈະທົນຕໍ່ຕົວປ່ຽນແປງອາກາດທີ່ຮຸນແຮງ. ມັນສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ໄດ້ທຸກບ່ອນທີ່ມີອັນຕະລາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນ.
FRP Stair Tread Nosing Step Cover ສໍາຫລັບ Steel Ladder Grating ເກີບຟິດເຕີ້ ຕິດໃສ່ ladder ແກ້ວເຫຼັກ
FRP Stair Tread Nosing Cover Cover Protector ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ Fiberglass ໃຊ້ໃນການປົກຫຸ້ມຂອງ ladder ໄດ້. ຊ່ວຍປ້ອງກັນການລ້າໆ. ແລະເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການແຕກຂື້ນເທິງຫນ້າດິນ. ນີ້ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍໃນຂະນະທີ່ຍ່າງ. ມີຄຸນສົມບັດໄຟເບີກາດ. ມັນທົນທານ, ເບົາ, ບໍ່ກັດ, ທົນທານຕໍ່ UV, ຊີວິດຍາວ. ມັນສາມາດຕິດຕັ້ງທັງພາຍໃນແລະພາຍນອກອາຄານ. ເຫມາະສໍາລັບອາຄານທົ່ວໄປ. ພວກເຂົາຕ້ອງການຄວາມປອດໄພໃນເວລາຍ່າງ, ເຊັ່ນ: ໂຮງຮຽນ, ໂຮງຫມໍ, ຫ້ອງການ, ສູນການຄ້າ, ໂຮງແຮມ, ອາຄານທີ່ພັກອາໃສຫຼືຄອນໂດມິນຽມ.
ແຜ່ນສະແຕນເລດຕ້ານການກໍ່ສ້າງແມ່ນເຫມາະສົມກັບເສັ້ນລວດ, ໄມ້ຫຼືທ່ອນໄມ້ທີ່ມີນ້ໍາຕານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງແລະຫຼຸດລົງ. ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດຕັດທ່ອນໄມ້ໃຫ້ກັບຂະຫນາດພິເສດໂດຍບໍ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເພີ່ມເຕີມ. ໃນດ້ານມາດຍ່າງໄດ້ຈາກເອກະສານຊັ້ນ fiberglass ເຄືອບດ້ວຍຊັ້ນຫຼື grit Quartz Angular ເຊິ່ງຖືກຜູກມັດການເຊື່ອມໂຍງກັບຫນ້າດິນໄດ້, ນີ້ຈະສະຫນອງການແກ້ໄຂຄວາມປອດໄພດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຈະຫນ້າຍ່າງ slippery. Fiberglass Plate Solid ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງສໍາເລັດຜົນໃນ ຈໍານວນຫຼາຍອຸດສາຫະກໍາ – ລວມທັງການປະມວນຜົນອາຫານເຄື່ອງດື່ມ, ການປະມວນຜົນທາງເຄມີ, ນ້ໍາແລະການປິ່ນປົວສິ່ງເສດເຫຼືອ, ການຕົກແຕ່ງໂລຫະ, ແຍກເນື້ອເຍື່ອແລະເຈ້ຍ, ການຂົນສົ່ງ, ຢາ, ສຸຂະພາບ, ນ້ໍາມັນແລະອາຍແກັສແລະຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່, ການຫຼອມແລະທີ່ຫລອມໂລຫະ. ແຜ່ນຮອງພື້ນຫຸ້ມແຜ່ນແຂງສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນຂະຫນາດຕ່າງໆ. ຄວາມຫມາຍຂອງການປົກປ້ອງຂັ້ນຕອນການປົກປ້ອງຂັ້ນຕອນການປົກປ້ອງຂັ້ນຕອນ
ແຜ່ນ neose, ມຸມ, eyebrows, ຝາຄອບ stairs ຝາອັດປາກ
ມຸ້ມະຂະຫນາດກວ້າງແມ່ນມີຄວາມກວ້າງຂອງການເປີດໂງ່ນຫີນ. ສໍາລັບ stairs ປະກອບດ້ວຍກໍາແພງທັງສອງດ້ານ, ປົກກະຕິແມ່ນ width ຂອງ stairway ແມ່ນໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງກໍາແພງເຫຼົ່ານັ້ນ. ຂອງຄວາມກົດດັນຂອງ stairs. ສັງເກດວ່າຄວາມຫນາແຫນ້ນຂອງ stairs ຂັ້ນຕ່ໍາຈະເພີ່ມຂື້ນໃນເວລາທີ່ stairs tread ບໍ່ໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະຫນູນຈາກ riser ແຂງ.
ເປີ້ນພູຂອງດອກຢາງແລະຄວາມສ່ຽງ collapse ແມ່ນຈະແຈ້ງສາຍຕາ. ການກວດກາບັນໄດຄວນຈະຖາມ: “ເປັນແນວໃດເຮັດໃຫ້ການເຄື່ອນໄຫວ weird ນີ້ແລະຜູ້ທີ່ເຮັດການສ້ອມແປງ goofy ເຫຼົ່ານີ້?”. ແລະ “ເປັນແນວໃດການເຮັດວຽກອື່ນໆບໍ່ບຸກຄົນທີ່ປະຕິບັດກ່ຽວກັບການກໍ່ສ້າງນີ້?”. ຄວາມລຶກໄດຢາງຈະຖືກວັດແທກຢຽດຕາມທາງຂວາງລະຫວ່າງແຜນການຕັ້ງຂອງການຄາດຄະເນສໍາຄັນຂອງ treads ຢູ່ໃກ້ຊິດແລະຢູ່ໃນມຸມສິດທິໃນການຂອບຊັ້ນນໍາ tread ຂອງ.
ໄມ້ທ່ອນຢ່າງໃດກໍຕາມ, ການຕັດສິນໃຈທີ່ຈະໃຊ້ການປິ່ນປົວຕົນເອງຄວນມີເກິດທີ່ເປັນປະໂຫຍດພຽງເລັກນ້ອຍໃນກໍລະນີໄດຫຼຸດລົງຍ້ອນວ່າມັນເປັນທັງການປະຕິບັດທົ່ວໄປແລະໃນບາງຄວາມນັບຖືແມ່ນເປັນທາງເລືອກທີ່ປອດໄພກວ່າການນໍາໃຊ້ໄມ້ຮັບການປິ່ນປົວໃນໄລຍະແປກທີ່ບໍ່ແມ່ນຮັບການປິ່ນປົວຫຼື SPF ນັບຕັ້ງແຕ່ການປິ່ນປົວປົກປັກຮັກສາ, ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນ. ຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການທໍາລາຍໂຄງສ້າງ, ຄວນເຮັດໃຫ້ມີການຍືນຍົງຫຼາຍກວ່າເກົ່າແລະປອດໄພກ່ວາການເລືອກທີ່ຈະເລີນເຕີບໂຕ. ທີ່ຢູ່ ໄມ້ແມ່ນມັກຈະມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນກັບການຮັກສາໄວ້ໃນເວລາຊື້; ມັນກໍ່ຈະ squirt ເມື່ອ nailed. ແຕ່ນັບຕັ້ງແຕ່ການຢຸດຕິການນໍາໃຊ້ໄມ້ເປັນພິດຫຼາຍ, ໄມ້ຮັບການປິ່ນປົວບໍ່ແມ່ນຫຼາຍເປັນອັນຕະລາຍທີ່ປະກົດຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ທ່ານເອົາສິ້ນຂອງດັງ tread ກ່ວາໄມ້ອື່ນໆເປັນ, ທີ່ມີຂະຫນາດນ້ອຍ, ອ່ອນແອ, ຍົກເວັ້ນດ້ານວິຊາການ.
ການປາກົດຕົວຂອງ knot ເປັນທີ່ຂອບຂອງໄມ້ທີ່ໃຊ້ໃນການສ້າງເປັນ tread ບັນໄດສາມາດຜະລິດຮູບແບບຂອງການອ່ອນເພຍຂອງໄມ້ໄດ້ໃນພື້ນທີ່ທີ່ຢູ່ໃນທີ່ນ້ໍາຫນັກຂອງຄົນ stepping ສຸດແຂບຂອງດັງດອກຢາງອາດຈະທໍາລາຍໄດ້ nosing ບາດກ້າວຈາກຕຶກຂອງບໍ່ວ່າຈະແມ່ນ. the knot ການເປີດກວ້າງໃນຂົງເຂດຍັງສາມາດໄດ້ຮັບນ້ໍາແລະສະພາບອາກາດເຢັນແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການຂຸດຂີ້ເຫຍື້ອແລະຄວາມເຢັນອາກາດແລະການທໍາລາຍໄມ້ໃນພື້ນທີ່ນັ້ນ. Breakaway ຢູ່ຂ້າງຂອງ knot ໃນເນື້ອໄມ້ຢູ່ໃກ້ກັບແຄມຂອງດ້ານການຍ່າງແມ່ນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາສັງເກດເຫັນໃນວິດີໂອຂອງທ່ານ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າມັນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງດັງທີ່ຖືກກະແທກກ່ອນທີ່ຈະຫຼຸດລົງເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າສັງເກດເຫັນຄວາມແຕກແຍກຂອງສອງສາມນິ້ວຂອງທັງສອງດ້ານ , ຊ້າຍແລະຂວາ,
ຄວາມແຂງຂອງຊະນິດໄມ້ທີ່ມີຄວາມແຕກຕ່າງແຕກຕ່າງກັນຍ້ອນວ່າມັນມີຄວາມຫນາແຫນ້ນ; ສໍາລັບຕົວຢ່າງ, ມີນ້ໍາຫນັກເພີ່ມເຕີມແລະອາດຈະມີນ້ໍາຕານຫນ້ອຍກ່ວາໄມ້ທີ່ຖືກປະຕິບັດເມື່ອແຫ້ງ. ມີການປິ່ນປົວອື່ນໆທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ກັບພື້ນໄມ້ໄມ້ກາງແຈ້ງ, balconies, rail, ເຊັ່ນ: stains ຮັກສາໄວ້. ການຮັກສາຫຼືສານເຄມີດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ທັງໄມ້ທີ່ຖືກປະຕິບັດແລະຍັງໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ອາກາດ, ແລະສີບາງຍັງໃຊ້ໃນການດູດກືນ. ສໍາລັບຜະລິດຕະພັນໄມ້ເຫຼົ່ານີ້ຜະລິດຕະພັນເພີ່ມເຕີມຈະຂະຫຍາຍຊີວິດຂອງໂຄງສ້າງ, ປັບປຸງຮູບລັກສະນະຂອງມັນ, ແລະຫຼາຍໆຄົນໃຫ້ການດູດຊຶມນ້ໍາບາງຢ່າງຕໍ່ຫນ້າດິນ. ເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນສາເຫດທົ່ວໄປທີ່ສຸດຂອງການຍ່າງຍ້ໍາ, ຂັ້ນຕອນຫຼືດ້ານອື່ນໆທີ່ຍ່າງນອກ.
ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ Fiberglass ວາງເວທີ FRP ບໍ່ມີການລື່ນ, Escalier, ແຜ່ນດິນແຜ່ນແຜ່ນ
ການຕໍ່ຕ້ານທາງເຄມີ Corrosion ແມ່ນສານຕ້ານຕໍ່ຕ້ານການກັດກ່ອນຕະຫຼອດຊີວິດຂອງສານເຄມີທີ່ເປັນປະໂຫຍດແລະຄວາມຮ້ອນຂອງມັນ. ຄວາມທົນທານທີ່ໂດດເດັ່ນໃນສະຖານະການທີ່ງ່າຍທີ່ຈະລຸດລົງ. ສາມາດຢູ່ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມີກົດນໍ້າສົ້ມສູງ. ເຫມາະສໍາລັບການຕິດຕັ້ງໃນເຂດທະເລຫຼືຊາຍຝັ່ງ. ການພັດທະນາສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນອຸດສະຫະກໍາອາຫານ. ມີຕົວແທນ antimicrobial. ຍັບຍັ້ງການເຕີບໂຕຂອງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ ໃນດ້ານຂອງຖາດ ລວມທັງສານທີ່ກັດກ່ອນພົບທົ່ວໄປໃນອຸດສາຫະກໍາອາຫານແລະເຄື່ອງດື່ມ. ແນະນໍາໃຫ້ສໍາລັບເຂດທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ໄຟໄຫມ້. ຜະລິດຈາກຢາງທີ່ບໍ່ໄດ້ສູບຢາ. ແລະອັດຕາການປາດຕ່ໍາ ເຫມາະສໍາລັບອຸໂມງໃຕ້ດິນ, ຂົນສົ່ງມວນຊົນແລະພື້ນທີ່ປິດອື່ນໆ. ດີກວ່າ grates ໂລຫະອື່ນໆແລະ grill fiberglass ທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ທົນທານຕໍ່ corrosion ມັກພົບເຫັນຢູ່ໃນອຸດສາຫະກໍາເຄມີ. ແລະການຄຸ້ມຄອງນ້ໍາເສຍ ຜະລິດຈາກຢາງທີ່ໄດ້ຮັບການສ້າງດ້ວຍຫຼາຍກວ່າ 30 ສູດເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການກັດກ່ອນໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ກັດກ່ອນກວ່າປົກຫຸ້ມ. ຟິວເຈີເລຍໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວສາມາດທົນໄດ້. ພື້ນເຮືອນບໍ່ລຸດລົງມີຄຸນສົມບັດພິເສດ. ທົນທານຕໍ່ສານຊະນິດຕ່າງໆເຊັ່ນນ້ໍາມັນແອັກຊັງທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການໃຊ້ງານທີ່ຕ້ອງການຄວາມທົນທານສູງ. ສານຕ້ານເຊື້ອແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ງ່າຍຕໍ່ການລ້າງແລະຄວາມທົນທານຕໍ່ຄວາມຮ້ອນ, ການເຄືອບຢາງເຫຼັກໂຄງສ້າງ. ດິນຊາຍເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີນ້ໍາຖ້ວມ. ນ້ໍາຫນັກສູງ ທົນທານຕໍ່ສານເຄມີທີ່ເປັນອັນຕະລາຍ. ຫຼືເປັນສານລະລາຍ, ເຊັ່ນ: ນ້ໍາ, ນ້ໍາ, ອາຊິດ, ດີຫຼາຍ. ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍແລະເຊື້ອເຫັດ ໃຊ້ທັງໃນແລະພາຍນອກໂຮງງານ. ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ທົນທານສູງ. ສໍາລັບພື້ນທີ່ຫນັກເຊັ່ນ: ໂຮງງານອຸດສາຫະກໍາ, ບໍລິການຈໍາຫນ່າຍ. ຫ້ອງນ້ໍາສາທາລະນະ, walkways, stairs, ໂຮງງານ, etc. ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນທົດແທນຢາງແຜ່ນຢາງທີ່ບໍ່ໄດ້ລື່ນ. ມ້ວນຊັ້ນຢາງພາລາ, ໂຮງແຮມໃນໂຮງເຮືອນ, ໂຮງຫມໍຢາງພາລາທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິການ, ຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ແລວທາງດ້ານຫ້ອງນ້ໍາຢາງພາລາ. Service counter ຫ້ອງນ້ໍາສາທາລະນະ, walkways, stairs, ໂຮງງານ, etc. ສາມາດນໍາໃຊ້ເປັນບ່ອນທົດແທນຢາງແຜ່ນຢາງທີ່ບໍ່ໄດ້ລື່ນ. ມ້ວນຊັ້ນຢາງພາລາ, ໂຮງແຮມໃນໂຮງເຮືອນ, ໂຮງຫມໍຢາງພາລາທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິການ, ຫ້ອງການຊ່ວຍເຫຼືອ, ແລວທາງດ້ານຫ້ອງນ້ໍາຢາງພາລາ.
ການນໍາໃຊ້ແຜ່ນຍືດຫຍຸ່ນ / ຝາຂັດ FRP ຂີ້ຝຸ່ນຕ້ານແຜ່ນລຽບ ການປົກຫຸ້ມຂອງ tape ການປົກຫຸ້ມຂອງ tape, ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ, ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ slippery.
ຕ້ານການຜິດພາດພຽງແຜ່ນແບນມີຫມູ່ຄະນະ fiberglass prefabricated ທີ່ໃຫ້ພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດພຽງຕົວກັບຊະນິດຂອງ substrate. ຕ້ານການຜິດພາດພຽງແຜ່ນ Flat ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການຕິດຕັ້ງເທິງທາງຍ່າງ, ramps, ທາງຍ່າງ, ຊັ້ນໂຮງງານຜະລິດແລະການນໍາໃຊ້ DIY ຈໍານວນຫຼາຍ. ພວກເຂົາສະເຫນີການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງທີ່ຮ້າຍໄປແລະຍັງສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງໃສ່ຫຼາຍໆ substrates ລວມທັງແຜ່ນ checker ເຫຼັກແບບດັ້ງເດີມຊຶ່ງມີ notoriously slippery ໃນເວລາທີ່ຄວາມຊຸ່ມ. ຕ້ານການຜິດພາດພຽງແຜ່ນແບນຜະລິດຈາກ FRP (fiber reinforced plastics) / GRP (ແກ້ວ, ເສັ້ນໃຍພາດສະຕິກ) ເພື່ອສະຫນອງຜະລິດຕະພັນສຸດທີ່ເຄັ່ງຄັດແລະທົນທານ. ຜະລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້ຖືກນໍາໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມການທົດສອບຫຼາຍທີ່ສຸດ. ແຜ່ນສະໄລແຜ່ນຕ້ານທານແມ່ນທາງເລືອກທີ່ດີທີ່ສຸດສໍາລັບການຈັດການກັບສິ່ງທີ່ມີອັນຕະລາຍ. ລະບົບສໍາເລັດຮູບສະຫນອງການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຜິດປົກກະຕິໃນສະພາບທີ່ມີຄວາມຊຸ່ມຫຼືມີນໍ້າມັນ.
ຄຸນນະສົມບັດແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງການຕິດຕັ້ງ Skidding Anti-Slip FRP ຂັ້ນຕອນແລະ Treads:
1) ຖານ FRP ທີ່ທົນທານຕໍ່ຕ້ານການບິດເບືອນ, ຂະຫຍາຍແລະໃຄ່ບວມ.
3) ພື້ນຜິວຕ້ານຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ດີກວ່າໃນສິ່ງທີ່ມີຫຍາບຂະຫນາດກາງ, ກາງແລະດີ.
5) ທີ່ເຫມາະສົມສໍາລັບການໃຊ້ຊີມັງ, ໄມ້, ອິດ, ແກນແລະໂລຫະ, ແລະການໃຊ້ພາຍນອກ.
7) ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ – ສາມາດສຽບເຂົ້າໄປໃນບ່ອນທີ່ມີທໍ່ອໍານທານີ / ໂພລີຍູລີເທນ.
9) ສາມາດໄດ້ຮັບການຕິດຕັ້ງເຖິງແມ່ນວ່າໃນເດືອນລະດູຫນາວໂດຍໃຊ້ screws.
11) Available in black or yellow and also black with stripe safety yellow for flat plates and cover covers.
12) ຂັ້ນຕອນຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງຂອງພວກເຮົາກວມເອົາ , ແຜ່ນ, treads ແລະຫມູ່ຄະນະທາງຍ່າງໃຫ້ຄວາມຜິດພາດພຽງການຕໍ່ຕ້ານແລະຄວາມທົນທານໃນດ້ານເຊັ່ນ: inclines, ramps, ແລະ stairs.
13) ອ່ອນແລະເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ກ່ຽວກັບພື້ນເຮືອນສຽງແລະຂັ້ນຕອນ. <Fiberglass grating treads ໄດ Structural Pultruded ໂປຣໄຟລ໌ ladders ແຂງ tread ແຜ່ນບັນໄດກວມເອົາອຸປະກອນລາງລົດໄຟດັງມືດາດຟ້າຫລັງຄາຄອບ Grating FLANGES trays ສາຍ frp ຜະລິດຕະພັນມືການຈັດວາງຂຶ້ນຮູ້ບຸນຄຸນໂປ່ງໃສນ້ໍແລະທໍ່ການປົກຫຸ້ມຂອງພິເສດຄລິບ Grating ຮູ້ບຸນຄຸນ frp molded ການຮູ້ບຸນຄຸນ FRP / GRP walkways ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ. ພື້ນດິນທີ່ມີນ້ໍາຫນັກເບົາແລະມີຄວາມຊຸ່ມແມ່ນເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສໍາຄັນ. ບາງດ້ານເຊັ່ນ: ກະເບື້ອງແລະໂລຫະແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຫລາຍເມື່ອມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ອຸບັດຕິເຫດທີ່ເກີດຂື້ນທີ່ເປັນຜົນມາຈາກຕີນທີ່ຜິດພາດສາມາດເຮັດໃຫ້ອັບອາຍ, ເຈັບປວດແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍ. ມັນກໍ່ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ຈະໃຫ້ມີການປ້ອງກັນການແຜ່ກະຈາຍຊັ້ນເທິງ, ໂດຍສະເພາະໃນພື້ນທີ່ທີ່ມີເງື່ອນໄຂທີ່ສະອາດ. ເສັ້ນປະສາດພື້ນເຮືອນຂອງ Rubber-Cal ແມ່ນເຫມາະສົມແລະເຫມາະສົມໃນການປົກປ້ອງພື້ນທີ່ຂອງທ່ານຈາກຄວາມອັນຕະລາຍຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນຂະນະທີ່ເຮັດໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າທ່ານແລະແຂກຂອງທ່ານມີຄວາມປອດໄພໃນຕີນຂອງທ່ານ. ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຄວາມປອດໄພນີ້ແມ່ນຢູ່ໃນອຸປະກອນຢາງພາລາທີ່ໃຊ້ໃນການເຮັດໃຫ້ພື້ນເຮືອນຂອງພວກເຮົາຕ້ານການຫຼີກລ້ຽງ. ມັນຊ່ວຍເພີ່ມແຮງດຶງດູດຄວາມສະອາດແລະສະກັດກັ້ນຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃນເວລາດຽວກັນ. ທຸກປະເພດຂອງພື້ນເຮືອນ, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ທຸລະກິດ, ຫຼືອຸດສາຫະກໍາ, ສາມາດໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການສະແດງຂອງຢາງພາລາການປູກຢາງພາລາ. ຄຸນນະສົມບັດຕົ້ນຕໍກ່ຽວກັບການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນ slip ຕ້ານການຫຼຸດລົງແມ່ນວ່າພວກເຂົາເຈົ້າເພີ່ມທະວີຄວາມປອດໄພຂອງພື້ນທີ່ປຽກ. ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງທຸລະກິດມີຄວາມສົນໃຈໃນຕາຕະລາງທີ່ບໍ່ແມ່ນບໍລິການດ້ານຢາງເພາະເຫດຜົນນີ້. ບາງສະຖານທີ່ການຄ້າເຊັ່ນຮ້ານອາຫານຮ້ານອາຫານແມ່ນເຂດທີ່ເປັນອັນຕະລາຍທີ່ເບິ່ງຫລາຍໆນໍ້າຕານທີ່ລຸກຂຶ້ນໃສ່ຊັ້ນທີ່ມີຢູ່ຂອງພວກເຂົາ. ໂດຍບໍ່ມີພື້ນເຮືອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພຢູ່ໃນສະຖານທີ່, ຄວາມສ່ຽງຂອງແຮງງານທີ່ພາກັນລົ້ມລົງແລະເຮັດໃຫ້ຕົນເອງບາດເຈັບແມ່ນຫຼາຍກວ່າເກົ່າ. ນອກເຫນືອໄປຈາກພື້ນທີ່ຫ້ອງຄົວ, ບ່ອນນັ່ງເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເຫມາະສົມທີ່ຈະເອົາໃສ່ເຂົ້າໃນເວລາທີ່ມີເງື່ອນໄຂສະພາບອາກາດຊຸ່ມ. ດ້ວຍການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນເທິງຕ້ານການລົ່ນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ດັ່ງກ່າວ, ປະຊາຊົນຈະໄດ້ຮັບຄວາມປອດໄພຫຼາຍຂຶ້ນໃນເວລາທີ່ຕີນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ນີ້ແມ່ນອຸປະກອນຢາງພາລາທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ໃຊ້ໃນການດູດຝາຂອງພວກເຮົາ.
ມັນບໍ່ມີຄວາມລັບທີ່ວ່າ stairs ມີອັນຕະລາຍ. ບໍ່ວ່າສິ່ງທີ່ຕັ້ງຢູ່, ບໍ່ວ່າຈະເປັນທີ່ຢູ່ອາໄສ, ທຸລະກິດ, ຫຼືອຸດສາຫະກໍາກໍ່ຕາມ, ກໍາແພງບາງຄັ້ງກໍ່ອາດເປັນເຫດໃຫ້ເກີດອຸປະຕິເຫດທີ່ຫນ້າເສົ້າໃຈໃນເວລາທີ່ປະຊາຊົນເສຍເວລາ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ວ່າມັນແມ່ນຄວາມຄິດທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຈະຕ້ອງມີການຍຶດຕິດກັບຊັ້ນຢາງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ. ການຍ່າງຍ້ໍາທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼຸດລົງໄດ້ເຮັດໃຫ້ພື້ນທີ່ແຂງໃນດ້ານທີ່ສະດວກສະບາຍແລະປອດໄພ. ຄະນະກໍາມະການຄວາມປອດໄພຂອງຜະລິດຕະພັນຜູ້ບໍລິໂພກໄດ້ຄາດຄະເນວ່າມີອຸປະຕິເຫດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບບັນໄດ 1 ລ້ານບາດຕໍ່ປີ. ການສຶກສາທີ່ຜ່ານມາໂດຍຄະນະກໍາມະການຄວາມປອດໄພແຫ່ງຊາດລາຍງານວ່າປະມານ 12,000 ຄົນໂດຍເສລີ່ຍໄດ້ເສຍຊີວິດໃນແຕ່ລະປີຫຼັງຈາກການຫຼຸດລົງຈາກລະດັບຫນຶ່ງໄປຫາອີກຫລືຫຼຸດລົງໃນລະດັບດຽວກັນ. ຜູ້ສູງອາຍຸມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການຫຼົ້ມເຫຼວ. ການຂີ່ລົດຖີບຕ່າງໆຂອງພວກເຮົາຖືກອອກແບບມາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການເກີດອຸປະຕິເຫດດັ່ງກ່າວ. ກົດຫມາຍຂອງກາວິທັດບອກພວກເຮົາວ່າມັນເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍທີ່ຈະລົງໄປໃນ stairway ກ່ອນທີ່ຈະຍ່າງຂຶ້ນໄປ. ເຖິງແມ່ນວ່າອຸບັດຕິເຫດອາດຈະເກີດຂຶ້ນກັບບັນໄດ, ມີໂອກາດທີ່ຈະລົ້ມລົງໃນຂະນະທີ່ລົງໄປໃນບັນໄດ. ຫນ້າທີ່ຕົ້ນຕໍຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນບັນລຸຢາງແມ່ນເພື່ອປັບປຸງຄວາມປອດໄພ. ຢາງແມ່ນວັດສະດຸທີ່ມາພ້ອມກັບຄ່າແຮງຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງສູງ. ຄຸນະພາບນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຊັ້ນສູງເພາະວ່າຢາງຈະສະຫນອງການຈັບແລະການດຶງດູດຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຕີນຢູ່ດ້ານເທິງຂອງຕຽງ. ການຂັດຂວາງການຂັດຂວາງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງອຸປະຕິເຫດຫຼຸດລົງແລະຫຼຸດລົງຈາກ staircase ຂອງທ່ານ. ຢາງແມ່ນວັດສະດຸທີ່ມາພ້ອມກັບຄ່າແຮງຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງສູງ. ຄຸນະພາບນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຊັ້ນສູງເພາະວ່າຢາງຈະສະຫນອງການຈັບແລະການດຶງດູດຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຕີນຢູ່ດ້ານເທິງຂອງຕຽງ. ການຂັດຂວາງການຂັດຂວາງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງອຸປະຕິເຫດຫຼຸດລົງແລະຫຼຸດລົງຈາກ staircase ຂອງທ່ານ. ຢາງແມ່ນວັດສະດຸທີ່ມາພ້ອມກັບຄ່າແຮງຂອງຄວາມຂັດແຍ້ງສູງ. ຄຸນະພາບນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນເຫມາະສົມສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນຊັ້ນບັນຍາກາດຊັ້ນສູງເພາະວ່າຢາງຈະສະຫນອງການຈັບແລະການດຶງດູດຫຼາຍຂຶ້ນສໍາລັບຕີນຢູ່ດ້ານເທິງຂອງຕຽງ. ການຂັດຂວາງການຂັດຂວາງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຂອງອຸປະຕິເຫດຫຼຸດລົງແລະຫຼຸດລົງຈາກ staircase ຂອງທ່ານ.
ຫນະຕີນເຫລໍກວິທີການ ຕິດຕັ້ງສະ ເຕນເລດເຫຼັກກ້າ
ພາທະນາຍຄວາມຂຸມ GFRP-Steel’s-Plastic ປະເພດ PPABS ລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນ Welded Steel ແມ່ນຄວາມກະຕັນຍູ /Composite ແມ່ນ FIBERGLASS: Casting, ຫນຽວສໍາລັບທາດເຫຼັກ Manhole COVER ແມ່ນ scum ຫນອງ drapes ປິດທໍ່ຝາລະບາຍນ້ໍາຮູຜູ້ຊາຍຫລວງທໍ່ສໍາເລັດຮູບທໍ່ການຮູ້ບຸນຄຸນ / anchoring ອຸປະກອນການແນບໄດ້ Saddle ແກ້ໄຂ Clip ຕາຕະລາງໄດ້. clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel ຮູ້ບຸນຄຸນ / curbed ບາຍ grating ເຄື່ອງມື Scupper / Stair Tread ດັງ / perforated pegboard Shelves Hook Racking Storage DIY ຊຸດ: grating ໃຍແກ້ວ, ເດັກ overflow ຢາງຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີໄດ້. ເຫຼັກສັງກະສີທົນທານຕໍ່ການກັດເຊາະ ຂີ້ເຫຍື້ອສິ່ງເສດເຫຼືອທີ່ຖືກຝັງໄວ້ໃນແກນ. ແຜ່ນປິດຝາປິດ, ທໍ່ໃຍສັງເຄາະ, ເຫລໍກຫລໍ່, ສະຫນິມ ຖະຫນົນຍ່າງ ອຸປະກອນສຽງຫ້ອຍ hook pin ບອດ Winnipeg Board ກໍາແພງເຫຼັກ perforated hung ເຄື່ອງມືການເກັບຮັກສາ.
# grating ເຫຼັກ grating ໃຍແກ້ວ, overflow sewer ຢາງຢູ່ອ້ອມຂອບຂອງສະນຸກເກີທີ່ສໍາເລັດ, manholes # ປົກຫຸ້ມຂອງ, ແມ່ພິມສໍາລັບການປົກຫຸ້ມຂອງທາດເຫຼັກ, sewer, # FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic ແຂງຮູ້ບຸນຄຸນ, # ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manhole. COVER, #Swimming Overflow ບາຍນ້ໍາ Gully ຮູ້ບຸນຄຸນ Gutter, #Saddle ຄລິບ clamp ລັອກຕົວລັອກ, # ຄລິບລັອກເລືອກຍຶດແຜ່ນ sieve, #Curbed ບາຍນ້ໍາ grating Scupper, ຈັ່ນຈັບ # sieve ໃບຂີ້ເຫຍື້ອກ່ຽວກັບການ sidewalk ຂ້າງຂ້າງການຄວບຄຸມໄດ້, #Egg Crate ປີ້ງການແຜ່ກະຈາຍ. ເຮັດໃຫ້ມີແສງ divider ບອດກະດານຕູ້ # ຄະນະກໍາມະ slatted ປີ້ງ separates ຕັນຫນ້າກາກໄຟຮົ່ມແສງສະຫວ່າງ decorate ຂອງຕູ້ປາ, #Stair. ການປົກຫຸ້ມຂອງຝາຄອບການປົກຫຸ້ມຂອງ Nosing ການປົກຫຸ້ມຂອງການປົກຫຸ້ມຂອງ # Nose ປົກຫຸ້ມ, # Tree ກອງຄວາມປອດໄພຂອບ Grating # ເຟືອງ Paddle Pegboard ຮັດ Racking ເຄື່ອງມືການຈັດເກັບ DIY # ຂີ້ເຫີຍເຫີຍືອກ hook hook hook, paving elevation ຊັ້ນ
ການປົກຫຸ້ມຂອງ ladder fiberglass frp ໄດຢາງປົກ nosing ເປັນທາງເລືອກທີ່ດີສໍາລັບຂັ້ນໄດເພື່ອເພີ່ມຄວາມຄົງທົນແລະຫຼຸດເທິງພື້ນຜິວເຮັດຈາກອາລູມິນຽມ grit ມີ ladder ທີ່ເຮັດດ້ວຍໄມ້, ດິນເປຕັງຫລືໂລຫະ, tape ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດພຽງ. 3M ຄວາມປອດໄພ, ຄວາມຜິດພາດພຽງ Walk ທົນທານຕໍ່ tape ສອດຄ່ອງສໍາລັບການນໍາໃຊ້ທີ່ມີພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ແນ່ນອນສູງ tape roughness. ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນດ້ານລຽບ. ລໍຖ້າອຸປະຕິເຫດ ໃນເຂດພື້ນທີ່ບ່ອນທີ່ມີເສັ້ນທາງຢ່າງກວ້າງຂວາງ ເສັ້ນທາງຫລວງມັກສະເຫມີ. ມັກເຮັດໃຫ້ເກີດການບາດເຈັບຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ແຕ່ພວກເຮົາສາມາດປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຫຼື eanhnakepeneba ผກັບ 3M ເທບໄດ້ຖືກອອກແບບສໍາລັບການນໍາໃຊ້ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂທີ່ເຫມາະສົມ.
Tape Anti ຄວາມຜິດພາດພຽງ Tape ຂຽນ Tape Barrier Tape, tape ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດພຽງ, Tape tape, ກໍລະນີ / ການອອກແບບ, tape, tape ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແລະການຈະລາຈອນ Tape ຂອບເຂດ cassette (ຄໍາເຕືອນເທບ) tape. ສະທ້ອນແສງ
ສາມາດເບິ່ງໄດ້ເມື່ອແສງສະຫວ່າງມີຄວາມຕໍ່າ ແວ່ນຕາກັນແດດປ້ອງກັນ ເທບມ້ວນມ້ວນເທິງມ້ວນທີ່ປອດໄພເພື່ອເບິ່ງຢູ່ໃນຄວາມມືດ ຄວາມປອດໄພທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, tape ທີ່ບໍ່ມີຄວາມຜິດປົກກະຕິທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງສໍາລັບການຕິດຕັ້ງດ້ານເທິງໄດ້ງ່າຍ. ເຊັ່ນ: ພື້ນເຮືອນແກະສະຫຼັກ, ຫີນສີຂີ້ເຖົ່າ, ເຄືອບເຊລາມິກ, ໂລ້ແກນໂຕໂຕ, ເຄືອບດິນເຜົາ, ແກະສະຫຼັກ, ແລະອື່ນໆ. ງ່າຍທີ່ຈະຕິດຕັ້ງ, ດ້ານຂອງແຜ່ນທີ່ບໍ່ແມ່ນແຜ່ນນີ້ແມ່ນຫຍາບ. ເຂດພື້ນທີ່ອ້ອມຮອບສະລອຍນ້ໍາໃນເຮືອ, ດັງ, stairs ຫຼື tilts ພາຍໃນແລະພາຍນອກອາຄານ. ແຜ່ນສະທ້ອນແສງສະທ້ອນ ຫຼື tape ກ່ຽວກັບຖະຫນົນຫົນທາງ glipple:
ເທບທີ່ເຮັດຈາກ PVC TAPE, ທີ່ທົນທານຫຼາຍ, ທົນທານໂດຍ tape ໃນຖະຫນົນສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ. ຈະມີບານແກ້ວທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນກ່ຽວກັບ tape (Glass bleed) ເພື່ອສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງ. ດີຫຼາຍໃນຕອນກາງຄືນ. ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກດ້ານ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປະສົມປະສານກັບ EPOXY Adhesives ຫຼືຫນຽວອື່ນໆ. ເຮັດໃຫ້ມັນຍາວກວ່າ ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ຄວາມອົດທົນສີດໍາຢ່າງຖາວອນຈະບໍ່ປຽບທຽບກັບ Thermoplastic ສີບໍ່ປ່ຽນສີຫຼືປ່ຽນສີເມື່ອໃຊ້ເວລາດົນ. ຊີວິດຍາວຂຶ້ນມີຄຸນສົມບັດທີ່ດີກວ່າ. ບໍລິການທີ່ມີຢູ່ທັນທີ. ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້. ສັນຍານການຈະລາຈອນເທິງຖະຫນົນຫົນທາງທາງຫລວງຂອງເມືອງ. ມີການຈະລາຈອນຢ່າງຮຸນແຮງ ຂ້າມ crosswalk ໄດ້ ມີເສັ້ນທາງສະທ້ອນແສງ:
ການເຮັດ tape ມີ crosswalk ໄດ້ ຄວາມກວ້າງມາດຕະຖານແມ່ນ 50 Cm. ຄວາມຍາວແມ່ນເຫມາະສົມໃນເສັ້ນທາງຍ່າງຕີນ. ໂດຍ tape ເສັ້ນທາງສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນ crossroads. ມີສອງສີທີ່ມີຢູ່: ສີຂາວແລະສີເຫຼືອງ, ແຜ່ນສະທ້ອນແສງມີເສັ້ນເລືອດໄຫຼທີ່ສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງໃນຕອນກາງຄືນ. ນອກເຫນືອຈາກການນໍາໃຊ້ເພື່ອເປັນສັນຍາລັກຂອງເສັ້ນທາງຂ້າມຜ່ານ. ແຜ່ນຖະຫນົນແມ່ນຫຍຸ້ງຍາກ. ສາມາດລື່ນຖະຫນົນດ້ວຍ. ແຜ່ນສະທ້ອນແສງແບບເສັ້ນທາງ ແຜ່ນສະທ້ອນແສງສະທ້ອນ
ສາມາດເຮັດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນເບື້ອງຊ້າຍ, ຂວາ, ແລະອື່ນໆ. ລາຄາແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວລູກສອນທີ່ມັກຈະສະທ້ອນແສງສະຫວ່າງໃນຕອນກາງຄືນ. ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນທຸກດ້ານ. ມັນຖືກນໍາໃຊ້ໃນການປະສົມປະສານກັບ EPOXY Adhesives ຫຼືຫນຽວອື່ນໆ. ເຮັດໃຫ້ມັນຍາວກວ່າ ທົນທານຕໍ່ການກັດກ່ອນ. ຄວາມອົດທົນສີດໍາຢ່າງຖາວອນຈະບໍ່ປຽບທຽບກັບ Thermoplastic ສີບໍ່ປ່ຽນສີຫຼືປ່ຽນສີເມື່ອໃຊ້ເວລາດົນ. ຊີວິດຍາວຂຶ້ນມີຄຸນສົມບັດທີ່ດີກວ່າ. ບໍລິການທີ່ມີຢູ່ທັນທີ. ເຫມາະສໍາລັບການນໍາໃຊ້. ສັນຍານການຈະລາຈອນເທິງຖະຫນົນຫົນທາງທາງຫລວງຂອງເມືອງ. ມີການຈະລາຈອນຢ່າງຮຸນແຮງ ການພັກຜ່ອນເສັ້ນ, ເສັ້ນທາງ, ບ່ອນຈອດລົດ, ຫຼືເສັ້ນແບ່ງເສັ້ນທາງ. Department of Highways Standard
ມີເສັ້ນທີ່ກວ້າງ 10 ຊມ, ສີທີ່ມີສີຂາວ, ສີເຫຼືອງ, ສີແດງແລະສີດໍາ. tape marking ເສັ້ນທາງແມ່ນທົນທານຫຼາຍ. ແລະຫມາກບານໄປເຊຍກັນຢູ່ໃນພື້ນທີ່ tape ເຮັດໃຫ້ມັນສັງເກດເຫັນຫຼາຍໃນຕອນກາງຄືນ. ວັດສະດຸເທບທີ່ເຮັດຈາກ PVC ຊຶ່ງທົນທານຫລາຍ ຊຶ່ງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າ thermoplastic ແມ່ນ: Thermoplastic ສາມາດ crack ໃນເວລາທີ່ມີອາການຊ໊ອກຫຼື scratches. ແຜ່ນສະທ້ອນແສງບໍ່ແຕກ. ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນແສງສະຫວ່າງແລະທົນທານແລະສາມາດທົນຫຼາຍກ່ວາສີ່ thermoplastic
FRP Gritted Plate / Fiberglass Reinforced Plastic Anti Covers -Slip ແຜ່ນ / ຂັ້ນຕອນແລະ Treads.
ແຜ່ນ FRP Gritted Plate ແມ່ນຜະສົມຜະສານຂອງ FRP Flat Flat ດ້ວຍຫນ້າກາກຕ້ານການສົ້ງເອິກ. ພື້ນຜິວທີ່ລຽບງ່າຍແລະສະອາດສໍາລັບອາບນ້ໍາ, ອາບແລະຫ້ອງນ້ໍາ. ພື້ນຜິວທີ່ຫນ້າເຫຼື້ອມຫຼືພື້ນທີ່ຊຸ່ມ ມີຄວາມສ່ຽງສູງຂອງອຸປະຕິເຫດ. ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫ້ອງນ້ໍາແມ່ນມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແຕ່ມີຫຼາຍວິທີແກ້ໄຂເຊັ່ນ: ການເຄືອບຫຼືຜ້າບໍ່ເປືອກຫຸ້ມນອກດ້ານເທິງເຊັ່ນ: ເຊລາມິກ, mosaic, granite ເພື່ອຄວາມປອດໄພ. ຂອງຄົນທີ່ທ່ານຮັກ ແຜ່ນຫນຽວທີ່ທົນທານ, ມີຫຍາບຫນ້ອຍລົງ. ອຸປະກອນດັ່ງກ່າວແມ່ນຂອງ elastic. Texture ອ່ອນ ຍ່າງຕີນເປົ່າ ສະນັ້ນມັນທົນທານຕໍ່ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ. ເຫມາະສໍາຫລັບຫ້ອງນ້ໍາ, ອ່າງອາບນ້ໍາ, ຫ້ອງປ່ຽນ, ຊາວຫນ້າ, ແລວເສດຖະກິດ, ເຮືອ Surfing ສໍາລັບສະຫນາມກິລາສະໂມສອນ ຫ້ອງດໍາລົງຊີວິດ, ຫ້ອງພະຍາບານ, ຕູ້ຄວາມປອດໄພ, ພື້ນເຮືອນທີ່ບໍ່ໄດ້ລື່ນ, ພື້ນເຮືອນທີ່ບໍ່ຫຼົ່ນລົງໃຫ້ຄວາມປອດໄພສູງສຸດສໍາລັບຜູ້ໃຊ້. ໂດຍບໍ່ມີການດູແລພິເສດກັບນ້ໍາບໍາລຸງຮັກສາຟຣີຫຼືນ້ໍາກ່ຽວກັບພື້ນເຮືອນ. ດ້ານທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດພຽງແມ່ນຄວາມຊຸ່ມຫຼືແມ້ກະທັ້ງນ້ໍາ. ໄລຍະເວລາ ຫຼຸດການຕໍ່ຕ້ານ, ເຖິງແມ່ນວ່າໃນເວລາທີ່ຄວາມຊຸ່ມ ,. ຕະຫຼອດຊີວິດຂອງຊັ້ນທີ່ທົນທານຕໍ່ກັບຕົວເຮັດລະລາຍເຊັ່ນນໍ້າມັນ, ນໍ້າມັນ, ກົດ, ແລະອື່ນໆ. ເຫມາະສໍາລັບໃຊ້ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ທົນທານສູງ. ເຊື້ອເຫັດແລະເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ ສີນ້ໍາເງິນສີດໍາລ້າງອອກໄດ້ງ່າຍແລະທົນທານຕໍ່ນ້ໍາມັນ, ຄວາມຮ້ອນ, ການປ້ອງກັນນ້ໍາແລະຫຼຸດຜ່ອນການສະສົມຂອງເຊື້ອແບັກທີເລຍ Coves to joint walls for corner corner. ບໍ່ສະສົມເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ ເທກໂນໂລຍີທີ່ສະອາດງ່າຍສໍາລັບຄວາມສະອາດທີ່ດີຂຶ້ນເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸໃຍສັງເຄາະທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງ. ທັງຫມົດຂອງຮ່າງກາຍທີ່ມີປະສົມບວກເພື່ອຕ້ານກັບການສໍາພັດຕີນ. ຕົວເລືອກ homogeneous ແລະ heterogeneous ມີຢູ່ໃນ FRP ຄຸນນະພາບສູງທີ່ມີຊັ້ນຂອງພື້ນເຮືອນ, ເພື່ອຮັບປະກັນຍາວຊໍາເຮື້ອ fiberglass ປະສິດທິພາບປ້ອງກັນການຫົດຕົວຄຸນນະພາບສູງໃຍແກ້ວ scrim ສໍາລັບສະຖຽນລະພາບມິຕິລະດັບ, ເຊື້ອແບັກທີເຣັຍ, ເຫັດເຮັດໃຫ້ເປັນສະພາບ slippery. ແລະແຫຼ່ງເຊື້ອແບັກທີເຣັຍທີ່ເຮັດລາຍອາຫານ. ພວກເຮົານໍາເອົາສິ່ງປະດິດສ້າງຕໍ່ສານຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີທີ່ແຜ່ລາມອອກໄປສູ່ພື້ນດິນ. ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເຫນື່ອຍລ້າ, ເຊິ່ງຕ້ອງມີຄວາມບໍລິສຸດສູງ, ໂດຍສະເພາະສໍາລັບການຜະລິດອາຫານ. ຢາສະກັດສານຕ້ານເຊື້ອຈຸລິນຊີແລະທາດເຫລໍກ Nano ແມ່ນສົມບູນແບບ. ຊ່ວຍໃຫ້ພື້ນທີ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກມີຄວາມສະອາດຫຼາຍ. ບໍ່ເສຍຄ່າຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່ຈະສະສົມໃນ nook ຂອງແຜ່ນໄດ້. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນພື້ນທີ່ທີ່ຜະລິດອາຫານ (ເຮືອນຄົວ Mats) ຊັ້ນຢາງທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບການລະບາຍນ້ໍາທີ່ສູງ (ລະບາຍນ້ໍາ) ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລື່ນໃນພື້ນທີ່ປຽກ. ຊ່ວຍໃຫ້ພື້ນທີ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກມີຄວາມສະອາດຫຼາຍ. ບໍ່ເສຍຄ່າຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່ຈະສະສົມໃນ nook ຂອງແຜ່ນໄດ້. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນພື້ນທີ່ທີ່ຜະລິດອາຫານ (ເຮືອນຄົວ Mats) ຊັ້ນຢາງທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບການລະບາຍນ້ໍາທີ່ສູງ (ລະບາຍນ້ໍາ) ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລື່ນໃນພື້ນທີ່ປຽກ. ຊ່ວຍໃຫ້ພື້ນທີ່ຢູ່ບ່ອນເຮັດວຽກມີຄວາມສະອາດຫຼາຍ. ບໍ່ເສຍຄ່າຈາກເຊື້ອພະຍາດທີ່ຈະສະສົມໃນ nook ຂອງແຜ່ນໄດ້. ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນພື້ນທີ່ທີ່ຜະລິດອາຫານ (ເຮືອນຄົວ Mats) ຊັ້ນຢາງທີ່ອອກແບບມາສໍາລັບການລະບາຍນ້ໍາທີ່ສູງ (ລະບາຍນ້ໍາ) ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ລື່ນໃນພື້ນທີ່ປຽກ.
Mats ປ້ອງກັນຊັ້ນ:ມັນບໍ່ມີຄວາມລັບວ່າພື້ນເຮືອນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທໍາມະຊາດຂອງທຸກໆສະຖານທີ່. ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີເຮືອນ, ສູນອອກກໍາລັງກາຍ, ກອງປະຊຸມບ່ອນຈອດລົດ, ຫຼືທຸລະກິດການຄ້າ, ຊັ້ນຈະຢູ່ທີ່ນັ້ນເພື່ອໃຫ້ພື້ນຖານສໍາລັບມັນ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ຊັ້ນຕ້ອງການການປົກປ້ອງເກີນໄປ. ການປົກປ້ອງພື້ນເຮືອນແມ່ນມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອປົກປ້ອງພື້ນເຮືອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະມີລາຄາແພງທີ່ເຮັດດ້ວຍວັດສະດຸທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວເຊັ່ນ: ໄມ້, ກະເບື້ອງແລະໂລຫະ. ການປົກຫຸ້ມຂອງຊັ້ນປ້ອງກັນທີ່ເຮັດດ້ວຍຢາງພາລາຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນຄວາມເສຍຫາຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນຈາກປະລິມານການໄຫຼຝຸ່ນສູງ, ການເຄື່ອນຍ້າຍຂອງອຸປະກອນຫນັກແລະເຖິງແມ່ນຜົນຂອງສະພາບອາກາດທີ່ບໍ່ດີ. Rubber-Cal ມີຫລາກຫລາຍມ້ວນປ້ອງກັນພື້ນຢາງທີ່ສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໃນຫຼາຍຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ. ເສັ້ນທາງຂອງພວກເຮົາທາງເລືອກພື້ນເຮືອນທີ່ທົນທານແມ່ນຫມາຍຄວາມວ່າຈະເຮັດຫນ້າທີ່ເປັນອຸປະສັກປ້ອງກັນລະຫວ່າງສິ່ງຂອງ. ເຫຼົ່ານີ້ອາດຈະເປັນທ່ອນຂະຫນາດນ້ອຍຫຼືຜູ້ຂັບຂີ່ຢາງສູງ. ຢາງແມ່ນວັດສະດຸທີ່ດູດຊຶມຜົນກະທົບແລະສາມາດຈັດການກັບຄວາມຫນັກແຫນ້ນຂອງຫນັກແລະຄວາມສັບສົນ. ຫ້ອງນ້ໍາເປັນຕົວຢ່າງທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ຄຸນະພາບນີ້ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນເພາະວ່າພວກເຂົາເປັນເຂດທີ່ເຫັນການປະສົມປະສານຂອງການກະທໍາທີ່ຮຸນແຮງ. ກວມເອົາພື້ນຢາງປ້ອງກັນຢາງແມ່ນມາດຕະຖານສໍາລັບພື້ນທີ່ອອກກໍາລັງກາຍ. ຜ້າຢາງຢາງຫນາຫນາກໍ່ສາມາດອົດທົນຕໍ່ຄວາມກົດດັນຂອງການແລ່ນແລ່ນຫນີຫຼືການອອກກໍາລັງກາຍທີ່ແຂງແຮງຫຼາຍ. ເນື່ອງຈາກອຸປະກອນການອອກກໍາລັງກາຍມັກຈະເຮັດດ້ວຍໂລຫະຫນັກ, ມັນສາມາດຂັດກັບພື້ນຜິວທີ່ບໍ່ໄດ້ປ້ອງກັນແລະເຮັດໃຫ້ເຄື່ອງຫມາຍທີ່ສາມາດສ້ອມແປງໄດ້. ໄມ້ແມ່ນມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນການຂູດ. ເຖິງແມ່ນວ່າຢູ່ໃນຫ້ອງນ້ໍາທີ່ມີການກໍ່ສ້າງຂີ້ຝຸ່ນມັນກໍຍັງເປັນໄປໄດ້ສໍາລັບພື້ນເຮືອນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍຖ້າຫາກວ່າພວກເຂົາຂາດການປົກປ້ອງພື້ນທີ່ເຫມາະສົມ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ທ່ານຈະຊ່ວຍປະຢັດພື້ນທີ່ທີ່ມີຢູ່ຂອງທ່ານຈາກຄວາມເສຍຫາຍທີ່ແພງ. ລະດັບການປົກປ້ອງທີ່ດີກວ່າຂອງການປົກປ້ອງພື້ນເຮືອນຂອງພວກເຮົານີ້ບໍ່ພຽງແຕ່ນໍາໃຊ້ກັບສະຖານທີ່ທາງການຄ້າເຊັ່ນ: ຫ້ອງນ້ໍາ. Mats ທີ່ບໍ່ແມ່ນ Slip: ມີເຫດຜົນທີ່ດີທີ່ເປັນຫຍັງບໍ່ແມ່ນຜ້າຝ້າຍທີ່ບໍ່ສາມາດຫຼີກເວັ້ນໄດ້ຈາກຢາງ! ອຸປະກອນນີ້ສະເຫນີໃຫ້ມີຄ່າແຮງງານສູງຂອງແຮງສຽດທານທີ່ມີຄວາມສາມາດຈັບໄດ້ດີ. ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຊັ້ນ Mat ບໍລິສັດ, ພວກເຮົາໃຊ້ເວລາປະໂຫຍດຢ່າງເຕັມທີ່ຂອງຄຸນນະພາບທໍາມະຊາດເຫຼົ່ານີ້ແລະເພີ່ມໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີການອອກແບບໂຄງສ້າງ richly ທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຈະຊ່ວຍໃຫ້ຂັດຂວາງການເຄື່ອນໄຫວແລະເພີ່ມຄວາມຕ້ານທານຄວາມຜິດພາດພຽງໃນພື້ນທີ່ slick ແລະປຽກ. ທີ່ສົມບູນແບບສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າທີ່ຢູ່ອາໄສ, ການຄ້າ, ອຸດສາຫະກໍາຫຼື, ພື້ນຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງຂອງພວກເຮົາຈະຊ່ວຍປົກປັກຮັກສາບຸກຄົນທົ່ວໄປ, ລູກຄ້າ, ແລະພະນັກງານຈາກອຸປະຕິເຫດທີ່ມີທ່າແຮງທີ່ຮ້າຍກາດທີ່ອາດຈະສົ່ງຜົນໃນໃບບິນຄ່າປິ່ນປົວຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ. ການຫຼຸດລົງແລະການເດີນທາງສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍກ່ວາປະຊາຊົນຈໍານວນຫຼາຍຮັບຮູ້; ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາພະຍາຍາມກໍານົດໃຫ້ພວກເຂົາຢູ່ໃນທຸກໆໂອກາດ. mats ທີ່ບໍ່ແມ່ນຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຮົາແມ່ນຕັດທີ່ຕ້ອງການ, ແລະມີຢູ່ໃນ 50p. ພວກເຂົາຍັງງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງແລະງ່າຍຕໍ່ການຮັກສາ! Stairs Mats: Stairways ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍຫຼາຍກ່ວາພວກເຂົາເບິ່ງຄືວ່າ, ໂດຍສະເພາະເມື່ອມີຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ! ການຫຼຸດລົງຢູ່ທຸກບ່ອນແມ່ນເຫັນໄດ້ຊັດເຈນຫນ້ອຍກວ່າທີ່ເຫມາະສົມ (ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມັນມີຄວາມອ່ອນໂຍນ), ແຕ່ວ່າເມື່ອເລື່ອນລົງໃນບັນໄດກໍ່ສາມາດເປັນອັນຕະລາຍທີ່ສຸດ. ເຮັດໃຫ້ stairs ຂອງທ່ານມີຄວາມປອດໄພກວ່າທີ່ມີ Floor Mat Company ຂອງ stairs mats. ມີການອອກແບບແລະຂະຫນາດໃຫຍ່, stairs treads ແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການໃຊ້ງານພາຍໃນແລະພາຍນອກ. ງ່າຍຕໍ່ການຕິດຕັ້ງ, ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາແມ່ນເຫມາະສົມສໍາລັບການເພີ່ມຄວາມປອດໄພຂອງຄວາມຊຸ່ມຊື່ນ, ແລະເພີ່ມຄວາມດຶງດູດແລະການຈັບກັບບັນໄດທຸກຢ່າງ – ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນບ່ອນຈອດລົດ, ສະໂມສອນອາພາດເມັນ, ຫຼືສະຖານທີ່ທາງການຄ້າແລະອຸດສາຫະກໍາ. ພວກເຮົາມັກໃຊ້ວັດຖຸທີ່ທົນທານຕໍ່ນ້ໍາເພື່ອເຮັດໃຫ້ຖົງຂອງພວກເຮົາ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ພວກມັນງ່າຍຕໍ່ການເບິ່ງແຍງ. ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນການແລ່ນ stairs ຂອງພວກເຮົາພາຍໃຕ້ນ້ໍາເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງລະອຽດຫຼືພຽງແຕ່ແປງໃຫ້ພວກມັນອອກດ້ວຍດອກໄມ້ດອກຫຼືເປັດ. ນອກຈາກສະເຫນີຄຸນນະພາບຄວາມປອດໄພອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດເພີ່ມການອຸທອນທີ່ສວຍງາມບາງຢ່າງ. ມີຈໍາຫນ່າຍໃນການອອກແບບຕົກແຕ່ງບາງໆຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫນ້າຮັກເພື່ອເບິ່ງໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນປະຕິບັດຮູບລັກສະນະມືອາຊີບຫຼາຍ. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການຫຍັງ, ພວກເຮົາເກືອບຈະແນ່ໃຈວ່າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຫນ້າສົນໃຈກັບຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານ! ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນການແລ່ນ stairs ຂອງພວກເຮົາພາຍໃຕ້ນ້ໍາເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງລະອຽດຫຼືພຽງແຕ່ແປງໃຫ້ພວກມັນອອກດ້ວຍດອກໄມ້ດອກໄມ້ຫຼືເປົ່າ. ນອກຈາກສະເຫນີຄຸນນະພາບຄວາມປອດໄພອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດເພີ່ມການອຸທອນທີ່ສວຍງາມບາງຢ່າງ. ມີຈໍາຫນ່າຍໃນການອອກແບບຕົກແຕ່ງບາງໆຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫນ້າຮັກເພື່ອເບິ່ງໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນປະຕິບັດຮູບລັກສະນະມືອາຊີບຫຼາຍ. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການຫຍັງ, ພວກເຮົາກໍາລັງແນ່ໃຈວ່າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ສໍານຶກເຖິງຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານ! ທ່ານສາມາດດໍາເນີນການໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນການແລ່ນ stairs ຂອງພວກເຮົາພາຍໃຕ້ນ້ໍາເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາເຮັດຄວາມສະອາດຢ່າງລະອຽດຫຼືພຽງແຕ່ແປງໃຫ້ພວກມັນອອກດ້ວຍດອກໄມ້ດອກຫຼືເປັດ. ນອກຈາກສະເຫນີຄຸນນະພາບຄວາມປອດໄພອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ນອກຈາກນີ້ຍັງສາມາດເພີ່ມການອຸທອນທີ່ສວຍງາມບາງຢ່າງ. ມີຈໍາຫນ່າຍໃນການອອກແບບຕົກແຕ່ງບາງໆຂອງພວກເຮົາແມ່ນຫນ້າຮັກເພື່ອເບິ່ງໃນຂະນະທີ່ຄົນອື່ນປະຕິບັດຮູບລັກສະນະມືອາຊີບຫຼາຍ. ບໍ່ວ່າທ່ານຕ້ອງການຫຍັງ, ພວກເຮົາເກືອບຈະແນ່ໃຈວ່າມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງທີ່ຫນ້າສົນໃຈກັບຄວາມຕ້ອງການແລະຄວາມປາຖະຫນາທີ່ເປັນເອກະລັກຂອງທ່ານ!
ບໍ່ມີ Skidding FRP Step Covers and Treadsເປັນການແກ້ໄຂໄວແລະງ່າຍດາຍສໍາລັບ greasy, stairs slippery ທີ່ບໍ່ສາມາດໄດ້ຮັບການ painted ຫຼືເຄືອບເນື່ອງຈາກສະພາບອາກາດ, ການຂາດການ downtime ຫຼືຖືກທໍາລາຍສານເຄມີ. ປົກຄຸມຂັ້ນຕອນແລະປ້ອງກັນຝາ FRP ປ້ອງກັນຄວາມຊຸ່ມຊື້ນມີພື້ນທີ່ປ້ອງກັນຄວາມຫນາແຫນ້ນທີ່ມີຄວາມຫນາແຫນ້ນຫນັກແຫນ້ນເຊິ່ງກົງກັບເກົ້າອີ້ FRP ແລະ Walkways. ບໍ່ມີ Skidding FRP ຂັ້ນຕອນປົກຫຸ້ມແມ່ນມີຄວາມທົນທານທີ່ທົນທານຕໍ່ການຄວບຄຸມໄຟຟ້າທີ່ມີຄວາມທົນທານແລະມີການຕິດຕັ້ງສໍາລັບການ stairs. ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທັງພາຍນອກແລະພາຍໃນແລະມີຄວາມເຫມາະສົມສໍາລັບການສີມັງ, ໄມ້, ກ້ອນຫີນ, ໂລຫະ, brick ຫຼືຂັ້ນຕອນຄວາມກະຕັນຍູບໍ່ skid FRP ຂັ້ນຕອນປົກແມ່ນ້ໍາຫນັກເບົາ, ອະເນກປະສົງໃນການຕິດຕັ້ງງ່າຍ, ສາມາດໃຊ້ໄດ້ສີດໍາ, ສີເຫຼືອງຫຼືສີດໍາກັບດັງເຫຼືອງເພື່ອຄວາມສະດວກ. identification ຂອງພວກເຮົາບໍ່ມີ skid FRP Treads ຖືກສ້າງຂຶ້ນດ້ວຍສ່ວນຜະສົມບັດຂອງພວກເຮົາຂອງ abrasives ແຮ່ນໍາໃຊ້ໃນໄລຍະເສັ້ນໃຍງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະຫມູ່ຄະນະ polymer reinforced. ຫຼາຍຄົນທີ່ຕົກຢູ່ເທິງບັນໄດກໍ່ເກີດຂຶ້ນຢູ່ແຄມແຂນຂອງຂັ້ນຕອນໃນເວລາທີ່ຫນ້າດິນແລະແຂບຈະເປັນຮູບກົມ. ນ້ໍາ, ຝຸ່ນ, ຝຸ່ນ, ນ້ໍາຕານ, ນ້ໍາມັນຢູ່ເທິງຊັ້ນສູງກໍ່ເຮັດໃຫ້ບັນຫາໃນການສ້າງສະຖານະການອັນຕະລາຍຮ້າຍແຮງ. ບໍ່ມີ skidding? ຂັ້ນຕອນການປົກຫຸ້ມຂອງແລະຂັ້ນຕອນທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອນໍາໃຊ້ໃນຂັ້ນຕອນທີ່ມີຢູ່ແລ້ວແລະສ້າງພື້ນທີ່ທີ່ມີຄວາມປອດໄພແລະລວດໄວທີ່ມີຄວາມສະດວກສະບາຍທີ່ສະດວກສະບາຍ.
ຢາງເສັ້ນໄຍ reinforced (FRP) ( ເອີ້ນວ່າຍັງເສັ້ນໄຍ reinforced polymer, ຫຼືເສັ້ນໄຍ reinforced plastics) ເປັນວັດສະດຸຜະໄດ້ຂອງມາຕຣິກເບື້ອງພໍລິເມີເສີມໃຫ້ແຂງດ້ວຍເສັ້ນໄຍ. ເສັ້ນໃຍແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວແກ້ວ, ກາກບອນ, aramid, ຫຼື basalt. ເກືອບວ່າ, ເສັ້ນໄຍອື່ນໆເຊັ່ນເຈ້ຍ, ໄມ້, ຫຼືອາຄານກໍ່ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້. ໂພລີເມີແມ່ນປົກກະຕິແລ້ວເປັນກົດເອເລັກໂຕຣນິກ, vinylester ຫຼື polyester thermosetting plastics, ເຖິງແມ່ນວ່າຝຸ່ນ phenol formaldehyde ແມ່ນຍັງຢູ່ໃນການນໍາໃຊ້. FRPs ຖືກນໍາໃຊ້ໂດຍທົ່ວໄປໃນອຸດສາຫະກໍາການບິນ, ຍານຍົນ, ທະເລແລະກໍ່ສ້າງ. ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນພົບເຫັນທົ່ວໄປໃນປະເພດເກາະພ້ອມກັນ.
ຜະລິດຕະພັນ Polymer ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນຜະລິດໂດຍການກໍ່ສ້າງແບບຍືດຫຍຸ່ນຂັ້ນຕອນຫຼືການສະກັດກັ້ນ polymerization. ເມື່ອສົມທົບກັບຕົວແທນຕ່າງໆເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍຫຼືໃນວິທີການປ່ຽນແປງຄຸນສົມບັດວັດສະດຸຂອງໂພລິເມີຜົນໄດ້ຮັບການຫມາຍເຖິງເປັນພາດສະຕິກ. ພາດສະຕິກ Composite ອ້າງອີງເຖິງປະເພດຂອງພາດສະຕິກທີ່ເກີດຈາກການເຊື່ອມໂຍງສອງຫຼືຫຼາຍກວ່າວັດສະດຸທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນທີ່ມີຄຸນສົມບັດວັດສະດຸທີ່ແຕກຕ່າງກັນເພື່ອບັນລຸຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບທີ່ມີຄຸນສົມບັດທີ່ຕ້ອງການແລະຄຸນສົມບັດກົນຈັກ. ພາດສະຕິກທີ່ໄດ້ຮັບການເສີມເສັ້ນໄຍແມ່ນປະເພດຂອງພາດສະຕິກປະສົມທີ່ນໍາໃຊ້ວັດສະດຸເສັ້ນໄຍໂດຍສະເພາະເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມຍືດຫຍຸ່ນຂອງພາດສະຕິກ. ວັດຖຸດິບພາດສະຕິກຕົ້ນສະບັບໂດຍບໍ່ມີການເສີມເສັ້ນໄຍແມ່ນເປັນມາຕາຖານຫຼືຕົວແທນການຜູກ. ມາຕຣິກເບື້ອງແມ່ນຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ຂ້ອນຂ້າງຂ້ອນຂ້າງແຕ່ອ່ອນແອທີ່ແຂງແຮງທີ່ແຂງແຮງທີ່ແຂງແຮງທີ່ແຂງແຮງທີ່ແຂງແຮງຕື່ມອີກ. ໃນຂອບເຂດທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະ elasticity ແມ່ນການປັບປຸງຢູ່ໃນຢາງເສັ້ນໄຍ reinforced ຂຶ້ນຢູ່ກັບຄຸນສົມບັດກົນໄກຂອງທັງສອງເສັ້ນໄຍແລະມາຕຣິກເບື້ອງ, ປະລິມານພີ່ນ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າກັບບຸກຄົນອື່ນ, ແລະຄວາມຍາວເສັ້ນໃຍແລະປະຖົມນິເທດພາຍໃນມາຕຣິກເບື້ອງໄດ້. . ລະບົບການມາຕຣິກເບື້ອງໄດ້ເກີດຂື້ນໂດຍຄໍານິຍາມໃນເວລາທີ່ງານວາງສະແດງ FRP ວັດສະດຸເພີ່ມຂຶ້ນມີຄວາມເຂັ້ມແຂງຫລືຄວາມຍືດຫຍຸ່ນພີ່ນ້ອງກັບຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະ elasticity ຂອງມາຕຣິກເບື້ອງໄດ້ຢູ່ຄົນດຽວ.
FRP ສາມາດນໍາໃຊ້ເພື່ອເສີມສ້າງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນຂອງຖັນ, ຖັນແລະກ່ອງອາຄານແລະຂົວ. ມັນເປັນໄປໄດ້ທີ່ຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະມາຊິກໂຄງສ້າງເຖິງແມ່ນວ່າຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຫນັກເນື່ອງຈາກເງື່ອນໄຂການໂຫຼດ. ໃນກໍລະນີຂອງສະມາຊິກຄອນກີດອັດແຮງທີ່ເສຍຫາຍ, ນີ້ທໍາອິດຈະຕ້ອງສ້ອມແປງຂອງສະມາຊິກໄດ້ໂດຍຖອນ debris ວ່າງແລະການຕື່ມຢູ່ຕາມໂກນແລະ Crack ກັບ mortar ຫຼື epoxy ້ໍາຢາງ. ເມື່ອສະມາຊິກໄດ້ຖືກສ້ອມແປງ, ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງສາມາດໄດ້ຮັບການບັນລຸຜົນໄດ້ໂດຍຜ່ານການຄວາມຊຸ່ມ, ມືວາງຂຶ້ນຂອງຜຸ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ແຜ່ນໄຟເບີທີ່ມີ້ໍາຢາງ epoxy ແລ້ວຍື່ນຄໍາຮ້ອງຂໍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າກັບຫນ້າອະນາໄມແລະການກະກຽມຂອງສະມາຊິກໄດ້. ສອງເຕັກນິກແມ່ນໄດ້ຮັບການຍອມຮັບທົ່ວໄປສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງ beams, ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການເພີ່ມກໍາລັງຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຕ້ອງການ: ຄວາມເຂັ້ມແຂງ flexural ຫຼື shear strengthen. ໃນຫລາຍໆກໍລະນີມັນອາດຈະມີຄວາມຈໍາເປັນເພື່ອໃຫ້ມີການປັບປຸງຄວາມເຂັ້ມແຂງທັງ. ສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມຂື້ນຂອງເຟືອງ, ແຜ່ນ FRP ຫຼືແຜ່ນແມ່ນໃຊ້ກັບຄວາມກົດດັນດ້ານຫນ້າຂອງສະມາຊິກ (ຫນ້າດ້ານລຸ່ມສໍາລັບສະມາຊິກທີ່ມີພຽງແຕ່ loading loading ຫຼື gravity loading). ເສັ້ນໃຍດຶງຫລັກຢູ່ໃນແກນປະຕູຍາວຄ້າຍຄືກັບການເສີມເຫລໍກກ້າມພາຍໃນຂອງຕົນ. ນີ້ຈະເພີ່ມຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງແລະຄວາມແຂງຂອງມັນ (ຄວາມຕ້ອງການທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມແຕກຕ່າງ), ແຕ່ຈະຫຼຸດລົງຄວາມສາມາດໃນການບີບອັດແລະທໍ່. ສໍາລັບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການສ້ອມແປງຂອງເຟືອງ, FRP ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ຢູ່ໃນເວັບ (ດ້ານ) ຂອງສະມາຊິກທີ່ມີສື່ມວນຊົນເສັ້ນໃຍກ້າມຊີ້ນ transverse ກັບ beam ຂອງແກນ longitudinal ໄດ້. ການຕໍ່ຕ້ານຂອງກໍາລັງຕັດແມ່ນໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດໃນລັກສະນະທີ່ຄ້າຍຄືກັນກັບຕ່ອງໂສ້ເຫຼັກພາຍໃນ, ໂດຍການຂັດຂີ້ເຫຍື້ອທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດ. FRP ສາມາດນໍາໃຊ້ໃນການຕັ້ງຄ່າຕ່າງໆ, ຂຶ້ນຢູ່ກັບປະເຊີນຫນ້າຢູ່ສໍາຜັດຂອງສະມາຊິກແລະລະດັບຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ຕ້ອງການໄດ້, ນີ້ປະກອບມີ: ພັນທະບັດຂ້າງ, U-ຫໍ່ (U-jackets), ແລະປິດຫໍ່ (ຫໍ່ສໍາເລັດ). ການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ພັກຂ້າງຄຽງການນໍາໃຊ້ FRP ກັບທັງສອງດ້ານຂອງ beam ເທົ່ານັ້ນ. ມັນສະຫນອງການຈໍານວນຫນ້ອຍຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງ shear ເນື່ອງຈາກຄວາມລົ້ມເຫລວທີ່ເກີດຈາກ de-ພັນທະບັດຈາກຫນ້າດິນສີມັງ, ໃນແຄມຟຣີ FRP. ສໍາລັບ U-ຫໍ່, ການ FRP ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ໃນ ‘U’ ຮູບຮ່າງທົ່ວທັງສອງດ້ານແລະທາງລຸ່ມ (tension) ໃບຫນ້າຂອງ beam ໄດ້. ຖ້າຫາກວ່າການປະເຊີນຫນ້າທັງຫມົດຂອງ beam ໄດ້ແມ່ນສາມາດເຂົ້າເຖິງ, ການນໍາໃຊ້ຂອງ wraps ປິດແມ່ນຄວາມປາຖະຫນາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າສະຫນອງການເພີ່ມປະສິດທິແຮງທີ່ສຸດ. ປິດຫໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນໍາໃຊ້ FRP ປະມານ perimeter ທັງຫມົດຂອງສະມາຊິກໄດ້, ເຊັ່ນວ່າບໍ່ມີສິ້ນສຸດແລະຮູບແບບຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງການປົກກະຕິແມ່ນ rupture ຂອງເສັ້ນໃຍ. ສໍາລັບການຕັ້ງຄ່າຫໍ່ທັງຫມົດ, FRP ສາມາດຖືກນໍາໃຊ້ຕາມຄວາມຍາວຂອງສະມາຊິກເປັນເອກະສານແບບຕໍ່ເນື່ອງຫຼືເປັນແຖບແຍກ, ມີຄວາມກວ້າງແລະຄວາມກວ້າງຂອງຕໍາ່ສຸດທີ່ກໍານົດໄວ້. ແຜ່ນສະແຕນເລດອາດຈະໄດ້ຮັບຄວາມເຂັ້ມແຂງໂດຍການນໍາໃຊ້ເສັ້ນລວດ FRP ຢູ່ດ້ານຫນ້າຂອງພວກເຂົາ (ຄວາມກົດດັນ). ນີ້ຈະສົ່ງຜົນໃຫ້ມີການປະຕິບັດທີ່ມີຄວາມຍືດຫຍຸ່ນດີກວ່າ, ເນື່ອງຈາກການຕໍ່ຕ້ານຄວາມກົດດັນຂອງທໍ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຮັບການເສີມໂດຍຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງການຂຸດຂົ້ນຂອງ FRP. ໃນກໍລະນີຂອງ beams ແລະ slabs, ປະສິດທິພາບຂອງການປັບປຸງ FRP ແມ່ນຂຶ້ນກັບການປະຕິບັດຂອງຢາງທີ່ເລືອກສໍາລັບ bonding. ນີ້ແມ່ນໂດຍສະເພາະແມ່ນບັນຫາສໍາລັບການສ້າງຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນໂດຍໃຊ້ການເຊື່ອມຕໍ່ຂ້າງຫຼື U-wraps. ຄໍລໍາປົກກະຕິຖືກຫໍ່ດ້ວຍ FRP ປະມານຮອບຂອງພວກເຂົາ, ເຊັ່ນດຽວກັບການຫຸ້ມຫໍ່ປິດຫຼືຄົບຖ້ວນສົມບູນ. ນີ້ແມ່ນພຽງແຕ່ຜົນໄດ້ຮັບທີ່ມີຄວາມຕ້ານທານທີ່ສູງກວ່າ, ແຕ່ວ່າມັນເປັນການຕັດສິນໃຈສໍາລັບການອອກແບບຂອງຖັນ, ມັນກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມເຂັ້ມແຂງທີ່ເພີ່ມຂື້ນພາຍໃຕ້ການໂຫຼດທາງຂວາງ.
FRP Epoxy fiberglass sheet laminate
ຊຶ່ງເອີ້ນກັນວ່າເອກະສານ insulation, ແຜ່ນໄຟເບີກາດ, ແລະເອກະສານ Epoxy, ມັນແມ່ນເຮັດຈາກຜ້າອີແກ້ວດ່າງຟຣີ impregnated ທີ່ມີຢາງໃສ epoxy ໂດຍການປຸງແຕ່ງຕ່ໍາກວ່າຄວາມຮ້ອນແລະຄວາມກົດດັນ. ມັນເປັນເຈົ້າຂອງມີລັກສະນະຂອງການຕໍ່ຕ້ານອຸນຫະພູມສູງ, ສູງຫຼາຍໄດ້, ຊັ້ນຮຽນທີ Flame retardant ຂອງການ UL94-V0, ຄຸນສົມບັດກົນຈັກສູງແລະຄຸນສົມບັດກໍາບັງໄຟຟ້າ, ການຕໍ່ຕ້ານຄວາມຮ້ອນທີ່ດີ, ທີ່ດີ, ກ້ຽງ, ແລະອື່ນໆ
Fiberglass Panels Reinforced, Fiberglass reinforced plastic, Pultruded Fiberglass Sheets and Composite Materials
ສະເຫນີຂໍ້ໄດ້ປຽບຫຼາຍກວ່າວັດສະດຸພື້ນເມືອງເຊັ່ນ: ໄມ້, ອະລູມິນຽມ, ເຫລໍກ, ເຫລໍກພາດສະຕິກແລະວັດສະດຸອຸ່ນອື່ນໆ. ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ endless ວ່າຜະລິດຕະພັນໄຟເບີກາດເຫຼົ່ານີ້ສະເຫນີໃນຄວາມຫລາກຫລາຍຂອງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວເຊັ່ນ: Handrail ຄອມໂພເນນ RF ໃສ Cell ໃນເວັບໄຊ Enclosure Systems, ແລະ Cooling Towers, ໃຫ້ກັບບຸກຄົນແມ່ນ. ນອກນັ້ນທ່ານຍັງສາມາດຊອກຫາຄໍາຮ້ອງສະຫມັກຫຼືສອງທ່ານທີ່ທ່ານມີໂອກາດເບິ່ງແລະເພີດເພີນກັບສ່ວນບຸກຄົນຫຼືໄດ້ເຫັນກ່ຽວກັບໂຄງການໂທລະພາບເຄເບີນທີ່ຜ່ານມາ. ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້ລວມມີນ້ໍາພຸເຕັ້ນ Mesmerizing ຂອງ Bellagio Hotel on the Las Vegas Strip, ເພື່ອ Deck ສັງເກດການສາມາດເບິ່ງເຫັນລົມຫາຍໃຈກິນ Niagara Falls, ກັບທາງຍ່າງ fiberglass ແລະຕູ້ປາສະຫນັບສະຫນູນໃນ Bay Aquarium Monterey ໃນຄາລີຟໍເນຍ. ການນໍາໃຊ້ເຫຼົ່ານີ້ທັງຫມົດນໍາໃຊ້ວັດສະດຸປະກອບດ້ວຍເສັ້ນໃຍສັງເຄາະແບບໂຄງສ້າງ. ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຖືກເບິ່ງໂດຍລ້ານຂອງປະຊາຊົນໃນແຕ່ລະປີຫຼືຄໍາຮ້ອງສະຫມັກທີ່ຖືກຝັງດີຕ່ໍາກວ່າດ້ານໃນທົ່ວໂລກຂອງ, ເສັ້ນມາດຕະຖານໂຄງສ້າງ FRP ຂອງພວກເຮົາແລະ Custom Profiles Pultruded ຕອບສະຫນອງຫຼືເກີນຄວາມທ້າທາຍຂອງຕະຫຼາດຈໍານວນຫຼາຍທີ່ໄດ້. Sequentia Corrugated Fiberglass reinforced Panels ກະດານມຸງດ້ວຍເສັ້ນໃຍສັງເຄາະແບບຫນາ. ແຜ່ນເຫຼົ່ານີ້ມາແປນຫຼືຢູ່ໃນຫຼາຍຮູບແບບຂອງແຜ່ນກະດານ. ສະຖາປະນິກແລະວິສະວະກອນກໍ່ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກປະໂຫຍດຈາກການປະດິດສ້າງແລະການກໍ່ສ້າງ. ໃນຂະນະທີ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຫມູ່ຄະນະ fiberglass ໃນການນໍາໃຊ້ອຸດສາຫະກໍາຈະເລີນເຕີບໂຕ, ສະນັ້ນຊື່ສຽງຂອງຫມູ່ຄະນະ fiberglass ທີ່ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງ. ຄະນະກໍາມະການຜະລິດກະແສໄຟຟ້າທີ່ຖືກຫຸ້ມໄວ້ແລະຜະລິດຕະພັນທີ່ບໍ່ແມ່ນຫຼັກຊັບສາມາດສັ່ງຊື້ຈາກໂຮງງານແລະສົ່ງໄປໃຫ້ທ່ານໄດ້ໂດຍກົງ.
ຂັ້ນຕອນຂັ້ນຕ່ໍາແລະເລື່ອນນ້ໍາແຂໍງການກໍ່ສ້າງລາຍະລະອຽດການກໍ່ສ້າງ STAIR TREADS DIMENSIONS CONTENT: ຄວາມກວ້າງຂອງການປັບສະລອຍນ້ໍາ & ຂໍ້ກໍາຫນົດການອອກແບບແລະລະຫັດສິນຄ້າ ຄວາມຕ້ອງການ Width ຄວາມກົດດັນຂັ້ນຕອນຂອງການແຕກຕ່າງກັນໂດຍການເປີດຫຼືປິດ Stairway Risers. ຂັ້ນຕອນຂັ້ນຕ່ໍາຄວາມຕ້ອງການຂອງການເຈາະເລີ້ມຂອງຝາແລະຂັ້ນຕອນຂອງບົດຮຽນ. ພາບຖ່າຍ & ແຕ້ມສະແຕນເລີຄວາມຜິດປົກກະຕິ: ຄວາມຫນາແຫນ້ນເກີນໄປ, unrelevant risers. ສິ່ງກີດກັ້ນຫລື Breakaway. ປະສິດທິຜົນຂອງການດໍາເນີນງານຂອງ Stair Tread Lumber Type & ການຮັກສາໄວ້ກ່ຽວກັບຄວາມສ່ຽງຂອງຄວາມເສຍຫາຍແລະ Stair Falls. ສາເຫດທົ່ວໄປຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງ stairs, ຂັ້ນຕອນຫຼືດ້ານອື່ນໆທີ່ຍ່າງນອກ. ການນໍາໃຊ້ສີເພື່ອຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຂັ້ນຕອນແລະຂັ້ນຕອນການປ່ຽນແປງຫຼຸດຜ່ອນການເດີນທາງແລະການບາດເຈັບ
ແຜ່ນ FRP, ແຜ່ນ FRP, ແຜ່ນ FRP
ຢູ່ປະມານ 3-4mm ຫນາ, ແຜ່ນແຂງຂອງພວກເຮົາຫນາແຫນ້ນ (FRP) ຖືກເຄືອບຢູ່ໃນການປະສົມປະສານຂອງທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງຂອງຊີມັງ quartz ແລະອົງປະກອບຂອງຢາງ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຜະລິດຕະພັນຕ້ານ slip ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ. ມັກຈະເປັນທາງເລືອກທີ່ດີກ່ວາເທບແລະສີ, ສະເຫນີການແກ້ໄຂເກືອບຫມົດເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມອັນຕະລາຍ. Sheets Flat ສາມາດຖືກວາງໄວ້ແລະການສ້ອມແປງໂດຍນໍາໃຊ້ການປະສົມປະສານຂອງ adhesives / sealant ແລະ fasteners ເພື່ອແກ້ໄຂ, ຜູກມັດແລະ seal ແນ່ນອນ, ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຊຸ່ມຊື່ນໃດໆ. ແຜ່ນສາມາດຖືກຕັດແລະສໍາເລັດໃນລະດັບປະເພດກ່ອນທີ່ຈະໃຫ້ໃຊ້ສໍາລັບການນໍາໃຊ້ໃນການຕິດຕັ້ງ, ແລະສາມາດຕັດໄດ້ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ໂດຍນໍາໃຊ້ເຄື່ອງມືເພັດຫຼື tungsten. ສາມາດໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂຕໍ່ຫຼາຍຊະນິດຂອງການຍ່ອຍສະຫຼາຍ, ແຜ່ນຄວາມຫນາມາດຕະຖານສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ເຖິງແມ່ນວ່າບ່ອນທີ່ມີຄວາມເສຍຫາຍຫລືຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ຫນ້າດິນທີ່ມີຢູ່.
TwitterShare: Https://twitter.com/GratingThai Https://plus.google.com/+ChanconTh Manhole_Grating_Specialist | ກໍາລັງໄຟຟ້າຂອງເສັ້ນໃຍສັງເຄາະ fiberglass mesh ຢູ່ແຄມແຂນ. FRP-FIBERGLASS STEEL Plastic GRATING | ຖະຫນົນຍ່າງ ຫນຽວ, ສຽງໂຫວດທັງຫມົດທາດເຫຼັກ manholes COVER | ລອຍນ້ໍາຫລາຍເກີນບາຍນ້ໍາ Gully Gutter Grating | ຄລິບລັອກເລືອກຍຶດແຜ່ນ sieve anchoring ອຸປະກອນທີ່ຕິດຄັດມາ Saddle ແກ້ໄຂ Clip Clamp Lock Fastenal Fastener Bar Steel Grating | ເສຍຈັ່ນຈັບ sieve ໃບດ້ານຄວບຄຸມຕາມ sidewalk ບາດວິຖີບາຍນ້ໍາ Grating. Scupper | Egg ຜ້າມ່ານກະດານ Crate slatted ປີ້ງ separates ຕັນຫນ້າກາກໄຟຮົ່ມແສງສະຫວ່າງ decorate ຂອງຕູ້ປາ | ກວມເອົາດັງຂອງທ່ານໃນໄລຍະແຂບ trim ໄດກະດານການປົກຫຸ້ມຂອງ. ແຜ່ນພື້ນຜິວພື້ນເສັ້ນໃຍຄວາມຜິດພາດພຽງແກ້ວ FRP Stair Tread ດັງຂັ້ນຕອນປົກ Protector: FRP ຕ້ານຄວາມຜິດພາດພຽງ Gritted Plate ແຜ່ນ | plank Winnipeg ຄະນະເຫຼັກ perforated ກໍາແພງ hook ສາຍສຽງວົງເລັບແບບປຸ Pegboard Hook Shelves ເຄື່ອງມື Racking ການເກັບຮັກສາ. DIY Kit | wwwchanconcoth | http: // GratingThaicom | http: // GratingThaicomau | http: // Fiberglass Grate-Steel Pipe Lid | com @ Line: @iCHANCON / Line (iD): iCHANCON | ມືຖື (ຂາຍ): 081 932 7894,061 647 0184-6 ໂທ: 02 451 0780-1
FRP ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ Gritted ပြားစာရွက်အဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကား: FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းဖုံးကာကွယ်ပေးသူအဆင့်။ ကြမ်းပြင် Mat, Non-စလစ်မျက်နှာပြင်ဖိုင်ဘာဖန်။
ကိုးကားနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားဖုံးအုပ်ထားပါ။ မျက်နှာပြင်အခင်းစလစ်ဖိုင်ဘာဖန်အဖုံးဖုံး
စာရွက်ပြား / လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်း Gritted FRP အဆင့်ဖုံးစျေးနှုန်း။
FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်း Specification | ဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကား Glass ကို Fiber Mat Features 1) လှေကားတစ်ခုအဖုံးစာရွက်။ တပ်ဦးအင်ဂျင်အိမ်သာကြမ်းပြင်စင်္ကြံစက်ရုံအပေါ်ရှိနေကြပါတယ်။ ရေတံခွန်ချော်တားဆီး အားကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုနှင့်အတူဧရိယာအာူးနှင့်တပုဒ်ကို 2-4 မီတာ၏စံအရှည်စံအရွယ်အစား (အပ်ချုပ်ဆိုင်စေ) ၏ဖြတ်စာရွက်များအတွက်ထောက်ပံ့နိုင်ပါသည်)22-3 ရက်အတွင်း 2-3 ရက် / Delivery အတွင်းအသုံးပြုသောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 3) နှာခေါင်း, မီးခိုးရောင်, အဝါရောင်အရောင်စံပေါ်တွင်အရောင်ဖြစ်ပါသည်: စံ: မီးခိုးရောင်နှင့်ထိုင်းနိုင်ငံအွန်လိုင်းအဝါရောင်နှာခေါင်း တော်လှန်ရေးမှ)4CHIMICAL အလွန်ကောင်းစွာဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်နှင့်အပူ၏တစ်သက်တာတစ်လျှောက်လုံးချေး, သံချေးချေးဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူကြောင်းအခြေအနေမျိုးအတွက်ထူးချွန်ကြာရှည်ခံမှု။ သငျသညျအလွန်အမင်းအက်ဆစ်ကြောင်းတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်တှငျနထေိုငျနိုငျသညျ။ ပင်လယ်၌ဒါမှမဟုတ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်အလုပ်ဧရိယာ၌တပ်ဆင်မှုအတွက်သင့်လျော်သော။
5) အစာအာဟာရကိုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုရန်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မွှားတ္ထုများနှင့်အတူ ဘက်တီးရီးယားကြီးထွားမှုကိုတားစီး အဆိုပါကင်၏မျက်နှာပြင်တွင် အဆိုပါချေးများသောအားဖြင့်အစားအစာနှင့်သောက်များတွင်တွေ့ရှိရပါသည်။ မီးအန္တရာယ်နှင့်အတူဒေသများအတွက်အကြံပြု၏။ မီးခိုးဖြစ်ပေါ်စေပါဘူးတဲ့ဗဓေလသစ်၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မီးတစ်ဦးအနိမ့်မှုနှုန်း။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတပ်ဆင်, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြားပူးတွဲနေရာများများအတွက်သင့်လျော်သော
6) ဖန်မျှင်ထည် mesh နှင့်သတ္တုကင်မကြာခဏဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တွေ့သောတူညီချေးနှင့်အတူအခြားမော်ဒယ်များထံမှထွက်ရပ်တယ်။ ထိုအစွန့်ပစ်ရေစီမံခန့်ခွဲမှု ဗဓေလသစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့သာမန်ဖုံးဖန်မျှင်ထည်ခံနိုင်ထက်မြင့်သောချေးနှင့်အတူ enviroments မှာချေးကာကွယ်တားဆီးဖို့စာရွက်ကနေ 30 ကျော်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။
နှာခေါင်း pads ၏ 7) ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်။ တက်ကိုဖုံးလွှမ်း ထိုအ panel ကိုစလစ်: ​​လှေကားပိတ်နှာခေါင်းဆင်းသက်ပိတ်ဘို့ Nosig ဖုံး || လှေခါးထစ်ဖုံးနှာခေါင်းနှင့်ထိပ်စာရွက် || စာရွက်တစ်နှာခေါင်းမရှိဘဲအရေပြားမျက်နှာပြင်ကိုချွတ်တစ်ပန်းကန်စလစ်ဖုံးအုပ်ထားပါ။
လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးစာရွက်အခင်းစလစ်ဖိုင်ဘာဖန်နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကား။ အစားထိုးဒီဇိုင်းရေးဆွဲ ပလပ်စတစ်ဖျာပလပ်စတစ်စာရွက် Anti-စလစ်ရော်ဘာခင်းလုပ်ကွက်, ရော်ဘာဘန်ပါ, ရေချိုးခန်းအတွင်းကျရောက်ကြောင်းရော်ဘာ Non-စလစ်ရော်ဘာဖုန်မှုန့်, မီးဖိုချောင် non-စလစ်ရော်ဘာရေနုတ်မြောင်းပေါက်တွေရှိပါတယ်။ ရော်ဘာကြမ်းခင်းကြံ့ခိုင်ရေးကစားကွင်း, ပန်းခြံများ, စာသင်ကျောင်းများ, gyms နှင့်မိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပကျနော်တို့ခရီးစဉ်ကိုလျှော့ချ & အန္တရာယ်လဲအရောင်သို့မဟုတ်အခြားအမြင်အာရုံသဲလွန်စများအသုံးပြုခြင်းဆွေးနွေးပါ။ GRP Gritted Solid ပြားကြမ်းခင်းဘယ်မှာကြာရှည်ခံမှုနှင့်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုခြင်းများအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ရှည်လျားပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ဘဝကိုအလွန်အရေးပါသည်။ တစ်ဦးအခင်း GRP Solid ပြားများသောအားဖြင့်အစိုင်အခဲဖို့အတွက် walkway ပေး, ဒါမှမဟုတ်အမြင့်ဆုံးယာဉ်အသွားအလာဒေသများ၏ဘဝတိုးချဲ့ဖို့ရှိပြီးသားအလွှာကျော်တပ်ဆင်ထားသည် gritted အမျှ။ ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံဖန်မျှင်ထည်အစိုင်အခဲပြားကြမ်းခင်းကိုလည်းပေါ်သို့တိုက်ရိုက်သော့ခတ်ထားနိုင်ပါတယ်။ အခြေခံအဆောက်အဦးထုပ်,
နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုစလစ်လှေကားဖိုင်ဘာဖန်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ Glass ကို Fiber / FRP grit စာရွက်ပြား flooring မျက်နှာပြင်စလစ်အဖုံးဖုံး – လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံး။
1. FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူ ( အဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကား): အဆိုပါလှေကားများ၏မျက်နှာဖုံးစာရွက်အဘို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ ရေတံခွန်ချော်တားဆီး အာူးနှင့်တပုဒ်ကိုဧရိယာအားကြီးသောဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံအလျားနှင့်အတူ4မီတာ (ဆိုမှဖြတ် အရွယ်အစား 50cm အဖြစ်လှေကား၏အရှည်မှဖြတ်အလိုရှိသောအရွယ်အစား, 70cm ။ 100cm သို့မဟုတ်ထည့်ပါ။ .. သို့မဟုတ် Add)
Anti-စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ၏ 2. သည် FRP ။ gritted ပန်းကန် sheet (စာရွက်အခင်းမျက်နှာပြင်စလစ်ဖိုင်ဘာဖန်): စံအရွယ်အစား 1.4 4.0 အမ်၏က x (ဆိုအရွယ်အစား IE ကိုနည်းပညာဖြတ်ဖို့ချုပ်လုပ်သင်ရှေ့ဆက် platen စက်တွေချော်ချင်သောဧရိယာ၏အရွယ်အစားအရသိရသည်။ ။ အဆိုပါမျက်နှာပြင်တောက်ပသို့မဟုတ်စိုစွတ်သောဒေသများဖြစ်ပါသည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်စေ၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်ဖြစ်ဖို့ရာအရပျကိုအမြဲစိုစွတ်သောဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောအရွယ်အစား 25x140cm, 50x140cm ။ ဒါမှမဟုတ် 100x140cm ဖြတ်တောက်အဖြစ် antifungal နှင့် antibacterial ။
3. သဲ coated က Surface: slippage ကာကွယ်တားဆီးဖို့ coated သဲ Anti-စလစ်မျက်နှာပြင်, ချောစိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ပင်ရေနံမဟုတ်ပါဘူးကျရောက်ပါတယ်။ အဆိုပါသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံး
အရောင်အပေါ်4.: နျ Standard: Grey ကသို့မဟုတ်ထိုင်းအွန်လိုင်းအဝါရောင်ထိုအမိန့်အထူးအရောင် (အဝါရောင်အရောင်စံမီးခိုးရောင်နှာခေါင်းဖြစ်ပါတယ်) Add အခြားအရောင်များကိုအပိုကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူအမိန့်ထုတ်နိုင်ပါတယ်။ ပိုမိုသိရှိလိုပါကကျေးဇူးပြုပြီး
မဆိုအရွယ်အစား (အပ်ချုပ်ဆိုင်ကိုဖန်ဆင်းရန် 5. ဖြတ် ): အားလုံးသင်အရွယ်အစားဖြတ်နိုင်ပါ။ အဆိုပါဧရိယာ၏အရွယ်အစားကိုက်ညီရန်။ သို့မဟုတ်တည်ဆဲလှေကား
တပ်ဆင်နှင့်ကောင်းမွန်သောကြည့်ဖို့ 6. လွယ်ကူ: အဖုံးစာရွက်အဘို့ကို install ရတာလွယ်ကူပေါ့ပါးလှေကား။ ရေတံခွန်ချော်တားဆီး အဆိုပါအဖွဲ့အစည်းအာူးနှင့်တပုဒ်ကိုအဆင်းလှသောရှိပါတယ်
7. ချေး Chimical Resistance :.အလွန်ကောင်းစွာဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်နှင့်အပူ၏တစ်သက်တာတစ်လျှောက်လုံးအဘယ်သူမျှမချေး။ ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ဆီ, ရေနံ, အက်ဆစ်အဖြစ်ပျော်ရည်များမှခုခံတော်တော်လေးကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှုလိုအပ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော
အဆိုပါ FRP လှေခါးထစ်နင်း Self-ထောက်ပံ့ဖြစ်ကြောင်း , ချေးခံနိုင်ရည်ဖွဲ့စည်းပုံများနှင့်အခြေအနေများတောင်းဆိုကျော်မြင့်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးသေချာစေရန် silica အစေ့ကို အသုံးပြု. အထူး Anti-စလစ်မျက်နှာပြင်နှင့်တကွကြွလာ။ အဆိုပါ GRP လှေကားထစ်နင်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ self-extinguishing.The, polyester အရောင်, Isophthalic ပြီးတော့ Vinilester resins, ထိုအခါလင်းကျောက်နှင့်အတူ, ခွက်မျက်နှာပြင်ဖူးသို့မဟုတ်ကိုဖုံးလွှမ်း Add နိုင်သလား။ : နျ Standard အရောင်များမစ္စတာအဝါရောင်နှာခေါင်းနဲ့ Grey က Are ; တနည်းအားဖြင့်အဆိုပါ, လှေကားထစ်ကိုနင်းနယ်က Black နှာခေါင်းနဲ့ Grey က Be နိုင်သလားမော်ဂျူးများအဆိုပါအမျိုးမျိုးအရွယ်အစား, အရောင်နဲ့ resins နှင့်အတူနေ။ ။ တောငျးဆိုခကျြအပျေါထုတ်လုပ်သော
ငါတို့သည်သင်တို့၏လျှောက်လွှာ suite မှကွဲပြားခြားနားသောသတ်မှတ်ချက်နှင့်အရွယ်အစားနှင့်အတူလှေခါးထစ်ကိုနင်းပူဇော်နိုင်ပါတယ်။ လှေခါးထစ်ကိုနင်းပိရမစ်အမျိုးအစားနှာခေါင်းသို့မဟုတ်လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်ဖို့ nosing ကွက်ပန်းကန်တွေနဲ့ထောက်ပံ့နိုင်ပါတယ်။ လှေခါးထစ်ကိုနင်းနယ်, များစွာသော, ဗိသုကာစီးပွားဖြစ်နှင့်စက်မှုပလီကေးရှင်း Ferrotech ရဲ့အကြမ်းခံ, အန္တရာယ်ကင်းဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, ခံနိုင်ရည်လှေကားထစ်နင်းသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီဖို့အများကြီးစတိုင်များ, ပစ္စည်းများနှင့်မတူကွဲပြား finish ကိုရှေးခယျြစရာအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်ချော်။
ဘယ်လိုတပ်ဆင် FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းပွန်းစားခြင်းနှာခေါင်းမှ အဆင့်ဖုံး
တပ်ဆင်နည်းလမ်း။ ကြမ်းပြင် Mat ဖိုင်ဘာဖန်နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုသံမဏိလှေကားချော်။
လှေကားနင်းအလျားလိုက်လမ်းလျှောက်မျက်နှာပြင်ဖြစ်ပြီး တစ်ဦးချင်းခြေလှမ်း၏။ အဆိုပါနင်းနက်ရှိုင်းသည့်နေ့မှ စ. တိုင်းတာ ဘယ်ဖက်မှာဓာတ်ပုံ၌ငါ့ခြေမအောက်အာကာသတိုင်းတာခံနေရသည့်ခြေလှမ်းများ၏ဦးဆောင်အစွန်းထွက်အထက်ခြေလှမ်းများ၏ခြေလှမ်းနှာခေါင်းသို့မဟုတ်အစွန်း၏အစွန်း။ လှေကားနင်းအတိမ်အနက်ကိုအလျားလိုက်တိုင်းတာခံရကြလိမ့်မည် ကပ်လျက်နင်း၏ဗွေဆော်စီမံကိန်း၏ဒေါင်လိုက်လေယာဉ်များအကြားနှင့်နင်းရဲ့ဦးဆောင်အစွန်းမှလက်ျာဘက်ထောင့်မှာပါ။
SlipGrip သည့် Sprint, ထိုနည်းလမ်းများပီပြင် Flat-စာရွက်ကြမ်းခင်းမှ Flexible
ဒယ်အိုး, ဌာနမှူးကိုယ်ပိုင်နှိပ်နှင့်အတူတစ်) Sealant / ကော်ခုနှစ်တွင်ပေါင်းစပ်, screw နှစ်ခုအားရှင်းလင်းရန်အထက် မှစ. ပီပြင်သည့်အခါ
ကျွန်ုပ်တို့၏ Clear ကိုအထက် မှစ. ပီပြင်ပြီးတော့အောက်တွင်ဆန်ခါယင်း FRP ons ဘယ်အချိန်မှာသည် M ကစားပွဲတင် Clip Nosing နဲ့ပေါင်းပြီး, ခ) ပန်ဌာနမှူးမူလီ,
ဆန့်ကျင်၏ GRP ။ -Slip အခင်း (GritPlate)
တချို့စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအချိန်များအတွက်စက်မှုနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးပတ်ဝန်းကျင်မှာများတွင်အသုံးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာမတော်တဆမှု, ဒဏ်ရာမကြာခဏလျော်ကြေးတောင်းဆိုမှုများမှဦးဆောင်စာရွက်များများအတွက်အလားအလာဆန့်ကျင်ခြင်းဟာအကောင်းဆုံးအကာအကွယ်ပေးသည်။ ဤသည် GritPlate နီးပါး indestructible ဖြစ်ပါသည် / အထောက်အထား-ချိုးနှင့်ပြင်းထန်သောရာသီဥတု variable တွေကိုခံနိုင်ရည်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာအလားအလာစလစ်အန္တရာယ်လည်းမရှိဘယ်နေရာမှာမဆိုသုံးနိုင်တယ်။
FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းသံမဏိ Ladder ခြစ်ဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားအဘို့အဖုံးအသုံးချအဆင့်။ Glass ကိုဖိုင်ဘာ Non-စလစ် pads ။ တစ်သံမဏိလှေကားထိန်သိမ်းပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထား
FRP လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းဖုံးကာကွယ်ပေးသူဖုံးနှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားအဆင့်။ မျက်နှာပြင်အခင်းစလစ်ဖိုင်ဘာဖန်ဖုံးအုပ်ထားပါ။ အဖုံးစာရွက်များလှေကားကိုအသုံးပြုပါ။ ရေတံခွန်ချော်တားဆီး ကိုခိုင်ခံ့စေနှင့်ချောဆင်ခြေလျှောတားဆီးကူညီပေးဖို့စတာတွေလှေကားထိန်သိမ်း, သံမဏိ, သံမဏိ, လူမီနီယံ, ကြွေထည်ပစ္စည်း, terrazzo လှေကား, စကျင်ကျောက်လှေကား, အဖြစ်အဖွဲ့အစည်းတန်ဖိုးထည့်ပါ။ ဒီလိုမျက်နှာပြင်များပေါ်မှာနှိမ်နင်းကာကွယ်တားဆီးဖို့။ လမ်းလျှောက်နေစဉ်အတွင်းဒါကအလွန်အန္တရာယ်များသောနိုင်ဘူး။ ဖိုင်ဘာဖန်၏ဂုဏ်သတ္တိများ။ ဒါဟာရှည်လျားသက်တမ်း, အကြမ်းခံပေါ့ပါး non-တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးနှင့်ဓာတုခံနိုင်ရည်ခရမ်းလွန် Nagm ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာနှစ်ဦးစလုံးအိမ်တွင်းနှင့်အိမ်ပြင်ကို install နိုင်ပါတယ်။ အဆောက်အဦးများအတွက်သင့်လျော်သော လုံခြုံရေးလိုအပ်ချက်များထိုကဲ့သို့သောကျောင်းတွေ, ဆေးရုံတွေ, ရုံးများ, စျေးဝယ်စင်တာများ, ဟိုတယ်များ, လူနေအိမ်အဆောက်အဦးများသို့မဟုတ်ကွန်ဒိုအဖြစ်လမ်းလျှောက်နေစဉ်။
ဆန့်ကျင်စလစ်ကြမ်းပြင်စာရွက်များတည်ဆဲချောကျော် fit စာရွက်များကိုလျှော့ချဖို့သံမဏိ, သစ်သို့မဟုတ်ကွန်ကရစ်ဖို့အတွက် walkway နှင့်ကျရောက်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင်ဆန့်ကျင်စလစ်ကြမ်းပြင်စာရွက်များစက်ရုံနိုင်ပါတယ် များသောအားဖြင့်အဘယ်သူမျှမပိုကုန်ကျစရိတ်မှာအထူးအရွယ်အစားမှဖြတ်။ အဆိုပါဖိုက်ဘာမှန်ကြမ်းပြင်စာရွက်၏လမ်းလျှောက်မျက်နှာပြင် ကဒီချောလမ်းလျှောက်မျက်နှာပြင်တစ်ခုချွေလုံခြုံဖြေရှင်းချက်ပေးပါသည်, Integrated မျက်နှာပြင်မှကပ်လျက်တည်ရှိသောအလွှာသို့မဟုတ် angular Quartz grit နှင့်အတူ coated ဖြစ်ပါတယ်။ ဖန်မျှင်ထည်အစိုင်အခဲပြားကိုအောင်မြင်စွာများတွင်အသုံးပြုထားပြီး အစားအစာအပြောင်းအလဲနဲ့, အဖျော်ယမကာ, ဓာတုအပြောင်းအလဲနဲ့, ရေနှင့်စွန့်ပစ်ကုသမှု, သတ္တုပြီး, ပျော့ဖတ်နှင့်စက္ကူ, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, ဆေးဝါး, အထည်အလိပ်, ရေနံနှင့်ဓာတ်ငွေ့နှင့်သတ္တုတူးဖော်ရေး, ရောစပ်ခြင်းနှင့်သန့်စင်အပါအဝင် – လူအတော်များများစက်မှုလုပ်ငန်း။ anti-စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံဖန်မျှင်ထည်အစိုင်အခဲ .Plate ကြမ်းခင်းဖြစ်ပါတယ် အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစားအတွက်ရရှိနိုင်ပါ။
နှာခေါင်းအစွန်းတိဖုံး panel ကိုလှေကားဖုံးအုပ်ထားပါ။ Sheet များချော Fiber Glass ကို
လှေကားအကျယ်၏အလျားလိုက်အကျယ်ဖြစ်ပါတယ် လှေကားထစ်ဖွင့်လှစ်။ နှစ်ဖက်စလုံးတွင်အကာအရံများကပူးတွဲလှေကားအဘို့, များသောအားဖြင့်သွားရန်လှေကားအကျယ်သူတို့အားနံရံများအကြားအကွာအဝေးသည်။ လှေခါးထစ်နင်း width ကိုညာဘက်အကျယ်ဖို့အလျားလိုက်လက်ဝဲဖြစ်ပါတယ်။ လှေကားနင်း၏။ ယင်းကိုသတိပွု လှေကားနင်းနေတဲ့အစိုင်အခဲ riser ကမထောက်ပံ့သည့်အခါနိမ့်ဆုံးလှေကားထစ်နင်းထူတိုးလာနေပါတယ်။
အဆိုပါနင်းဆင်ခြေလျှောခြင်းနှင့်ပြိုကျအန္တရာယ်အမြင်အာရုံသိသာဖြစ်ကြသည်။ လှေကားစစ်ဆေးရေးတောင်းဆိုနေတာရပါမည်: “ဒီရယ်မိုက်ပြုပြင်ရေးလုပ်အဘယ်အရာကိုဒီလိုက်တယ်လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းနှင့်အဘယ်သူနည်း” ။ နှင့် “တခြားဘာအလုပ်ကြောင့်လူတစ်ဦးကဒီအဆောက်အဦးအပေါ်လုပ်ဆောင်ခဲ့တာလဲ” ။ လှေကားနင်းအတိမ်အနက်ကိုကပ်လျက်နင်း၏ဗွေဆော်စီမံကိန်း၏ဒေါင်လိုက်လေယာဉ်များအကြားနှင့်နင်းရဲ့ဦးဆောင်အစွန်းမှလက်ျာဘက်ထောင့်မှာအလျားလိုက်တိုင်းတာရလိမ့်မည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာကုသသစ်ကိုယ်တိုင်ကသုံးစွဲဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်ဘုံအလေ့အကျင့်နှင့်အချို့သောပတ်သတ်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးရဲ့အဖြစ်လှေကားထစ်ကျဆုံးခြင်းအမှုအပေါ်နည်းနည်းအသုံးဝင် bearing ရှိသင့်သည့်လျှော့ချအသုံးပြုပုံဓါတ်ကုသကတည်းက Non-ရယူထားသောထင်းရှူးသို့မဟုတ် SPF ကျော်ကုသသစ်သုံးစွဲဖို့ပိုပြီးငြိမ်းချမ်းလုံခြုံတဲ့ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံပုပ်၏အန္တရာယ်ပိုမိုပုပ်-ကျရောက်နေတဲ့ရွေးချယ်မှုထက်သစ်သားလှေကားကပိုတာရှည်ခံများနှင့်ဘေးကင်းစေသင့်ပါတယ်။ ။ ဝယ်ယူသည့်အခါအဆိုပါသစ်သားမကြာခဏဓါတ်နှင့်အတူအတော်လေးစိုစွတ်သောဖြစ်၏ ရိုက်တဲ့အခါမှာသူကပင် squirt ပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအဆိပ်သစ်သားကြာရှည်အသုံးပြုခြင်း၏ရပ်နားခြင်းကတည်းကကုသသစ်သားထက်ပိုမူလကပင်အန္တရာယ်ရှိသောသငျသညျသေးငယ်တဲ့, အားနည်း, နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာချွင်းချက်နှင့်အတူအခြားမည်သည့်သစ်သားထက်နင်းနှာခေါင်းတစ်ဖဲ့ကိုရခြင်းကိုဖယ်ရှားသည့်အခါမဟုတ်ပါဘူး။
အဆိုပါနင်းနှာခေါင်းရဲ့အစွန်းပေါ်နင်းသူတစ်ဦးဦး၏အလေးချိန်၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ်ပျောက် nosing ကိုချိုးဖျက်အံ့သောငှါအတွက်လှေကားထစ်နင်းတည်ဆောက်ဖို့အသုံးပြုသစ်သားအစွန်းမှာထုံး၏ရှေ့မှောက်တွင်အဲဒီဒေသမှာထင်း၏အားနည်းချက်တစ်ခုပုံစံထုတ်လုပ်သည်။ အဆိုပါထုံး။ မိုင်ပတ်ပတ်လည်အဖွင့်မှာလည်းရေကိုင်နှင့်တစ်ဦးအေးခဲနေသောရာသီဥတုနှင့်အရှင်အဲဒီဒေသမှာသစ်သားအားရေခဲသို့မဟုတ်နှင်းခဲလောင်သောအသံနှင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါလမ်းလျှောက်မျက်နှာပြင်၏အစွန်းအနီးရှိထင်းတစ်ထုံး၏တစ်ဖက်တစ်ချက်ပေါ်ခွဲထွက်ငါတို့သည်သင်တို့၏ဗီဒီယိုထဲမှာ nosing ပျက်စီးသွားသောနင်း၏ဧရိယာ၏သင့်ရဲ့ဗီဒီယိုမှာစောငျ့ရှောကျတယျ။ ချိုးကျဆုံးခြင်း၏ထိုအချိန်ကသို့မဟုတ်ကြိုတင်ကဖြစ်ပွားခဲ့သည်လျှင်ကျနော်တို့ထူထောင်ကြပြီမဟုတ်ပေမယ့်ငါနှစ်ဖက်စလုံးတွင်အများအပြားလက်မခွဲထွက်စောငျ့ရှောကျကြောင့်နင်းနှာခေါင်းအနည်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းကိုမကျဆုံးမီကွာကျိုးပဲ့ကြောင့်အများဆုံးဖွယ်ရှိစဉ်းစားပါ။ , လက်ဝဲနှင့်လက်ယာ
မအဖြစ်သစ်မျိုးစိတ်များ၏ခိုင်မာသောကွဲပြား မျက်နှာပြင် texture; ( ပို. စျေးကြီးကုန်းပတ်ပေါ်တွင်အသုံးပြုသောအာရဇ် ဥပမာခြေလှမ်းများ, သံလမ်း) တစ်ဦးအတန်ငယ်ပိုပြီး grainy မျက်နှာပြင်ရှိပြီးကုသသစ်သားလာသောအခါခြောက်သွေ့သောထက်လျော့နည်းချောဖြစ်နိုင်သည်။ လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်သောအခြားကုသမှုရှိပါတယ် ထိုကဲ့သို့သောဓါတ်အစွန်းအထင်းအဖြစ်ပြင်ပတွင်သစ်သားကုန်းပတ်ဖို့, လသာဆောင်, သံလမ်း။ ထိုသို့သောကြာရှည်သို့မဟုတ်အစွန်းအထင်းနှစ်ဦးစလုံးအပေါ်အသုံးပြုကြသည် ကုသသစ်သားနှင့်လည်းအာရဇ်သစ်သားကုန်းပတ်ပေါ်နှင့်အချို့သုတ်ဆေးဒြပ်ကုန်းပတ်ပေါ်တွင်လည်းအသုံးပြုကြသည်။
သစ်သားအဘို့ဤအ add-on ထုတ်ကုန်ပေးတယျ နောက်ထပ်လမ်းလျှောက်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ချောရေညှိ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း၏အခွင့်အလမ်းတွေကိုလျှော့ချကြောင်းအချက်များ – ၎င်း၏အသွင်အပြင်တိုးတက်စေခြင်း, ဖွဲ့စည်းပုံ၏ဘဝတိုးချဲ့နှင့်များစွာသောမျက်နှာပြင်တချို့ရေတွန်းလှန်ပေး။ ဤရွေ့ကားချော၏အသုံးအများဆုံးအကြောင်းတရားများဖြစ်ကြသည် လှေကားထစ်ကိုနင်းနယ်ခြေလှမ်းများ, သို့မဟုတ်အခြားပြင်ပလမ်းလျှောက်မျက်နှာပြင်များ။
ကြမ်းပြင် Mat ဖိုင်ဘာဖန်ချော်။ တပ်ဦးအင်ဂျင်တောင်ပေါ် FRP က Non-စလစ်သဲ Surface ကစာရွက်ပြားလေယာဉ်ဆင်းသက်စက်ရုံအိမ်သာထဲမှာတစ်ဦးကကျမ်းပိုဒ်။
ချေး Chimical Resistance သံချေး, အလွန်ကောင်းစွာဓာတုဗေဒခံနိုင်ရည်နှင့်အပူ၏တစ်သက်တာတစ်လျှောက်လုံး corrode မထားဘူး။ ဝတ်ဆင်ရန်လွယ်ကူကြောင်းအခြေအနေမျိုးအတွက်ထူးချွန်ကြာရှည်ခံမှု။ သငျသညျအလွန်အမင်းအက်ဆစ်ကြောင်းတစ်ခုပတ်ဝန်းကျင်တှငျနထေိုငျနိုငျသညျ။ ပင်လယ်၌ဒါမှမဟုတ်ကမ်းခြေတစ်လျှောက်အလုပ်ဧရိယာ၌တပ်ဆင်မှုအတွက်သင့်လျော်သော။ အစားအစာစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်အသုံးပြုရန်တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ မွှားတ္ထုများနှင့်အတူ ဘက်တီးရီးယားကြီးထွားမှုကိုတားစီး အဆိုပါကင်၏မျက်နှာပြင်တွင် အဆိုပါချေးများသောအားဖြင့်အစားအစာနှင့်သောက်များတွင်တွေ့ရှိရပါသည်။ မီးအန္တရာယ်နှင့်အတူဒေသများအတွက်အကြံပြု၏။ မီးခိုးဖြစ်ပေါ်စေပါဘူးတဲ့ဗဓေလသစ်၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မီးတစ်ဦးအနိမ့်မှုနှုန်း။ ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတပ်ဆင်, အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခြားပူးတွဲနေရာများများအတွက်သင့်လျော်သော။ မကြာခဏဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်တွေ့သောတူညီချေးနှင့်အတူအခြားမော်ဒယ်များထက်သတ္တုကင်နှင့်ထင်ရှားတဲ့ဆန်ခါဖန်မျှင်ထည်။ ထိုအစွန့်ပစ်ရေစီမံခန့်ခွဲမှု ဗဓေလသစ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ပန်းကန်ကိုကျော်မြင့်သောချေးနှင့်အတူ enviroments မှာချေးကာကွယ်တားဆီးဖို့စာရွက်ကနေ 30 ကျော်ချက်ပြုတ်နည်းများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ဖန်မျှင်ထည်သာမန်ခံနိုင် အထူး features တွေနှင့်အတူဒုစလစ်ကြမ်းပြင်ကြွေပြားများ။ ထိုကဲ့သို့သောရေနံကဲ့သို့သောအရည်, အက်ဆစ်, ခုခံမြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှုလိုအပ် applications များအတွက်အသုံးပြုကြသည်။ တစ်ဖိုင်ဘာဖန်ဗဓေလသစ်အပေါ်ယံပိုင်းအပူမှရေနံချွတ်ဆေးကြောဖို့ antifungal နှင့် antibacterial, အစွန်းအထင်းကိုခံနိုင်ရည်လွယ်ကူ။ ချော်ကာကွယ်တားဆီးဖို့သဲမျက်နှာပြင်။ ဝန်အမြင့် ဓာတုခံနိုင်ရည်, အက်ဆစ် – အခြေစိုက်စခန်း။ သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ဆီအဖြစ်ပျော်ရည်များ, ရေနံ, အက်ဆစ်တော်တော်လေးကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘက်တီးရီးယားနှင့်မှိုကနေအခမဲ့ စက်ရုံအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပနှစ်ဦးစလုံး။ မြင့်မားသောဇွဲလိုအပ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော။ အကြီးစားစက်မှုလုပ်ငန်းများဥပမာအားဖြင့်, ဒေသများ, ဝန်ဆောင်မှုကောင်တာ။ ပြည်သူ့အိမ်သာ, စင်္ကြံ, လှေကား, စတာတွေအပင်ရော်ဘာ Non-စလစ်ရော်ဘာခင်းစက်ရုံအစားထိုးရန်နိုင်ဘူး။ ရော်ဘာကြမ်းခင်းအိမ်ထောင်စု, ဟိုတယ်များ, ဆေးရုံများ, ဆေးခန်းရော်ဘာရော်ဘာအိမ်သာစင်္ကြံမိတ်ဆက်။ ဝန်ဆောင်မှု Desk ပြည်သူ့အိမ်သာ, စင်္ကြံ, လှေကား, စတာတွေအပင်ရော်ဘာ Non-စလစ်ရော်ဘာခင်းစက်ရုံအစားထိုးရန်နိုင်ဘူး။ ရော်ဘာကြမ်းခင်းအိမ်ထောင်စု, ဟိုတယ်များ, ဆေးရုံများ, ဆေးခန်းရော်ဘာရော်ဘာအိမ်သာစင်္ကြံမိတ်ဆက်။
FRP Gritted ပြား / ဖန်မျှင်ထည်စစ်ကူပလတ်စတစ်တိုက်ဖျက်ရေးစလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံစာရွက်တစ်ရွက်အခင်းမျက်နှာပြင်စလစ်ဖိုင်ဘာဖန်၏လျှောက်လွှာ။ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲတိပ်ရော်ဘာဖျာအခင်းလုပ်ကွက်ချော်ဖုံးလွှမ်းကြ၏။
anti-စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံပြား Sheet များအလွှာအမျိုးမျိုးမှတစ်ခုချက်ချင်း Non-စလစ်မျက်နှာပြင်များကိုအကြံအဖန်တွေချည်းဖိုက်ဘာမှန်ပြားများဖြစ်ကြသည်။ anti-စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံပြား Sheet များဖို့အတွက် walkway, ရိုး, gangways, စက်ရုံကြမ်းပြင်များနှင့်အများအပြား DIY applications များပေါ်တွင်တပ်ဆင်ဘို့စံပြဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအစွန်းရောက်လစ်ခုခံပူဇော်ကိုလည်းတဲ့အခါမှာစိုစွတ်သောနာမည်ဆိုးချောနေသောရိုးရာသံမဏိစစ်ပန်းကန်အပါအဝင်အလွှာ, အမျိုးမျိုးပေါ်ကို install လုပ်ထားနိုင်ပါတယ်။ anti-စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံပြားစာရွက် (ဖိုင်ဘာပလတ်စတစ်အားဖြည့်) / GRP အနေနဲ့အလွန်အမင်းခက်ခဲတဲ့နှင့်တာရှည်ခံထုတ်ကုန်များကို (ဖန်-ဖိုင်ဘာပလတ်စတစ်အားဖြည့်) FRP ကနေထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ထုတ်ကုန်များ၏ဤရွေ့ကားအမျိုးအစားများအများဆုံးစမ်းသပ်ခြင်း enviroments မှာအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ anti-စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံပြားစာရွက်အလားအလာစလစ်အန္တရာယ်များနှင့်ဆက်ဆံရာတွင်အဘို့အဆုံးစွန်ရွေးချယ်မှုဖြစ်ပါတယ်။ အချောစနစ်ကစိုစွတ်သောသို့မဟုတ်အဆီပြန်အခြေအနေများအတွက်မြင့်မားသောစလစ်ခုခံပေးပါသည်။
အင်္ဂါရပ်များနှင့်အဘယ်သူမျှမကနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်တိုက်ဖျက်ရေးစလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ FRP အဆင့်အဖုံးများနှင့်ကိုနင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများ :.
warping ဆန်သောကြောင်း 1) တာရှည်ခံ FRP အခြေစိုက်စခန်း , ဆန့်ခြင်းနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်း။
2) ဆားနှင့်ဆားရေကိုခံနိုင်ရည် ။
3) Superior Anti-စလစ်မျက်နှာပြင် gritted ကြမ်း, အလတ်စားနှင့်ဒဏ်ငွေဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံထဲမှာရရှိနိုင်ပါ။
အားလုံးအတွက် 4) လျင်မြန်စွာလွယ်ကူတပ်ဆင်ခ ရာသီဥတုအခြေအနေ။
5) အတွက်ထစ်ငေါ့အနည်းဆုံးအချိန်ပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်ပျောက်ဆုံးသွားသောအတူ ons တွေကိုချက်ချင်းပင်သွားလာခံရနိုင်သလား
6) သင့်တော်ကွန်ကရစ်အဘို့, Wood က, အုတ်, သတ္တုအသုံးပြုကျောက်ခဲနှင့်ပစ်ပြီးတော့ပြည်ထဲရေး Applications ကိုထိုအပြင်ပန်း။
7) install လုပ်ရလွယ်ကူ – နိုင်ပါတယ် ရာအရပ်သို့လွဲချော်သွားတာတစ်ခုသို့မဟုတ် urethane / polyurethane ကော်နှင့်အတူအရပ်သို့လျှက်ရှိကြောင်း။
8) ကို အသုံးပြု. ဆန်ခါပေါ်ကို install လုပ်ထားရနိုင်သလား ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆန်ခါကလစ်ကိရိယာအစုံ။
9) ပင်ဆောင်းရာသီတွင် install လုပ်ထားရနိုင်သလား screw နှစ်ခုသုံးပြီးလ။
10) ရရှိနိုင်နင်းတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသောအတွက် နဲ့ပြား။
11) ရရှိနိုင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်အဝါရောင်နှင့် လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြားပြားနှင့်ခြေလှမ်းအဖုံးများအတွက်အဝါရောင်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအစင်းနှင့်အတူအနက်ရောင်။
12) ကျွန်ုပ်တို့၏ Anti-စလစ်ခြေလှမ်းအဖုံးများ , ပန်းကန်, နင်းနဲ့နေသောလူသွားလမ်းပြားထိုကဲ့သို့သော, ရိုးလိုစိတျမြားနှငျ့လှေကားအဖြစ်မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်စလစ်-ခုခံနှင့်ကြာရှည်ခံမှုသည်။
13) Lightweight နှင့်အပေါ်အသုံးပြုမှုအတွက်စံပြ ဖွဲ့စည်းပုံအသံသည်အခင်းများနှင့်ခြေလှမ်းများ။ <
ဖန်မျှင်ထည်ခြစ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံလှေကားထစ်နင်း profile များကို Pultruded အစိုင်အခဲပန်းကန်လှေကားထစ်နင်းနှာခေါင်းကိုလက်ရထားလမ်း fittings ကုန်းပတ်ဖုံးလွှမ်းဖုံးအုပ်ခြစ်အနားကွပ် cable ကိုဗူးခွံပွင့်လင်းဆန်ခါလက်ကို တင်. -up, ထုတ်ကုန် FRP ladders တုတ်ကျင်း & ပြွန် FRP FRP / GRP Anti-စလစ် walkways ဆန်ခါပုံသွင်းအထူးဆန်ခါခြစ်ကလစ်များဖုံးလွှမ်း။ တစ်ဦးက slick နှင့်စိုထိုင်းသောကြမ်းပြင်သိသိသာသာအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သည်။ tile ကိုနှင့်ဖျင်နဲ့တူတချို့ကမျက်နှာပြင်များသည့်အခါစိုထိုင်းသောအလွန်ချောဖြစ်လာမှကျရောက်နေတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ တစ်ဦးကိုနေရာခြေလျင်၏ရလဒ်အဖြစ်ပေါ်ပေါက်သောယာဉ်မတော်တဆမှု, ရှက်စရာနာကျင်နှင့်အလွန်အဘိုးထိုက်သောနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာအထူးသဖြင့်စိုစွတ်သောအခြေအနေများမှကျရောက်နေတဲ့ဧရိယာထဲမှာအရပျ၌သတ်မှတ်ထား Anti-စလစ်ကြမ်းပြင်ဖျာရှိသည်ဖို့အမြဲအကောင်းတစ်စိတ်ကူးဖြစ်ပါတယ်။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအခင်းဖျာ၏ရော်ဘာ-Cal ရဲ့မျဉ်းကြောင်းသေချာသင်နှင့်သင့်ဧည့်သည်များသင်၏ခြေအပေါ်လုံခြုံဖြစ်ကြောင်းအောင်စဉ်အစိုဓာတ်၏အန်တရာယျမှသင်၏ဧရိယာကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်စံပြနှင့်တတ်နိုင်ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်။ ဒီဘေးကင်းလုံခြုံမှု၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Anti-နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်အခင်းအောင်ဖို့အသုံးပြုရော်ဘာပစ္စည်းတည်ရှိသည်။ ဒါဟာဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲပိုကောင်းစေပါတယ်နှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာအစိုဓာတ်ကိုဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။ ကြမ်းပြင်အမျိုးအစားတိုင်းကလူနေအိမ်စီးပွားဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်စက်မှုဇုန်ရှိမရှိ, ရော်ဘာဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲဖျာ၏ထံတော်မှအကြိုးခံစားနိုင်ပါတယ်။ Anti-စလစ်ကြမ်းပြင်ဖျာ ပတ်သက်. မူလတန်း feature ကိုသူတို့စိုစွတ်သောဒေသများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုတိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်တွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီအကြောင်းပြချက်၏ရော်ဘာ Non-စလစ်ဖျာတစ်ခုအကျိုးစီးပွားယူပါ။ စားသောက်ဆိုင်မီးဖိုချောင်နဲ့တူအချို့ commercial နေရာများသူတို့ရဲ့တည်ဆဲကြမ်းပြင်ပေါ်သို့ရတဲ့မြည်းကြိုးကိုဖြည်အရည်အများကြီးမြင်သောအန္တရာယ်ရှိသောဒေသများတွင်ဖြစ်ကြသည်။ အရပျ၌မဆိုဘေးကင်းလုံခြုံမှုအခင်းမပါဘဲ ,. သူတို့ကိုယ်သူတို့ချော်နှင့်ဒဏ်ရာရလုပ်သားတွေရဲ့အန္တရာယ်ဝေး သာ. ကြီးမြတ်သည်။ မီးဖိုချောင်ဒေသများအပြင်အဲဒီဖျာစိုစွတ်သောရာသီဥတုအခြေအနေများရှိနေလျှင်ဗိမာန်မှာနေရာစံပြဖြစ်ကြသည်။ ထိုကဲ့သို့သောဒေသများထဲတွင်နေရာရော်ဘာ Anti-စလစ်ကြမ်းပြင်ဖျာနှင့်အတူ, လူတို့သည်မိမိတို့ခြေထောက်ပေါ်နေချိန်မှာပိုပြီးလုံခြုံရေးတွေ့ကြုံခံစားပါလိမ့်မယ်။ ဤသည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်၌အကြှနျုပျတို့၏ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲဖျာများတွင်အသုံးပြုကြောင်းရော်ဘာပစ္စည်းကိုကျေးဇူးတင်သည်။
ဒါဟာလှေကားအလားအလာအန္တရာယ်ရှိသောဖြစ်ကြောင်းအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ လူတွေကသူတို့ခြေကိုဆုံးရှုံးအခါတိုင်းအဘယ်သူမျှမကိစ္စကြောင့်လူနေအိမ်စီးပွားဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်ပင်စက်မှုဇုန်ရှိမရှိဘာ setting ကို, လှေကားအစုတခုတစ်ခါတစ်ရံတွင်လည်ချောင်းနာမတော်တဆမှုများ၏အကြောင်းရင်းရှိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ခြေလှမ်းများအပေါ်အရပ်၌ရှိရော်ဘာလှေကားထစ်နင်းရှိသည်ဖို့အမြဲတမ်းအကြီးစိတ်ကူးသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ non-စလစ်လှေကားထစ်နင်းအဆင်ပြေများနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမျက်နှာပြင်သို့ခက်ခဲမျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်နိုင်ပါတယ်။ စားသုံးသူကုန်ပစ္စည်းအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးကော်မရှင် 1 သန်းလှေကားထစ်-related မတော်တဆမှုတစ်နှစ်လျှင်ဖြစ်ပေါ်ကြောင်းခန့်မှန်းပါတယ်။ အမျိုးသားလုံခြုံမှုကောင်စီကတစ်ဦးကမကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုပျမ်းမျှအကြောင်းကို 12000 လူတွေတယောက်ကိုတယောက်အဆင့်ကနေကျဆုံးသို့မဟုတ်တူညီသောအဆင့်တွင်တစ်ဦးကျဆုံးပြီးနောက်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကွယ်လွန်ဖြစ်ကြောင်းသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများရေတံခွန်မှအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ရှိပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမျိုးမျိုးသော Anti-စလစ်နင်းဖြစ်ပေါ်ထိုကဲ့သို့သောမတော်တဆမှု၏အန္တရာယ်များကို minimize လုပ်ဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။ ဆွဲငင်အား၏ပညတ္အဲဒါကိုတက်ဖို့ထက်တစ်ဦးလှေကားဆင်းဖို့ပိုအန္တရာယ်ရှိသောကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြတယ်။ ယာဉ်မတော်တဆမှုလှေကားတက်ပေါ်ပေါက်နိုင်ပေမဲ့, လှေကားကဆင်းသွားနေချိန်တွင်ပြုတ်ကျတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောအခွင့်အလမ်းလည်းမရှိ။ ရော်ဘာလှေကားထစ်ကိုဖုံးလွှမ်းစရာ၏အဓိက function ကိုဘေးကင်းလုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်ဖြစ်ပါသည်။ ရော်ဘာပွတ်တိုက်မှုတစ်ဦးမြင့်မားသောကိန်းနှင့်အတူကြွလာမယ့်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရညျအသှေးကရော်ဘာဟာဖျာထိပ်ပေါ်ခြေပိုမိုချုပ်ကိုင်နှင့်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲပေးလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှေကားထစ်ဖျာများအတွက်သုံးစွဲဖို့ပြီးပြည့်စုံသောပစ္စည်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ anti-စလစ်နင်းကိုအလွန်တစ်စလစ်၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနှင့်သင့်လှေကားအပေါ်ဖြစ်ပွားခြင်းမှမတော်တဆကျလိမ့်မည်။ ရော်ဘာပွတ်တိုက်မှုတစ်ဦးမြင့်မားသောကိန်းနှင့်အတူကြွလာမယ့်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရညျအသှေးကရော်ဘာဟာဖျာထိပ်ပေါ်ခြေပိုမိုချုပ်ကိုင်နှင့်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲပေးလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှေကားထစ်ဖျာများအတွက်သုံးစွဲဖို့ပြီးပြည့်စုံသောပစ္စည်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ anti-စလစ်နင်းကိုအလွန်တစ်စလစ်၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနှင့်သင့်လှေကားအပေါ်ဖြစ်ပွားခြင်းမှမတော်တဆကျလိမ့်မည်။ ရော်ဘာပွတ်တိုက်မှုတစ်ဦးမြင့်မားသောကိန်းနှင့်အတူကြွလာမယ့်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအရညျအသှေးကရော်ဘာဟာဖျာထိပ်ပေါ်ခြေပိုမိုချုပ်ကိုင်နှင့်ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲပေးလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လှေကားထစ်ဖျာများအတွက်သုံးစွဲဖို့ပြီးပြည့်စုံသောပစ္စည်းကိုမှန်ကန်စေသည်။ anti-စလစ်နင်းကိုအလွန်တစ်စလစ်၏အန္တရာယ်ကိုလျှော့ချနှင့်သင့်လှေကားအပေါ်ဖြစ်ပွားခြင်းမှမတော်တဆကျလိမ့်မည်။
တစ်သံမဏိဇယားကွက်ဖွဲ့စည်းပုံတွဲနေတဲ့လှေကားကို install လုပ်နည်း
ဘယ်လိုတပ်ဆင်သံမဏိခြစ်လှေခါးထစ် Ladder ရန်။
# ဖိုင်ဘာဖန်ဆန်ခါသံမဏိဆန်ခါ, ရေကန်၏အစွန်းန်းကျင်ပလပ်စတစ်ရဆေိုးလျတ်, # အဖုံး manholes ပြီးစီးသံအဖုံးများ, အပ်ချုပ်သူ, # FRP-ဖန်မျှင်ထည်သံမဏိပလတ်စတစ်ဆန်ခါ, # ကျဇယား-သို့ကာစ်-သံ MANHOLE သွန်းလေ၏။ အဖုံး, #Swimming လျှံ သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Gully မြောင်းဆန်ခါ, #Saddle ကလစ်ညှပ်သော့ခတ် Fastener, # optional ကိုသော့ခတ်ကလစ် # ဆန်ခါထောင်ချောက်, အထိန်းချုပ်လိုက်ခြင်းခြမ်းအနားမှာလမ်းဘေးအပေါ် #Egg သေတ္တာကင်ပျံ့အမှိုက်သရိုက်အရွက်, #Curbed သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း Scupper ဆန်ခါ, ထိုဆန်ခါပန်းကန်လုံလုံခြုံခြုံ။ Divide အလင်းရောင်ငါးမွေးကန် panel ကို # panel ကိုလိုက်ကာကင်အလင်းကိုအရိပ်အလင်းအိမ်အတွက်ငါးမွေးကန်, #Stair အလှဆင်မျက်နှာဖုံးလုပ်ကွက်ခွဲခြား slat ။ နှာခေါင်းနှင့်ထောင့်တိအဖုံး panel ကိုလှေကားချော်နင်းနှာခေါင်းအဆင့်ဖုံးကာကွယ်ပေးသူ # ဖုံး, #Tree စောင့်တပ်ဖွဲ့အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးခြစ် Frame က # -frame ကင်သစ်ပင်၏အခြေစိုက်စခန်းကာကွယ်ပေးသည်, သိုလှောင်ရေး Tools များ # သံမဏိ DIY Kit ယူပြီး #Perforated Pegboard Hook စင်ပေါ် Winnipeg ဘုတ်အဖွဲ့ပျဉ်ပြား။ မြို့ရိုးအချိတ်ကြိုးကွင်းချိတ်, ဝါယာကြိုးတံသင်, ပန်းကန်, ကြမ်းပြင်နေသောလူသွားလမ်းများတွင်အပေါက်။
အဖုံး nosing cover လှေကားဖိုက်ဘာမှန် frp လှေကားထစ်နင်း လှေကားသစ်သား, ကွန်ကရစ်သို့မဟုတ်သတ္တုနဲ့လုပ်ထားတဲ့လှေကားအဘို့အမရရှိနိုင်လူမီနီယံ grit non-စလစ်တိပ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့မျက်နှာပြင်များပေါ်တွင်ကြာရှည်ခံမှုနှင့်စလစ်တိုးမြှင့်ဖို့အဘို့အကောင်းတစ်ဦးရွေးချယ်မှုပါပဲ။ တစ်ဦးမညီမညာဖြစ်နေသောမျက်နှာပြင်, တိပ်ခွေမျးတမျးအမြင့်နှင့်အတူအသုံးပြုမှုအတွက် 3M အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး-လမ်းလျှောက်စလစ်ကိုခံနိုင်ရည်ညီတိပ်။ လာမယ့်အပြားများအတွက် မတော်တဆစောင့်ဆိုင်းနေ တစ်ဦး thoroughfare အတွက် တက်ချဉ်းကပ်လမ်းပေါ်တွင် မကြာခဏပြင်းထန်ဒဏ်ရာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တားဆီးနိုင်သည်သို့မဟုတ်ผ 3M တိပ်နှင့်အတူ eanhnakepeneba သင့်လျော်စွာအခြေအနေအောက်မှာအသုံးပြုရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည်။
တိပ်ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံတိပ်တိပ် Barrier တိပ်မြေအောက် non-စလစ်တိပ်, အတိပ်တိပ်, အဖြစ်အပျက် / ဒီဇိုင်း, တိပ်ခွေ, ရောင်ပြန်တိပ်နဲ့အသွားအလာကိုတိပ်ကက်ဆက်ဘောငျ (တိပ်သတိပေး) တိပ်ခွေ။ ရောင်ပြန်အမျိုးအစား
ဘယ်အချိန်မှာမြင်နိုင်အလင်း တိပ်အလင်းရောင် တိပ်ရေတပ်ရဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးမှောင်မိုက်၌မြင်နိုင်စိန်အဆင့် Reels ။ ပြားချပ်ချပ်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် mounting များအတွက်အရည်အသွေးမြင့် Non-စလစ်တိပ်၏လုံခြုံရေးတိုးမြှင့်။ မျက်နှာပြင်-စလစ်တိပ်ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းဖို့ထိုကဲ့သို့သောစကျင်ကျောက်, terrazzo, ကြွေကြွေပြား, ကြွေပြား Granito, ပွတ်ကွန်ကရစ်ကြမ်းပြင်, ကျောက်, စတာတွေလွယ်ကူအဖြစ်ချော်ဖို့ကြမ်းတမ်းများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ အဆောက်အဦးအတွင်းပိုင်းနှင့်ပြင်ပတစ်လှေသို့မဟုတ်လေယာဉ်နှာခေါင်းလှေကားပေါ်တွင်ရေကူးကန်ပတ်လည်ဧရိယာကို။
လမ်းမပေါ်တွင်ရောင်ပြန်တိပ် တိပ်သို့မဟုတ် Non-စလစ်လမ်း။ လမ်းတစ်လမ်းအလင်းဖြင့်အလွန်အကြမ်းခံတိပ်ဖြစ်သည့် PVC တိပ်နဲ့လုပ်ထားတဲ့အချောတိပ်။ သေးငယ်တဲ့တိပ်ခွေ (Glass ကိုသွေးထွက်) ရက်နေ့တွင်အဆိုပါရောင်ပြန်ဖန်ပုတီးရောင်ပြန်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကောင်းသောညဥ့် မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကော်စာအုပ်ချုပ်သမား EPOXY သို့မဟုတ်အခြားတင်းကျပ်စွာနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ ရှည်လျားသော Make တာယာကနေ abrasion မှ Fast ။ တစ်ဦးကအမြဲတမ်းအရောင်နှိုင်းယှဉ်မည်မဟုတ်ပါ။ အရောင် thermoplastic သင်တစ်ဦးချိုးသို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့ယူသည့်အခါအရောင်လည်းညှိုးနွမ်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှု။ သာလွန်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ Long ကသက်တမ်း။ ဟန်းတပ်ဆင်ပြီးစီးချက်ချင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော တမြို့လုံးအနှံ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာ။ မိုးသည်းထန်စွာအသွားအလာနှင့်အတူ
အဆိုပါလူကူးမျဉ်းကြားလိုင်းများ တိပ်ခွေနှင့်အတူလမ်းတစ်လမ်းအလင်း။ရောင်ပြန်တိပ်နှင့်အတူလူကူးမျဉ်းကြား။ အဆိုပါချွတ် 50 စင်တီမီတာ၏စံ width ကို။ အဆိုပါအရှည်လမ်းကိုဖြတ်ကူးလမ်းသွားလမ်းလာများ၏သင့်လျော်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါရောင်ပြန်တိပ်တစ်လမ်းကူးမျဉ်းကြား။ ဖန်ခွက်ကိုပုတီးမှအဖြူနှင့်အဝါရောင်ရောင်ပြန်တိပ် (Glass ကိုသွေးထွက်), ညအချိန်တွင်ကောင်းစွာအလင်းစေသည်ထားတဲ့: အရောင်နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ ဒါဟာသင်္ကေတဖို့လူကူးမျဉ်းကြားများအပြင်၌။ လမ်း၏တိပ်ခွေကြမ်းသည်။ ငါချောလမ်းများမဟုတ်နိုင်
မြှား၏အဓိကလမ်းမကြီးပေါ်ရောင်ပြန်တိပ်။ လမ်းမပေါ်တွင်ရောင်ပြန်တိပ် လိုအပ်အဖြစ်အက္ခရာများကိုဖန်ဆင်းနိုင်ပါသည် ဥပမာအားဖြင့်, left turn, etc, ဖြောင့်သွားပါ, ညာလှည့်ပုံမှန်အားဖြင့်ညအချိန်တွင်ကောင်းစွာအလင်းရောင်ပြန်ဟပ်နေကြတယ်ကြော်ငြာများ၏အဘယ်အရာကိုမျိုးကိုကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။ မည်သည့်မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်တပ်ဆင်ထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါဟာကော်စာအုပ်ချုပ်သမား EPOXY သို့မဟုတ်အခြားတင်းကျပ်စွာနှင့်အတူအသုံးပြုသည်။ ရှည်လျားသော Make တာယာကနေ abrasion မှ Fast ။ တစ်ဦးကအမြဲတမ်းအရောင်နှိုင်းယှဉ်မည်မဟုတ်ပါ။ အရောင် thermoplastic သင်တစ်ဦးချိုးသို့မဟုတ်ပြောင်းရွှေ့ယူသည့်အခါအရောင်လည်းညှိုးနွမ်းသို့မဟုတ်ပြောင်းလဲမှု။ သာလွန်ဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူ Long ကသက်တမ်း။ ဟန်းတပ်ဆင်ပြီးစီးချက်ချင်းဖွင့်လှစ်နိုင်ပါသည်။ တစ်ဦးအဖြစ်အသုံးပြုရန်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသော တမြို့လုံးအနှံ့အဝေးပြေးလမ်းမကြီးပေါ်တွင်ယာဉ်အသွားအလာ။ မိုးသည်းထန်စွာအသွားအလာနှင့်အတူ
ဒဏ်ချက်အသွားအလာလမ်းကြောင်းသို့မဟုတ်ကားပါကင် slot နှစ်ခု Rideau တူးမြောင်းလမ်းမကြီးအပိုင်းသုံးပိုင်း။ စံချိန်စံညွှန်းများဦးစီးဌာနရရှိနိုင်ပါက 10 စင်တီမီတာအရောင်လိုင်းအကျယ်, အဖြူရောင်အဝါရောင်, အနီရောင်နှင့်အနက်ရောင်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါလမ်းများအလွန်အကြမ်းခံတိပ်ဖြစ်ကြသည်။ နှင့်ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာတစ်ကြည်လင်ရောင်ပြန်တိပ်ညအချိန်တွင်အလွန်ရှင်းလင်းသောဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အဆိုပါတိပ်ခွေကအရမ်းအကြမ်းခံသောအရာ PVC ပစ္စည်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဘယ်တိုင်းပြည်များအသုံးများကြသည်။ အဖြူရောင် thermoplastic ကျော်အားသာချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပြန်တယ်သို့မဟုတ်ခြစ်သည့်ရောင်ပြန်တိပ်ကြိုးပဲ့မပါသည့်အခါအရောင် thermoplastic ကိုချိုးဖျက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။ ထက်ပိုလေး thermoplastic တည်တံ့ပိုမိုအလင်းနှင့်အကြမ်းခံရောင်ပြန်ဟပ်
FRP Gritted ပြား / ဖန်မျှင်ထည်စစ်ကူပလတ်စတစ်ဆန့်ကျင် -Slip sheet / အဆင့်အဖုံးများနှင့်နင်းနယ်။
FRP Gritted ပြားမဟုတ်-စလစ်ကြမ်းခင်းလမ်းလျှောက်လွယ်ကူသောဖျာကန်နှင့်ပန်းရေချိုးခန်းရော်ဘာကြမ်းပြင်တိပ်အလယ်တန်းကော်ဇောပိတ်ပင်တားဆီးမှုရော်ဘာကွက်ဆန်ခါ Anti-နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်မျက်နှာပြင်ဆန့်ကျင်စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံဖန်မျှင်ထည် Sheet များ (FRP) 3M အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး coated တစ်ခု epoxy နှင့်အတူ pultruded FRP Flat စာရွက်ဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တယ်။ အရေပြား, Anti-စလစ်ရေချိုး, ရေချိုးခန်းနှင့်အိမ်သာဧရိယာများအတွက်တော်တော်သန့်ရှင်းလုံခြုံယဉ်ကျေးမှုစုံစာပေစင်တာချော်။ အဆိုပါမျက်နှာပြင်တောက်ပသို့မဟုတ်စိုစွတ်သောဒေသများဖြစ်ပါသည်။ ယာဉ်မတော်တဆမှုဖြစ်ပေါ်စေ၏မြင့်မားသောအန္တရာယ်ရှိပါသည်။ ရေချိုးခန်းကြမ်းပြင်အထိစိုစွတ်ခံရဖို့ရာအရပ်ဖြစ်ပါသည်ဒါပေမယ့် fixed, ဘေးကင်းလုံခြုံမှုများအတွက် mosaic ကျောက်, အဲဒီမှာထိုကဲ့သို့သောချောင်းကို-စလစ်တိပ်အဖြစ်နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောကြွေအုပ်ကြွပ်အဖြစ်မျက်နှာပြင်များပေါ်မှာ non-စလစ်အပေါ်ယံပိုင်းကိုအသုံးပြုပါ။ ချစ်ရသူ၏ တိပ်ခွေကိုအနည်းငယ်ကြမ်းတမ်း ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ကနေဖန်ဆင်းတော် soft မျက်နှာပြင် ဘိနပ်မပါသော Walking အဆိုပါအစိုဓာတ်ကိုခံနိုင်ရည် အခန်းပေါင်းပြောင်းလဲနေတဲ့ရေချိုးခန်းစည်ပိုင်းများအတွက်စံပြ, ချွေးပေါင်းအိမ်တစ်လှေပေါ်လမ်းလျှောက်။ surfboard အခင်းအားကစားကလပ်အားကစားရုံသည်။ အာကာသအများဆုံးအသုံးပြုမှုလုံခြုံရေးအတွက် Anti-စလစ်အမျိုးအစား (Non-စလစ်အခင်းနှင့်အတူအခန်းပေါင်းအားကစားသမားဆေးဘက်ဆိုင်ရာအခန်းကိုအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး PVC အသားအရေအဆက်အသွယ်ပြောင်းခြင်း။ ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု-အခမဲ့ရေနံသို့မဟုတ်ရေနှင့်အတူအထူးစောင့်ရှောက်ခြင်းမရှိဘဲ။ non-စလစ်မျက်နှာပြင်စိုစွတ်သောသို့မဟုတ်ပင်ရေနံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်သက်တာတစ်လျှောက်လုံး ချော်-ခုခံပင်တဲ့အခါမှာစိုစွတ်သော ,. ထိုကဲ့သို့သောဓာတ်ဆီအဖြစ်ပျော်ရည်များကိုခံနိုင်ရည်ကြမ်းပြင်၏တစ်သက်တာတစ်လျှောက်လုံး, ရေနံ, အက်ဆစ်တော်တော်လေးကောင်းသောဖြစ်ခဲ့သည်။ မြင့်မားသောကြာရှည်ခံမှုလိုအပ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အသုံးပြုရန်သင့်လျော်သော။ antifungal နှင့် antibacterial Black ကအစွန်းအထင်းကိုအလွယ်တကူချွတ်ဆေးကြောပါနဲ့ရေ, ရေနံ, အပူကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့ခံနိုင်ရည်နဲ့မျက်နှာပြင်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့လွယ်ကူပါတယ် rounded ထောင့်, အဘို့အဆစ်ရိုးဘက်တီးရီးယား Coves ၏စုဆောင်းခြင်းလျှော့ချပေးပါတယ်။ ဘက်တီးရီးယားစုပြုံမနေပါနဲ့ အရည်အသွေးမြင့်ဖိုင်ဘာဖန်ဖြင့်ထုတ်လုပ်တိုးတက်လာသော cleanability ပစ္စည်းများများအတွက်အပေါ်ယံပိုင်းစနစ်အလြယ္ကူသန့်ရှင်းတဲ့နည်းပညာ။ အဆက်အသွယ်ခြေလျင်ဆန့်ကျင်ချုံ့နှင့်ရောအသား၏တစ်ခုတည်းသောအပိုင်းအစ။ အဆိုပါအခင်း၏ wear အလွှာတစ်လျှောက်လုံးတစ်ဦးစုစုပေါငျးမြားရှိသည်သောအရည်အသွေးမြင့်မား FRP အတွက်ရရှိနိုင်အဆိုပါစလစ်တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းနှင့်ပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောရွေးချယ်စရာ ,. ကြာရှည်စွမ်းဆောင်ရည်ဖိုက်ဘာမှန်အာမခံရန်, ရှုထောင်တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက်ကျုံ့အရည်အသွေးမြင့်ဖန်ဖိုင်ဘာ scrim ကာကွယ်ပေးသည်ဘက်တီးရီးယား, မှိုတစ်ချောအခွအေနေဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။ နှင့်အစားအစာ spoilage ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်ကိုရောဂါကူးစက်မှု၏ရင်းမြစ်။ ကျနော်တို့ Non-စလစ်အခင်းနှင့်အတူဆန်းသစ်သော Anti-ပိုးမွှားအသုံးပြုပြီးဆောင်ခဲ့ရမည်။ မြင့်မားသောသန့်ရှင်းမှု, အထူးသဖြင့်စားနပ်ရိက္ခာထုတ်လုပ်မှုလိုအပ်သည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်ရန်အတွက်။ Composite ပစ္စည်းများ, Anti-ဖန်းဂတ်စ်နှင့်ဘက်တီးရီးယား Silver, Nano တစ်သားတည်းဖြစ်တည်ခြင်းပါဝင်သည်။ ကြမ်းပြင်တစ်ဦးထက်ပိုသောကျန်းမာရေးစစ်ဆင်ရေးကိုပေးသည်။ အဆိုပါပန်းကန်၏ထောင့်သို့စုပြုံမှပိုးမွှားကနေအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်စိုစွတ်သောဒေသများရှိ (High သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း) မှတဆင့်အရည်စီးဆင်းမှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရှိရာအစားအစာထုတ်လုပ်မှု (မီးဖိုချောင်ဖျာ) ရော်ဘာဘဝါး Anti-စလစ်ဒေသများရှိ။ ကြမ်းပြင်တစ်ဦးထက်ပိုသောကျန်းမာရေးစစ်ဆင်ရေးကိုပေးသည်။ အဆိုပါပန်းကန်၏ထောင့်သို့စုပြုံမှပိုးမွှားကနေအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်စိုစွတ်သောဒေသများရှိ (High သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း) မှတဆင့်အရည်စီးဆင်းမှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရှိရာအစားအစာထုတ်လုပ်မှု (မီးဖိုချောင်ဖျာ) ရော်ဘာဘဝါး Anti-စလစ်ဒေသများရှိ။ ကြမ်းပြင်တစ်ဦးထက်ပိုသောကျန်းမာရေးစစ်ဆင်ရေးကိုပေးသည်။ အဆိုပါပန်းကန်၏ထောင့်သို့စုပြုံမှပိုးမွှားကနေအခမဲ့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့်စိုစွတ်သောဒေသများရှိ (High သို့ဖြစ်. ရေဆင်းစနစ်ကိုပြုပြင်ခြင်း) မှတဆင့်အရည်စီးဆင်းမှုအဆင်ပြေချောမွေ့စေရန်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲရှိရာအစားအစာထုတ်လုပ်မှု (မီးဖိုချောင်ဖျာ) ရော်ဘာဘဝါး Anti-စလစ်ဒေသများရှိ။
ကြမ်းပြင်ကာကွယ်ပေးသူဖျာ:ဒါဟာအခင်းတိုင်းနေရာများ၏သဘာဝအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာအဘယ်သူမျှမလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါသည်။ သင်တစ်ဦးနေအိမ်တစ်ကြံ့ခိုင်ရေးစင်တာတစ်ကားဂိုဒေါင်အလုပ်ရုံ, ဒါမှမဟုတ်စီးပွားဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှိမရှိ, ကြမ်းပြင်ကအားလုံးကိုများအတွက်အခြေစိုက်စခန်းများကိုရှိရလိမ့်မည်။ သို့သော်ကြမ်းပြင်လည်းကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန်လိုသည်။ ကြမ်းပြင်ကာကွယ်ဖျာတည်ဆဲကာကှယျစောငျ့ရှောကျမကြာခဏထိုကဲ့သို့သောသစ်သား, ကြွေပြားများနှင့်ဖျင်အဖြစ်အထိခိုက်မခံပစ္စည်းများထားကြောင်းစျေးကိုအဆမတန်မြှခင်းရန်လိုအပ်သောဖြစ်ကြသည်။ ရော်ဘာကနေဖန်ဆင်းတော်တစ်ဦးကအကာအကွယ်ကြမ်းပြင်ကိုဖုံးလွှမ်းစရာခြေလျင်အသွားအလာ, လေးလံသောပစ္စည်းကိရိယာများ၏လှုပ်ရှားမှုနှင့် inclement ရာသီဥတုတည်းဟူသောရလာဒ်များမြင့်မား volumes ကိုကနေဖြစ်ပေါ်နိုင်သောပျက်စီးမှုကိုကာကွယ်တားဆီးကူညီပေးပါမည်။ ရော်ဘာ-Cal applications များအမျိုးမျိုးတွင်အသုံးပြုနိုင်ရော်ဘာကြမ်းပြင်ကာကွယ်ဖျာ၏ကျယ်ပြန့ရှိပါတယ်။ တာရှည်ခံအခင်းရွေးချယ်စရာကျွန်ုပ်တို့၏လိုင်းအဓိကအားတ္ထုများအကြားတစ်ခုအကာအကွယ်အတားအဆီးအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤရွေ့ကားသေးငယ်တဲ့ဖျာသို့မဟုတ်ရှည်လျားရော်ဘာအပြေးသမားဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရော်ဘာပစ္စည်းစုပ်ယူထားတဲ့သက်ရောက်မှုသည်နှင့်မိုးသည်းထန်စွာအလေးနှင့်လှုပ်ခြင်း၏ကွံပကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ gyms သူတို့ပွန်းစားခြင်းလုပ်ရပ်များပေါင်းစပ်မြင်သောဒေသများဖြစ်သောကြောင့်ဒီအရည်အသွေးကအလွယ်တကူသိသာသည်အဘယ်မှာရှိများစွာသောသာဓကရှိပါတယ်။ ရော်ဘာအကာအကွယ်ကြမ်းပြင်ကိုဖုံးလွှမ်းစရာယခုလေ့ကျင့်ခန်းဒေသများများအတွက်စံဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကထူသောရော်ဘာဖျာလွယ်ကူစွာတစ်ဦးပြေးပြေးစက်သို့မဟုတ်ပြင်းထန်သော Cross-မထိုက်မတန်လေ့ကျင့်ခန်းများ၏ strain သည်းခံရ၏နိုင်ပါတယ်။ လေ့ကျင့်ခန်းပစ္စည်းကိရိယာများအများဆုံးမကြာခဏမိုးသည်းထန်စွာသတ္တုလုပ်ကတည်းကကအကာအကွယ်မဲ့မျက်နှာပြင်များဆန့်ကျင်ကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ခြင်းနှင့်ပြုပြင်စျေးကြီးဖြစ်နိုငျသောအမှတ်အသားများထားခဲ့နိုင်သည်။ သစ်သားထိုကဲ့သို့သောပွန်းစားခြင်းမှအထူးသဖြင့်အားနည်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့လက်ျာဘက်ကြမ်းပြင်ကာကွယ်ဖျာကင်းမဲ့လျှင်ကြမ်းပြင်ပျက်စီးသွားသောဖြစ်လာဘို့တောင်မှကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်နှင့်အတူ gyms ထဲမှာနေတုန်းပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အရပ်ဌာန၌သင့်လျော်သောမိုးသည်းထန်စွာ-တာဝန်အခင်းနှင့်အတူ, သို့သော်, သငျသညျအကုန်အကျထိခိုက်ပျက်စီးမှုမှသင်၏လက်ရှိမျက်နှာပြင်များချွေတာပါလိမ့်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြမ်းပြင်ကာကွယ်ဖျာ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၏ဤသာလွန်အဆင့်ကို gyms တူသောစီးပွားဖြစ်သောအရပ်တို့ကိုမလျှောက်ထားပေသာ။ non-စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံဖျာ: Non-စလစ်ဖျာအများစုရော်ဘာထွက်လုပ်နေကြတယ်အဘယ်ကြောင့်တစ်ဦးအလွန်ကောင်းသောအကြောင်းပြချက်ရှိတယ်ပါ! ဤသည်ပစ္စည်းသဘာဝကျကျအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ချုပ်ကိုင်စွမ်းရည်မှဘာသာအရာပွတ်တိုက်၏မြင့်မားသောကိန်းပေးထားပါတယ်။ ဤတွင်ကြမ်းပြင် Mat ကုမ္ပဏီမှာကျနော်တို့အဆိုပါသဘာအရည်အသွေးတွေကိုအပြည့်အဝအားသာချက်ကိုယူပြီးလှုပ်ရှားမှုတားစီးကိုကူညီခြင်းနှင့် slick နှင့်စိုစွတ်သောဒေသများရှိစလစ်ခုခံတိုးမြှင့်ဖို့အလုပ်လုပ်သောကြွယ်ဝစွာအရောင်အဆင်းဒီဇိုင်းများနှင့်အတူသူတို့ကိုထည့်ပါ။ , လူနေအိမ်စီးပွားဖြစ်, ဒါမှမဟုတ်စက်မှုဇုန် setting များကိုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော, ငါတို့ဆန့်ကျင်စလစ်အခင်းအကုန်အကျဆေးဘက်ဆိုင်ရာဥပဒေကြမ်းများကိုဖြစ်ပေါ်နိုင်ကြောင်းအလားအလာကြီးကျယ်သောယာဉ်မတော်တဆမှုကနေဧည့်သည်များ, ဖောက်သည်များနှင့်ဝန်ထမ်းကာကွယ်ဖို့အတွက်ကူညီပေးပါမည်။ ရေတံခွန်များနှင့်ခရီးစဉ်များစွာသောလူနားလည်သဘောပေါက်ထက်ပိုပြီးထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်, ကျနော်တို့တိုင်းအခွင့်အလမ်းမှာသူတို့ကိုကန့်သတ်ရန်ကြိုးစားဒါကြောင့်ပါပဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ Non-စလစ်ဖျာထုံးစံလိုဖြတ်ခြင်းနှင့်ဖွင့်ဖို့ကို 50 ပေ၏ချောမွေ့စွာအရှည်အတွက်ရရှိနိုင်ကြသည်။ အမှန်ကတော့, နေပါစေသင့်ရဲ့အရွယ်အစားလိုအပ်ချက်, ငါတို့သည်သင်တို့မိုးရရှိပါသည်။ သူတို့ကအစကိုတပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူပြီးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့ပင်ပိုမိုလွယ်ကူနေပါပြီ! လှေခါးထစ်ဖျာ: လှေကားသူတို့ထင်ရ-အထူးသဖြင့်ထက်အစိုဓာတ်ကိုပစ္စုပ္ပန်အခါအများကြီးပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်! ထိ မိ. လဲဘယ်နေရာမှာမဆို (ရစေရန်ပြုလုပ်ထားရန်) စံပြထက်သိသိသာသာလျော့နည်းဖြစ်ပါသည်, သို့သော်လှေကားကိုဖြတ်သန်းတဲ့အခါမှာချော်အလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်ပါတယ်။ ကြမ်းပြင် Mat ကုမ္ပဏီရဲ့လှေကားထစ်ဖျာနှင့်သင်၏လှေကားဘေးကင်းစေပါ။ အထူးဒီဇိုင်းနှင့်အရွယ်အစား, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လှေကားထစ်နင်းမိုးလုံလေလုံအဖြစ်ပြင်ပတွင်နှစ်ဦးစလုံး application များအတွက်စုံလင်သောဖြစ်ကြသည်။ install လုပ်ရန်မလွယ်ကူ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထုတ်ကုန်စလစ်ကိုခံနိုင်ရည်ဘေးကင်းလုံခြုံရေးဖြည့်စွက်အဘို့စံပြဖြစ်ကြပြီးဆိုလှေကား-ရှိမရှိကကားပါကင်အဆောက်အဦများအတွက်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲခြင်းနှင့်ချုပ်ကိုင်ဆက်ပြောသည် ,. တိုက်ခန်းရှုပ်ထွေးသော, ဒါမှမဟုတ်ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုနေရာများတွင်။ ကျနော်တို့မကြာခဏဘို့ဂရုစိုက်ဖို့သူတို့ကိုလွယ်ကူစေသည်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျာစေရန်ရေကိုခံနိုင်ရည်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါ။ သင်အလွယ်တကူသူတို့ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းရေးပေးသို့မဟုတ်ရုံတံမြက်စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ် damp ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်နှင့်အတူသူတို့ကိုပယ်တိုက်မှရေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှေကားထစ်နင်း run နိုင်ပါတယ်။ လှေခါးထစ်ဖျာ, ဆိတ်ကွယ်ရာအကြီးအဘေးကင်းလုံခြုံမှုရညျအသှေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကနေလည်းအချို့သောဗေဒအယူခံဝင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ အလှဆင်ရရှိနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျာအချို့ကိုအခြားသူများကိုတစ်ဦးအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသွင်အပြင်သယ်ဆောင်စဉ်ကိုကြည့်ဖို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့များမှာဒီဇိုင်း။ မည်သို့ပင်သင့်လိုအပ်ချက်, ငါတို့သည်သင်တို့၏ထူးခြားသောလိုချင်တပ်နှင့်အလိုဆန္ဒများဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုခုရှိသည်ဖို့နီးပါးသေချာနေပါပြီ! သင်အလွယ်တကူသူတို့ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းရေးပေးသို့မဟုတ်ရုံတံမြက်စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ် damp ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်နှင့်အတူသူတို့ကိုပယ်တိုက်မှရေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှေကားထစ်နင်း run နိုင်ပါတယ်။ လှေခါးထစ်ဖျာ, ဆိတ်ကွယ်ရာအကြီးအဘေးကင်းလုံခြုံမှုရညျအသှေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကနေလည်းအချို့သောဗေဒအယူခံဝင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ အလှဆင်ရရှိနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျာအချို့ကိုအခြားသူများကိုတစ်ဦးအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသွင်အပြင်သယ်ဆောင်စဉ်ကိုကြည့်ဖို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့များမှာဒီဇိုင်း။ မည်သို့ပင်သင့်လိုအပ်ချက်, ငါတို့သည်သင်တို့၏ထူးခြားသောလိုချင်တပ်နှင့်အလိုဆန္ဒများဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုခုရှိသည်ဖို့နီးပါးသေချာနေပါပြီ! သင်အလွယ်တကူသူတို့ကိုစေ့စေ့စပ်စပ်သန့်ရှင်းရေးပေးသို့မဟုတ်ရုံတံမြက်စည်းတစ်ခုသို့မဟုတ် damp ကြမ်းတိုက်အဝတ်စုတ်နှင့်အတူသူတို့ကိုပယ်တိုက်မှရေအောက်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှေကားထစ်နင်း run နိုင်ပါတယ်။ လှေခါးထစ်ဖျာ, ဆိတ်ကွယ်ရာအကြီးအဘေးကင်းလုံခြုံမှုရညျအသှေးကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ကနေလည်းအချို့သောဗေဒအယူခံဝင်ထည့်သွင်းနိုင်ပါတယ်။ အလှဆင်ရရှိနိုင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖျာအချို့ကိုအခြားသူများကိုတစ်ဦးအလွန်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသွင်အပြင်သယ်ဆောင်စဉ်ကိုကြည့်ဖို့ချစ်စရာကောင်းတဲ့များမှာဒီဇိုင်း။ မည်သို့ပင်သင့်လိုအပ်ချက်, ငါတို့သည်သင်တို့၏ထူးခြားသောလိုချင်တပ်နှင့်အလိုဆန္ဒများဖို့တောင်းဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တစ်ခုခုရှိသည်ဖို့နီးပါးသေချာနေပါပြီ!
နှစ်စီးမတော်တဆဖြစ် FRP အဆင့်အဖုံးများနှင့်မနင်းမရှိပါ။ခြယ်သို့မဟုတ် coated ကြောင့်ရာသီဥတု, ကျချိန်မရှိခြင်းသို့မဟုတ်ဓာတုဗေဒပျက်စီးနေကြသည်မရနိုင်သည့်ချောကျိကျိ, ချောလှေကားတစ်မြန်ဆန်ရိုးရှင်းတဲ့ဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ကြသည်။ anti-စလစ်ဖြတ်ပိုင်းပုံစံ FRP အဆင့်အဖုံးများနှင့်မနင်း FRP Panel များနှင့်နေသောလူသွားလမ်းကိုက်ညီမယ့်အကြီးစားတာဝန်စေးကပ်လျက်တည်ရှိ Anti-စလစ်မျက်နှာပြင်ရှိသည်။ အဘယ်သူမျှမနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ် FRP အဆင့်မျက်နှာဖုံးများလှေကားအဘို့ဒီဇိုင်းအကြမ်းခံဆန့်ကျင်စလစ်ဖိုက်ဘာမှန်နင်းနှင့်နှာခေါင်းဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကအပြင်ပန်းနှင့်အတွင်းပိုင်းနှစ်ဦးစလုံး application များအတွက်အသုံးပြုသောနှင့်အဘယ်သူမျှမနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ် FRP အဆင့်ဖုံးလွှမ်းပေါ့ပါးစွယ်စုံ, တပ်ဆင်ရန်လွယ်ကူသော, အနက်ရောင်အဝါရောင်သို့မဟုတ်လွယ်ကူသောအဘို့အဝါရောင်နှာခေါင်းနှင့်အတူအနက်ရောင်ရရှိနိုင်ပါသည်ကွန်ကရစ်, သစ်သား, ကျောက်, သတ္တု, အုတ်သို့မဟုတ်ခြစ်ခြေလှမ်းများများအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြ၏။ မှတ်ပုံတင်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အဘယ်သူမျှမနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ် FRP ကိုနင်း thermoset polyester ဖိုင်ဘာကျော်လျှောက်ထားဓာတ်သတ္တုပွန်းစားခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားဖြစ်ရောစပ်နှင့်အတူဆောက်လုပ်ထားကြသည်ပေါ်လီမာပြားအားဖြည့်။ မျက်နှာပြင်ကျီသည့်အခါလှေကားအပေါ်အတော်များများကစာရွက်များတစ်ဦးခြေလှမ်းများ၏အစွန်းမှာဖြစ်ပျက်များနှင့်အစွန်း rounded ဖြစ်လာသည်။ , ရေ, မြေမှုန့်, ဖုန်, ရေခဲဝတ်, လှေကားအပေါ်ကိုဆီတစ်အန္တရာယ်ရှိတဲ့အခွအေနေကိုပြဿနာ heightens ။ အဘယ်သူမျှမနှစ်စီးမတော်တဆဖြစ်? အဆင့်အဖုံးများနှင့်မနင်းအားဖြင့်လျင်မြန်စွာဖြစ်ဖွယ်ရှိသောစွမ်းဆောင်ဆွဲခြင်းနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကိုထောက်ပံ့ပေးမယ့်ဘေးကင်းလုံခြုံ, ချော်-ခံနိုင်ရည်မျက်နှာပြင်ကိုလက်ရှိလှေကားကျော်လျှောက်ထားခံရဖို့ဒီဇိုင်းရေးဆွဲနေကြပါတယ်။
(fiber-အားဖြည့်ပလပ်စတစ် (FRP) ကိုလည်းဖိုင်ဘာ-အားဖြည့်ပေါ်လီမာ, ဒါမှမဟုတ်အမျှင်ဓာတ်-အားဖြည့်ပလပ်စတစ်ခေါ်) အမျှင်တွေနဲ့အားဖြည့်မယ့်ပေါ်လီမာ matrix ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါအမျှင်များသောအားဖြင့်ဖန်, ကာဗွန်ဖြစ်ကြ၏ aramid, ဒါမှမဟုတ် basalt ။ ခဲ, ထိုကဲ့သို့သောစက္ကူ, ကဲ့သို့သောအခြားအမျှင် သစ်သား, ဒါမှမဟုတ်ကျောက်ဂွမ်းအသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါပေါ်လီမာများသောအားဖြင့်တစ်ဦး epoxy, vinylester ဖြစ်ပါတယ် ဖင်နိုလစ် Formaldehyde resins အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ကြောင်းသော်လည်း, သို့မဟုတ် polyester thermosetting ပလပ်စတစ်။
FRPs လေ့အဆိုပါအာကာသအတွက်အသုံးပြုကြသည် မော်တော်ကား, ရေကြောင်း, နှင့်ဆောက်လုပ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်း။ သူတို့ကအများအားအဖြစ်ပဲ့ထိန်းတပ်သံချပ်ကာ၌တွေ့ကြသည် ကိုကောင်းစွာ။
တစ်ဦးကပေါ်လီမာယေဘုယျအားဖြင့်ခြေလှမ်း-တိုးတက်မှုနှုန်း polymerization သို့မဟုတ်ထို့အပြင် polymerization ကထုတ်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုလီမာ၏ပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိများရလဒ်ပြောင်းလဲမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်မည်သည့်လမ်းအတွက်မှအမျိုးမျိုးသောအေးဂျင့်များနှင့်အတူပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါတစ်ဦးပလပ်စတစ်အဖြစ်ရည်ညွှန်းသည်။ Composite ပလတ်စတစ်အချို့လိုချင်သောပစ္စည်းနှင့်စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူတစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်းထုတ်ကုန်ရယူထားခြင်းမှကွဲပြားခြားနားသောပစ္စည်းဂုဏ်သတ္တိနှင့်အတူနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောတူညီပစ္စည်းများကို bonding ကနေဖြစ်ပေါ်ကြောင်းပလတ်စတစ်သူတို့အမျိုးအစားများကိုရည်ညွှန်း။ fiber-အားဖြည့်ပလတ်စတစ်အထူးနည်းစနစ်ပလတ်စတစ်၏အစွမ်းသတ္တိ, elasticity မြှင့်တင်ရန်ဖိုင်ဘာပစ္စည်းများအသုံးပြုပေါင်းစပ်ပလတ်စတစ်တစ်ဦးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ဖိုင်ဘာအားဖြည့်ခြင်းမရှိဘဲမူရင်းပလပ်စတစ်ပစ္စည်းဟာ matrix သို့မဟုတ် binding အေးဂျင့်အဖြစ်လူသိများသည်။ အဆိုပါ matrix ကိုနန်းကြိုးအမျှင်လေးများသို့မဟုတ်အမျှင်အားဖြည့်အားကောင်းလဲစနစ်တကျခြင်းဖြင့်အားဖြည့်သောခက်ခဲတဲ့ပေမယ့်အတော်လေးအားနည်းနေပလပ်စတစ်ဖြစ်ပါတယ်။ အစွမ်းသတ္တိ, elasticity တစ်ဖိုင်ဘာ-အားဖြည့်ပလပ်စတစ်ထဲမှာတိုးမြှင်ဖြစ်ကြောင်းအတိုင်းအတာအဆိုပါဖိုက်ဘာနဲ့ matrix ကိုအချင်းချင်းသူတို့ရဲ့အသံအတိုးအကျယ်ဆွေမျိုးများနှင့် matrix ကိုအတွင်းဖိုင်ဘာအရှည်နှင့်တိမ်းညွတ်နှစ်ဦးစလုံး၏စက်ပိုင်းဆိုင်ရာဂုဏ်သတ္တိများပေါ်တွင်မူတည်သည်။  ။ အဆိုပါ FRP ပစ္စည်းပြပွဲတစ်ယောက်တည်း matrix ၏အစွမ်းသတ္တိ, elasticity ရန်ခွန်အားသို့မဟုတ် elasticity ဆွေမျိုးတိုးမြှင့်အခါ matrix ၏အားဖြည့်ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်အားဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
FRP ထုပ်, ကော်လံများနှင့်အဆောက်အဦးများနှင့်တံတားများ၏ပြားခိုင်မာစေရန်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ဒါဟာသူတို့ပြင်းထန်စွာကြောင့်တင်အခြေအနေများပျက်စီးခဲ့ကြတောင်မှပြီးနောက်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဆိုင်ရာအဖွဲ့ဝင်ခွန်အားတိုးမြှင့်ဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပျက်စီးအားဖြည့်ကွန်ကရစ်အဖွဲ့ဝင်များ၏အမှု၌, ဒီပထမဦးဆုံးအချောင်အပျက်အစီးများကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့်မော်တာသို့မဟုတ် epoxy ဗဓေလသစ်နှင့်အတူအခေါင်းပေါက်နှင့်အက်ကြောင်းအတွက်ဖြည့်စွက်အားဖြင့်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ပြုပြင်လိုအပ်ပေလိမ့်မည်။ အဖွဲ့ဝင်ပြင်ပြီးတာနဲ့ခိုင်ခံ့စေအဖွဲ့ဝင်များ၏သန့်စင်ခြင်းနှင့်ပြင်ဆင်ထားမျက်နှာပြင်မှသူတို့ကိုလျှောက်ထားထို့နောက် epoxy ဗဓေလသစ်နှင့်အတူဖိုင်ဘာစာရွက်များ impregnating ၏စိုစွတ်သော, လက်ကို တင်. -up ကနေအောင်မြင်နိုင်ပါသည်။ flexural အားကောင်းသို့မဟုတ်ညှပ်အားကောင်းနှစ်ခုနည်းစနစ်ပုံမှန်အားဖြင့်တပ်မက်လိုချင်သောအခွန်အားတိုးမြှင့်သက်ဆိုင်သော, ထုပ်၏ခိုင်မာဘို့မွေးစားနေကြသည်။ အမြားအပွားကိစ္စများတွင်ပါကနှစ်ဦးစလုံးအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ပေးလိုအပ်သောဖြစ်နိုင်သည်။ တစ်ဦးရောင်ခြည်၏ flexural ခိုင်မာဘို့, FRP စာရွက်များသို့မဟုတ်ပြားအဖွဲ့ဝင် (အသုံးချထိပ်တန်းတင်သို့မဟုတ်ဆွဲငင်အားတင်နှင့်အတူတစ်ရိုးရှင်းစွာထောက်ခံအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အောက်ခြေမျက်နှာ) ၏တင်းမာမှုမျက်နှာမှလျှောက်ထားနေကြပါတယ်။ ကျောင်းအုပ်ကြီးဆန့အမျှင်က၎င်း၏ပြည်တွင်းရေး flexural သံမဏိအားဖြည့်ဖို့အလားတူလေဆာရောင်ခြည် longitudinal ဝင်ရိုးအတွက် oriented နေကြသည်။ ဒါကရောင်ခြည်တန်ခိုးအစွမ်းသတ္တိနှင့်၎င်း၏တောင့်တင်း (ယူနစ် deflecton နဲဖြစ်ပေါ်စေရန်လိုအပ်သည်ဝန်) တိုးပွါး, သို့သော်အောကျပါစွမ်းရည်နှင့်ကျဇယားလျော့နည်းစေပါသည်။ တစ်ဦးရောင်ခြည်၏ညှပ်ခိုင်မာဘို့, FRP ဆာရောင်ခြည်ရဲ့ longitudinal ဝင်ရိုးမှ transverse oriented အမျှင်နှင့်အတူအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏ဝဘ် (နှစ်ဖက်) ရက်နေ့တွင်လျှောက်ထားသည်။ ညှပ်တပ်ဖွဲ့တွေကိုခုခံအသုံးချတင်အောက်တွင်ဖွဲ့စည်းကြောင်းညှပ်ဒါကိုတော့ပေါင်းကူးဆက်သွယ်အသုံးပြုပုံပြည်တွင်းရေးသံမဏိနင်းကွင်းအဖြစ်အလားတူထုံးစံ၌အောင်မြင်ခဲ့သည်။ FRP အများအပြား configurations အတွက်လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ် ,. ဘက်စဘွန်း, ဦး-ကိစ္စ္စ (U-အကျီ), နှင့်ကိစ္စ္စ (ပြည့်စုံကိစ္စ္စ) ကိုပိတ်လိုက်: အဖွဲ့ဝင်များနှင့်တပ်မက်လိုချင်သောအအာူး၏ degree ၏ထိတွေ့မျက်နှာများပေါ် မူတည်. , ဒီပါဝင်သည်။ ဘေးထွက် Bond သာရောင်ခြည်၏နှစ်ဖက်မှ FRP လျှောက်ထားပါဝငျသညျ။ ဒါဟာကြောင့် FRP အခမဲ့အနားမှာကွန်ကရစ်မျက်နှာပြင်ကနေ de-Bond ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုမှညှပ်အားကောင်း၏အနည်းဆုံးငွေပမာဏကိုပေးစွမ်းသည်။ ဦး-ကိစ္စ္စအဘို့, FRP ဆာရောင်ခြည်၏နှစ်ဖက်နှင့်အောက်ခြေ (တင်းမာမှု) မျက်နှာလှည့်ပတ်နေတဲ့ ” ဦး ” ပုံသဏ္ဍာန်အတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်အသုံးချနေသည်။ တစ်ဦးရောင်ခြည်၏အားလုံးမျက်နှာများလက်လှမ်းရောက်နေတယ်ဆိုရင်သူတို့သည်အလွန်အစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်ပေးအဖြစ်, တံခါးပိတ်ကိစ္စ္စ၏အသုံးပြုမှုကိုနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ ပိတ်ထားသောထုပ်မရှိအခမဲ့ကြီးစွန်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပုံမှန်ပျက်ကွက် mode ကိုအမျှင်၏ကှဲထှကျထိုသို့သောအကြောင်း, ယင်းအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏တစ်ခုလုံးကိုပတ်လည်အတိုင်းအတာတစ်ဝှမ်း FRP လျှောက်ထားပါဝငျသညျ။ အားလုံးထုပ်ပိုးပြီး configurations အဘို့, အဆိုပါ FRP တစ်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားနိမ့်ဆုံး width နဲ့အကွာရှိခြင်း, တစ်ဦးစဉ်ဆက်မပြတ်စာရွက်အဖြစ်သို့မဟုတ် discrete strips တွေအဖြစ်အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး၏အရှည်တစ်လျှောက်တွင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ ပြားသူတို့ရဲ့အောက်ခြေ (တင်းမာမှု) မျက်နှာမှာ FRP strips တွေလျှောက်ထားခြင်းအားဖြင့်ခိုင်ခံ့စေ၏နိုင်ပါသည်။ အဆိုပါပြား၏ဆန့ခုခံ FRP ၏ဆန့အစွမ်းသတ္တိအားဖြင့်ဖြည့်စွက်နေသည်ကတည်းကဒီပိုကောင်း flexural စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ရလဒ်ပါလိမ့်မယ်။ ထုပ်များနှင့်ပျဉ်ပြား၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, FRP အားကောင်း၏ထိရောက်မှုကို Bond များအတွက်ရွေးချယ်ဗဓေလသစ်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်မူတည်ပါသည်။ ဒီအခြမ်း Bond သို့မဟုတ်ဦး-ကိစ္စ္စကို အသုံးပြု. ညှပ်အားပေးဘို့အထူးသဖြင့်ပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်လံပုံမှန်အားဖြင့်ပိတ်ထားသောသို့မဟုတ်ပြည့်စုံထုပ်နှင့်ဝသကဲ့သို့ထိုသူတို့၏ပတ်လည်အတိုင်းအတာတစ်ဝှမ်း FRP နှင့်အတူပတ်ရစ်လျက်ရှိသည်။ ဤသည်ကိုသာပိုမိုမြင့်မားညှပ်ခုခံအတွက်ရလဒ်တွေကို, ဒါပေမယ့်ကော်လံဒီဇိုင်းအတွက်ပိုပြီးအရေးပါကြောင့် axial တင်အောက်မှာတိုးမြှင့် compression ခွန်အား၌ရလဒ်များ။
FRP Epoxy ဖိုက်ဘာမှန်ဖျင်စာရွက်
ထို့အပြင် insulator တွင်လည်းစာရွက်, ဖိုက်ဘာမှန်စာရွက်နှင့် Epoxy စာရွက်အဖြစ်လူသိများကြောင့်အပူနဲ့ဖိအားအောက်မှာအပြောင်းအလဲနဲ့အားဖြင့် epoxy resins နှင့်အတူ impregnated အယ်လကာလီ-အခမဲ့ E-ဖန်အထည်ကိုဖန်ဆင်းသည်။ ဒါဟာစသည်တို့ကို UL94-V0 မြင့်မားစက်မှုဂုဏ်သတ္တိများနှင့် dielectric ဂုဏ်သတ္တိများ, ကောင်းသောအပူခုခံ, ကောင်းသော-ချောမွေ့ဖို့မြင့်မားသောအပူချိန်ခုခံ၏ဇာတ်ကောင်, High-ပြင်းထန်မှု, Flame ဟာ-နှောင့်နှေးအဆင့်ကိုပိုင်ဆိုင်
ဖန်မျှင်ထည် Panel များအားဖြည့်, ဖန်မျှင်ထည်ပလပ်စတစ်, Pultruded ဖန်မျှင်ထည် Sheet များနှင့် Composite ပစ္စည်းများအားဖြည့်။
ထိုကဲ့သို့သော Wood က, လူမီနီယမ်, သံမဏိ, Thermoplastic နှင့်အခြား Thermo-set ကိုပစ္စည်းများအဖြစ်ရိုးရာပစ္စည်းများကျော်အများအပြားအားသာချက်များကိုဆက်ကပ်။ ဤအဖိုက်ဘာမှန်ထုတ်ကုန်အနည်းငယ်အမည်ကိုမှ, ထိုကဲ့သို့သော Handrail Components, RF Transparent ဆဲလ်-ဆိုက်ကိုဝင်းစနစ်များနှင့်အေးမျှော်စင်အဖြစ်တည်ဆဲ applications များ၏ကျယ်ပြန့်မျိုးစုံအတွက်ပူဇော်ကြောင်းအဆုံးမဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်။ သင်တို့သည်လည်းသင်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရခံစားရန်အခွင့်အလမ်းရှိခဲ့ပါပြီ, ဒါမှမဟုတ်မကြာသေးခင်က cable ကိုတီဗီအစီအစဉ်များအပေါ်မြင်ကြပြီတဲ့လျှောက်လွှာသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုရှာတွေ့လိမ့်မည်။ ဒီလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာတွေကိုပု Las Vegas မှမြှောင်ပေါ်တွင် Bellagio ဟိုတယ်များ၏ Mesmerize ကနေသည်ရေများပါဝင်သည်, နိုင်အာဂရာရေတံခွန်ယူပြီးထွက်သက်အပေါ်စီးသည့်တိုင်းထွာအလှဆင်ခြင်းငှါ, ဖိုက်ဘာမှန်နေသောလူသွားလမ်းများနှင့်ငါးမွေးကန်ဖို့ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာရှိတဲ့ Monterey ဂလားပင်လယ်အော် Aquarium မှာထောက်ခံပါတယ်။ ဒီလုပ်ငန်းသုံးကိရိယာတွေကိုအပေါငျးတို့သဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖိုက်ဘာမှန်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများကိုသုံးပါ။ ဒါကြောင့်နှစ်စဉ်သို့မဟုတ်ကောင်းစွာမြေကြီးတပြင်ရဲ့မျက်နှာပြင်ကိုအောက်တွင်သင်္ဂြိုဟ်ခြင်းကိုခံကြောင်းတစ်လျှောက်လွှာကလူသန်းပေါင်းများစွာကရှုမြင်ကြောင်းတစ်လျှောက်လွှာကျွန်တော်တို့ရဲ့နျ Standard ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံ FRP လိုင်းသည်နှင့်မိမိစိတ်ကြိုက် Pultruded Profiles အများအပြားစျေးကွက်၏စိန်ခေါ်မှုများနှင့်တွေ့ဆုံရန်သို့မဟုတ်ကျော်လွန်ခြင်းရှိမရှိ။ Sequentia မြှောင်းပုံဖန်မျှင်ထည်စစ်ကူ Panel များ။ အထူဖိုက်ဘာမှန်မိုးမိုးပြား။ ဤရွေ့ကားစာရွက်များပြားလာသို့မဟုတ်မြှောင်းပုံ profile များကိုအမျိုးမျိုး၌တည်၏။ ရောနှောဗိသုကာပညာရှင်များနှင့်အင်ဂျင်နီယာများရှည်လျားဒီဇိုင်းနှင့်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်ဖိုက်ဘာမှန်ပြား၏အားသာချက်များကိုလူသိများကြသည်။ စက်မှုဇုန် applications များအတွက်ဖိုက်ဘာမှန်ပြားများအတွက်ဝယ်လိုအားကြီးထွားလာသကဲ့သို့, High-အစွမ်းသတ္တိကိုဖိုက်ဘာမှန်ပြား၏ဂုဏ်သတင်းကိုပေါက်နေသည်။ မြှောင်းပုံဖန်မျှင်ထည် Panel များကောငျးအလှနျနှင့် Non-စတော့ရှယ်ယာပရိုဖိုင်းကိုစက်ရုံထဲကနေအမိန့်များနှင့်သင်တို့ဆီသို့တိုက်ရိုက်တင်ပို့နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
လှေခါးထစ်အဆင့်ကိုနင်းနယ်အကျယ် & လှေခါးထစ်ကိုနင်းနှာခေါင်းဆောက်လုပ်ရေးအသေးစိတ်လှေကား Dimension မာတိကာနင်းတော်မူမည်: လှေခါးထစ်နင်းအကျယ် & ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များ & codes တွေကို nosing ။ လှေခါးထစ်ကိုနင်းနယ်အကျယ်လိုအပ်ချက်များပွင့်လင်းသို့မဟုတ်ပိတ်ထားသောလှေကား Risers အားဖြင့်ကွဲပြားခြားနား။ လှေခါးထစ်အဆင့်ကိုနင်းနှာခေါင်း Projection လိုအပ်ချက်များ & လှေခါးထစ် Code ကိုကိုးကား။ ဓာတ်ပုံတွေ & ဟာသလှေခါးထစ်ကိုနင်းချို့ယွင်းချက်: ကျဉ်းနင်းအကျယ်လွန်းမြင့်မားနင်း riser, မညီမညာဖြစ်နေသောနင်း risers ။ ပျက်စီးခြင်း & လှေခါးထစ်ရေတံခွန်၏အန္တရာယ်အပေါ်လှေခါးထစ်ကိုနင်းနယ်သစ်အမျိုးအစား & ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ကုသမှု၏ Broken သို့မဟုတ်ခွဲထွက် .Effects ။ ချောလှေကားထစ်ကိုနင်းနယ်ခြေလှမ်းများ, သို့မဟုတ်အခြားပြင်ပလမ်းလျှောက်မျက်နှာပြင်၏ဘုံအကြောင်းတရားများ။ လှေခါးထစ် & အဆင့်အပြောင်းအလဲများခရီးစဉ်ကိုလျှော့ချ & ဒဏ်ရာ Fall နိုင်သလားညွှန်ပြပေးဖို့အရောင်များ၏အသုံးပြုမှု။
ကျနော်တို့ FRP စာရွက်များ, FRP မြှောင်းပုံစာရွက်များ, FRP ပွင့်လင်းစာရွက်များ, FRP အမိုးမိုးစာရွက်များ, ဖိုင်ဘာဖန်စာရွက်များ, ဖိုင်ဘာစာရွက်များ, FRP ပရိုဖိုင်းကိုစာရွက်များ, FRP AC အစာရွက်များနှင့် FRP လွင်ပြင်စာရွက်များတစ်အကွာအဝေးဖြန့်ဖြူး။
မှာခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ထူ 3-4mm ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခက်ခဲတဲ့ (FRP) Flat စာရွက်ကအလွန်အမင်းထိရောက်သော Anti-စလစ်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းအောင်, ပရီမီယံရဲ့အရည်အသွေးလင်းကျောက်သဲနဲ့စေးအစိတ်အပိုင်းများကိုပေါင်းစပ်အတွက် coated ဖြစ်ပါတယ်။ အန္တရာယ်ချော်တစ်ခုနီးပါးအမြဲတမ်းဖြေရှင်းချက်ရာပူဇော်သက္ကာကိုတိပ်ခွေနဲ့သုတ်ဆေးကျော်မကြာခဏနှစ်သက်သောရွေးချယ်မှု။ flat Sheet များအစိုဓာတ်ကိုမဆို ingress တားဆီး, ထိထိရောကျရော, နှောင်ကြိုး fix နှင့်အနားတံဆိပ်ခတ်ထားမှကော် / sealant နှင့်စွဲစေပေါင်းစပ် အသုံးပြု. ထားကြ၏နှင့် fixed နိုင်ပါသည်။ Sheet များဖြတ်ခြင်းနှင့်တိကျသောအရွယ်အစားမှပြီးဆုံးကြိုတင်အသုံးပြုမှုလွယ်ကူခြင်းအဘို့အပေးပို့ခြင်းမှတပ်ဆင်၌၎င်း, ဖြစ်စေ tool ကိုတင်ရန်စိန်သို့မဟုတ်အဖြိုက်နက်ကို အသုံးပြု. On-site ကိုအဖြတ်ခံရနိုင်ပါတယ်နိုင်ပါသည်။ ရှိပြီးသားမျက်နှာပြင်ပျက်စီးမှုသို့မဟုတ်ယိုယွင်းပျက်စီးလာရှိပင်ရှိရာစံအထူစာရွက်များကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အများအပြားအလွှာအမျိုးအစားများမှ fixed နိုင်ပါသည်။